🏻 1F3FB *light skin tone
| skin tone | type 1–2 *အသားဖြူရောင်
| အရေပြား အမျိုးအစား−၁−၂ | အီမိုဂျီ မွမ်းမံ၊ အရေပြား၊ အသားအရေ
🏼 1F3FC *medium-light skin tone
| skin tone | type3*အသားနုရောင်
| အရေပြား အမျိုးအစား−၃ | အီမိုဂျီ မွမ်းမံ၊ အရေပြား၊ အသားအရေ
🏽 1F3FD *medium skin tone
| skin tone | type4*အသားလတ်ရောင်
| အရေပြား အမျိုးအစား−၄ | အီမိုဂျီ မွမ်းမံ၊ အရေပြား၊ အသားအရေ
🏾 1F3FE *medium-dark skin tone
| skin tone | type5*အသားညိုရောင်
| အရေပြား အမျိုးအစား−၅ | အီမိုဂျီ မွမ်းမံ၊ အရေပြား၊ အသားအရေ
🏿 1F3FF *dark skin tone
| skin tone | type6*အသားမဲရောင်
| အရေပြား အမျိုးအစား−၆ | အီမိုဂျီ မွမ်းမံ၊ အရေပြား၊ အသားအရေ
😀 1F600 *grinning face
| face | grin *ပြုံးဖြဲဖြဲ မျက်နှာ
| ပြုံးဖြဲဖြဲ၊ မျက်နှာ
😁 1F601 *beaming face with smiling eyes
| eye | face | grin | smile *ပြုံးနေသည့်မျက်လုံးများဖြင့် ပီတိဖြာနေသော မျက်နှာ
| မျက်လုံးများ ပြုံးနေသည့် ပြုံးဖြဲဖြဲ မျက်နှာ | မျက်လုံး၊ ပြုံး၊ ပြုံးဖြဲဖြဲ၊ မျက်နှာ
😂 1F602 *face with tears of joy
| face | joy | laugh | tear *ပျော်ရွှင်မှု မျက်ရည်များဖြင့် မျက်နှာ
| ပျော်ရွှင်မှု၊ ရယ်ရွှင်မှု၊ မျက်ရည်၊ မျက်နှာ
🤣 1F923 *rolling on the floor laughing
| face | floor | laugh | rolling *ကြမ်းပေါ်လှိမ့်ပြီး ရယ်နေသည်
| ကြမ်းပြင် | ရယ်မောသည် | ရုပ် | လှိမ့်၍
😃 1F603 *grinning face with big eyes
| face | mouth | open | smile *မျက်လုံးပြူးဖြင့် ပြုံးဖြဲဖြဲ မျက်နှာ
| ပါးစပ်ဟနေသည့် အပြုံးမျက်နှာ | ပါးစပ်၊ ဟ၊ ပြုံး၊ မျက်နှာ
😄 1F604 *grinning face with smiling eyes
| eye | face | mouth | open | smile *ပြုံးနေသည့်မျက်လုံးများဖြင့် ပြုံးဖြဲဖြဲ မျက်နှာ
| ပါးစပ်ဟနေကာ မျက်လုံးများ ပြုံးနေသည့် အပြုံးမျက်နှာ | ပါးစပ်၊ ဟ၊ မျက်လုံး၊ ပြုံး၊ မျက်နှာ
😅 1F605 *grinning face with sweat
| cold | face | open | smile | sweat *ဇောချွေးပြန်နေသည့် ပြုံးဖြဲဖြဲ မျက်နှာ
| ပါးစပ်ဟနေကာ ဇောချွေးပြန်နေသည့် အပြုံးမျက်နှာ | ပါးစပ်၊ ဟ၊ ဇောချွေး၊ ပြုံး၊ မျက်နှာ
😆 1F606 *grinning squinting face
| face | laugh | mouth | open | satisfied | smile *မျက်စိကို ကြိတ်မှိတ်ထားသည့် ပြုံးဖြဲဖြဲ မျက်နှာ
| ပါးစပ်ဟနေကာ မျက်စိကို ကြိတ်မှိတ်ထားသည့် အပြုံးမျက်နှာ | ပါးစပ်၊ ဟ၊ မျက်စိ၊ မှိတ်၊ ပြုံး၊ မျက်နှာ
😉 1F609 *winking face
| face | wink *မျက်စိမှိတ်ပြနေသည့် မျက်နှာ
| မျက်စိမှိတ်၊ မျက်နှာ
😊 1F60A *smiling face with smiling eyes
| blush | eye | face | smile *မျက်လုံးများ ပြုံးနေသည့် အပြုံးမျက်နှာ
| ရှက်သွေးဖြန်း၊ မျက်လုံး၊ ပြုံး၊ မျက်နှာ
😋 1F60B *face savoring food
| delicious | face | savouring | smile | um | yum
en_CA: *face savoring food
| face savouring food
en_001: *face savouring food
| delicious | face | savouring | smile | um | yum *အစားအရသာခံနေသည့်မျက်နှာ
| အရသာခံနေသည့် မျက်နှာ | အရသာရှိ၊ မျက်နှာ၊ တစိမ့်စိမ့်အရာသာခံ၊ အပြုံး၊ အမ်၊ ယမ်
😎 1F60E *smiling face with sunglasses
| bright | cool | eye | eyewear | face | glasses | smile | sun | sunglasses *နေကာမျက်မှန်ဖြင့် အပြုံးမျက်နှာ
| နေကာမျက်မှန်၊ နေ၊ တောက်ပ၊ မျက်နှာ၊ ပြုံး၊ မိုးလေဝသ၊ မျက်မှန်၊
😍 1F60D *smiling face with heart-eyes
| eye | face | love | smile
en_CA: *smiling face with heart eyes *နှလုံးပုံစံ မျက်လုံးများနှင့် အပြုံးမျက်နှာ
| နှလုံး၊ ချစ်၊ ပြုံး၊ မျက်နှာ
😘 1F618 *face blowingakiss
| face | kiss *အနမ်းကို ပို့ပေးနေသည့် မျက်နှာ
| အနမ်း၊ နှလုံး၊ မျက်နှာ
😗 1F617 *kissing face
| face | kiss *နမ်းနေသည့် မျက်နှာ
| နမ်း၊ မျက်နှာ
😙 1F619 *kissing face with smiling eyes
| eye | face | kiss | smile *ပြုံးနေသည့် မျက်လုံးများနှင့် နမ်းနေသည့် မျက်နှာ
| ပြုံး၊ မျက်လုံး၊ မျက်နှာ၊ နမ်း
😚 1F61A *kissing face with closed eyes
| closed | eye | face | kiss *မျက်စိမှိတ်ထားကာ နမ်းနေသည့် မျက်နှာ
| မျက်စိ၊ မှိတ်၊ နမ်း၊ မျက်နှာ
☺ 263A *smiling face
| face | outlined | relaxed | smile *ပြုံးနေသေည့် မျက်နှာ
| ပြုံး၊ မျက်နှာ၊ သက်တောင့်သက်သာ၊
🙂 1F642 *slightly smiling face
| face | smile *မသိမသာ ပြုံးနေသည့် မျက်နှာ
| ပြုံး၊ မျက်နှာ
🤗 1F917 *hugging face
| face | hug | hugging *ပွေ့ဖက်နေသည့် မျက်နှာ
| ပွေ့ဖက်၊ မျက်နှာ
🤩 1F929 *star-struck
| eyes | face | grinning | star *ကြယ်ပွင့်လေးနဲ့ မျက်နှာ
| ပြုံးဖြဲဖြဲ၊ မျက်နှာ၊ ကြယ်ပွင့်၊ မျက်လုံး
🤔 1F914 *thinking face
| face | thinking *စဥ်းစားနေပုံ မျက်နှာ
| စဉ်းစားနေပုံ | စဉ်းစားနေပုံမျက်နှာ | မျက်နှာ
🤨 1F928 *face with raised eyebrow
| distrust | skeptic
en_001: *face with raised eyebrow
| distrust | sceptic | skeptic *မျက်ခုံးတွန့် မျက်နှာ
| သံသယမကင်းတဲ့ မျက်နှာ
😐 1F610 *neutral face
| deadpan | face | neutral *မျက်နှာသေ
| မျက်နှာသေ၊ မျက်နှာ၊
😑 1F611 *expressionless face
| expressionless | face | inexpressive | unexpressive *ခံစားမှုမဲ့ မျက်နှာ
| မျက်နှာ၊ ခံစားမှုမဲ့၊ အသက်မပါ
😶 1F636 *face without mouth
| face | mouth | quiet | silent *ပါးစပ်မပါသော မျက်နှာ
| ပါးစပ်၊ မျက်နှာ၊ တိတ်၊ ငြိမ်
🙄 1F644 *face with rolling eyes
| eyes | face | rolling *ပျင်းစရာကောင်းသောအကြောင်းအရာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောမျက်နှာ
| မျက်နှာ | မျက်လုံး | မျက်လုံးပင့်ကြည့်
😏 1F60F *smirking face
| face | smirk *လှောင်ပြုံးမျက်နှာ
| မျက်နှာ | လှောင်ပြောင်
😣 1F623 *persevering face
| face | persevere *အကူအညီမဲ့သည့် မျက်နှာ
| မျက်နှာ | အကူအညီမဲ့
😥 1F625 *sad but relieved face
| disappointed | face | relieved | whew *ဝမ်းနည်းသော်လည်း စိတ်သက်သာရာရသည့် မျက်နှာ
| မျက်နှာ | ဝမ်းနည်း | အပူလုံးကျ
😮 1F62E *face with open mouth
| face | mouth | open | sympathy *ပါးစပ်အဟောင်းသားနှင့် မျက်နှာ
| ပါးစပ် | မျက်နှာ | သနား
🤐 1F910 *zipper-mouth face
| face | mouth | zipper
en_001: *zipper-mouth face
| face | mouth | zip | zipper *စကားမပြောဘဲ ပါးစပ်ပိတ်ထားသည့် မျက်နှာ
| ပါးစပ် | ပါးစပ်ပိတ် | မျက်နှာ
😯 1F62F *hushed face
| face | hushed | stunned | surprised *အံ့ဩသည့်မျက်နှာ
| မျက်နှာ | မှင်သက် | အံ့ဩ
😪 1F62A *sleepy face
| face | sleep *အိပ်ငိုက်သည့်မျက်နှာ
| မျက်နှာ | အိပ်ငိုက်
😫 1F62B *tired face
| face | tired *ပင်ပန်းသည့်မျက်နှာ
| ပင်ပန်း | မျက်နှာ
😴 1F634 *sleeping face
| face | sleep | zzz *အိပ်နေသည့်မျက်နှာ
| မျက်နှာ | ဟောက်သံ | အိပ်
😌 1F60C *relieved face
| face | relieved *စိတ်သက်သာရာရသည့် မျက်နှာ
| စိတ်သက်သာရာရ | မျက်နှာ
😛 1F61B *face with tongue
| face | tongue *လျှာထုတ်ထားသည့် မျက်နှာ
| မျက်နှာ | လျှာ
😜 1F61C *winking face with tongue
| eye | face | joke | tongue | wink *လျှာထုတ်ထားပြီး မျက်လုံးတစ်ဖက် မှိတ်ပြသည့် မျက်နှာ
| မျက်နှာ | မျက်လုံး | လျှာ | လှောင်
😝 1F61D *squinting face with tongue
| eye | face | horrible | taste | tongue *မျက်လုံးများပိတ်ပြီး လျှာထုတ်ပြသည့် မျက်နှာ
| ဆိုးရွား | မျက်နှာ | မျက်လုံး | လျှာ
🤤 1F924 *drooling face
| drooling | face *သွားရည်ကျနေသည့်ရုပ်
| ရုပ် | သွားရည်ကျ
😒 1F612 *unamused face
| face | unamused | unhappy *စိတ်အလိုမကျသည့် မျက်နှာ
| စိတ်အလိုမကျ | မပျော်ရွှင် | မျက်နှာ
😓 1F613 *downcast face with sweat
| cold | face | sweat *ချွေးစေးပြန်သည့်မျက်နှာ
| ချွေးစေးပြန် | မျက်နှာ
😔 1F614 *pensive face
| dejected | face | pensive *စဉ်းစားငိုင်တွေသည့် မျက်နှာ
| ငိုင်တိုင်တိုင် | စဉ်းစား | မျက်နှာ
😕 1F615 *confused face
| confused | face *ဇဝေဇဝါဖြစ်သည့် မျက်နှာ
| ဇဝေဇဝါဖြစ် | မျက်နှာ
🙃 1F643 *upside-down face
| face | upside-down
en_CA: *upside-down face
| face | upside down *ဇောက်ထိုး မျက်နှာ
| ဇောက်ထိုး၊ မျက်နှာ
🤑 1F911 *money-mouth face
| face | money | mouth *​ငွေပါးစပ် မျက်နှာ
| ​ငွေ၊ ပါးစပ်၊ မျက်နှာ
😲 1F632 *astonished face
| astonished | face | shocked | totally *အံ့အားသင့်နေသော မျက်နှာ
| အံ့အားသင့်၊ ကြက်သေသေ၊ လုံးဝ၊ မျက်နှာ
☹ 2639 *frowning face
| face | frown *မျက်မှောင်ကြုတ်ထားသည့် မျက်နှာ
| မျက်နှာ | ဝမ်းနည်း | ဝမ်းနည်းကြေကွဲသည့် မျက်နှာ
🙁 1F641 *slightly frowning face
| face | frown *အနည်းငယ် မျက်မှောင်ကြုတ်ထားသည့် မျက်နှာ
| မျက်နှာ | ဝမ်းနည်း | အနည်းငယ်ဝမ်းနည်းသည့် မျက်နှာ
😖 1F616 *confounded face
| confounded | face *မွှန်ထူသွားသည့် မျက်နှာ
| မျက်နှာ | မွှန်ထူ
😞 1F61E *disappointed face
| disappointed | face *စိတ်ပျက်နေသော မျက်နှာ
| စိတ်ပျက်၊ မျက်နှာ
😟 1F61F *worried face
| face | worried *စိတ်ပူနေသော မျက်နှာ
| စိတ်ပူ၊ မျက်နှာ
😤 1F624 *face with steam from nose
| face | triumph | won *နှာခေါင်းမှ အငွေ့ထွက်နေသော မျက်နှာ
| မျက်နှာ၊ အောင်ပြီ၊ နိုင်ပြီ
😢 1F622 *crying face
| cry | face | sad | tear *ငိုနေသော မျက်နှာ
| ငို၊ ဝမ်းနည်း၊ မျက်ရည်၊ မျက်နှာ
😭 1F62D *loudly crying face
| cry | face | sad | sob | tear *ကျယ်လောင်စွာ ငိုနေသော မျက်နှာ
😦 1F626 *frowning face with open mouth
| face | frown | mouth | open *မျက်မှောင်ကြုတ်နေကာ ပါးစပ်ဟထားသည့် မျက်နှာ
| မျက်မှောင်ကြုတ်၊ ပါးစပ်၊ ဖွင့်၊ မျက်နှာ
😧 1F627 *anguished face
| anguished | face *မချိတင်ကဲ မျက်နှာ
| မချိတင်ကဲ၊ မျက်နှာ
😨 1F628 *fearful face
| face | fear | fearful | scared *စိုးရိမ်နေသော မျက်နှာ
| စိုးရိမ်၊ ပူပန်၊ ကြောက်၊ မျက်နှာ
😩 1F629 *weary face
| face | tired | weary *ငြီးငွေ့နေသော မျက်နှာ
| ငြီးငွေ့၊ ပင်ပန်း၊ မျက်နှာ
🤯 1F92F *exploding head
en_001: *exploding head
| mind blown | shocked *ဒေါသပေါက်ကွဲခေါင်း
😬 1F62C *grimacing face
| face | grimace *ရှုံ့မဲ့နေသော မျက်နှာ
| ရှုံ့မဲ့၊ မျက်နှာ
😰 1F630 *anxious face with sweat
| blue | cold | face | mouth | open | rushed | sweat *ပါးစပ်ဟနေကာ ဇောချွေးပြန်နေသော မျက်နှာ
| ပါးစပ်၊ ဖွင့်၊ ဇောချွေး၊ အပြာရောင်၊ ချွေး၊ မျက်နှာ
😱 1F631 *face screaming in fear
| face | fear | fearful | munch | scared | scream *ကြောက်လန့်စွာ အော်နေသော မျက်နှာ
| အော်၊ ကြောက်၊ လန့်၊ မျက်နှာ
😳 1F633 *flushed face
| dazed | face | flushed *အားမာန်ပြည့်နေသော မျက်နှာ
| အားမန်ပြည့်နေသော မျက်နှာ | အား၊ မန်၊ ပြည့်နေ၊ မျက်နှာ
🤪 1F92A *zany face
| eye | goofy | large | small *ရူးနှမ်းနှမ်းမျက်နှာ
| ကြီး၊ သေး၊ မျက်နှာ
😵 1F635 *dizzy face
| dizzy | face *မူးဝေနေသော မျက်နှာ
| မူးဝေ၊ မျက်နှာ
😡 1F621 *pouting face
| angry | face | mad | pouting | rage | red *စူတူတူ မျက်နှာ
| စူတူတူ၊ မျက်နှာ၊ စိတ်ဆိုး၊ ရူး၊ နီမြန်း
😠 1F620 *angry face
| angry | face | mad *ဒေါသထွက်နေသော မျက်နှာ
| ဒေါသ၊ ရူး၊ စိတ်ဆိုး၊ မျက်နှာ
🤬 1F92C *face with symbols on mouth
en_001: *face with symbols on mouth
| cursing | expletive | swearing *ပါးစပ်သင်္ကေတနဲ့ မျက်နှာ
| သစ္စာဆိုတဲ့ မျက်နှာ
😷 1F637 *face with medical mask
| cold | doctor | face | mask | medicine | sick
en_001: *face with medical mask
| cold | doctor | face | ill | mask | medicine | poorly | sick *ကျန်းမာရေး မျက်နှာဖုံးနှင့် မျက်နှာ
| ကျန်းမာရေး၊ မျက်နှာဖုံး၊ မျက်နှာ
🤒 1F912 *face with thermometer
| face | ill | sick | thermometer
en_001: *face with thermometer
| face | ill | poorly | sick | thermometer *သာမိုမီတာနှင့် မျက်နှာ
| သာမိုမီတာ၊ မျက်နှာ
🤕 1F915 *face with head-bandage
| bandage | face | hurt | injury
en_001: *face with head bandage
en_CA: *face with head-bandage
| face with head bandage *ပတ်တီးနှင့် မျက်နှာ
| ပတ်တီး၊ မျက်နှာ
🤢 1F922 *nauseated face
| face | nauseated | vomit *အော်ဂလီဆန်သည့်ရုပ်
| ရုပ် | အန်သည် | အောက်ဂလီဆန်သည်
🤮 1F92E *face vomiting
| sick | vomit *အန်ထွက်သည့် မျက်နှာ
| အန်သည်၊ ဖျားသည်
🤧 1F927 *sneezing face
| face | gesundheit | sneeze
en_001: *sneezing face
| bless you | face | gesundheit | sneeze *နှာချေသည့်ရုပ်
| ဆိတ်ဖွား | နှာချေသည် | ရုပ်
😇 1F607 *smiling face with halo
| angel | face | fairy tale | fantasy | halo | innocent | smile *ရောင်လျှံစက်ဝန်းနှင့် မျက်နှာ
| ရောက်လျှံစက်၀န်းနှင့် မျက်နှာ | ရောက်လျှံစက်၀န်း၊ မျက်နှာ၊ ဒဏ္ဍာရီ၊ ပုံပြင်၊ စိတ်ကူးယဥ်၊ ပြုံး
🤠 1F920 *cowboy hat face
| cowboy | cowgirl | face | hat *နွားကျောင်းသား ဦးထုပ် ဆောင်းထားသည့်ရုပ်
| နွားကျောင်းသား | နွားကျောင်းသူမ | ရုပ် | ဦးထုပ်
🤡 1F921 *clown face
| clown | face *လူပြက်ရုပ်
| ရုပ် | လူပြက်
🤥 1F925 *lying face
| face | lie | pinocchio *လူလိမ်ရုပ်
| ရုပ် | လိမ်လည်
🤫 1F92B *shushing face
| quiet | shush *ရှုးတိုးတိုးရုပ်နဲ့ မျက်နှာ
| ရှုးတိုးတိုး၊ ငြိမ်သက်
🤭 1F92D *face with hand over mouth
en_001: *face with hand over mouth
| oops | whoops *ပါးစပ်ကို လက်နဲ့ပိတ်တဲ့ မျက်နှာ
🧐 1F9D0 *face with monocle
| stuffy *တစ်ဖက်တည်းပါတဲ့ မျက်မှန်နှင့် မျက်နှာ
| လှောင်နေသည့် မျက်နှာ
🤓 1F913 *nerd face
| face | geek | nerd *တစ်စုံတစ်ရာကို ရူးသွပ်သူ၏ မျက်နှာ
| ပညာရှင် | မျက်နှာ | ရူးသွပ်သူ
😈 1F608 *smiling face with horns
| face | fairy tale | fantasy | horns | smile
en_AU: *smiling face with horns
| devil | face | fantasy | horns | smile *ဦးချိုနှင့် ပြုံးနေသော မျက်နှာ
| မျက်နှာ၊ ပုံပြင်၊ စိတ်ကူးယဥ်၊ ပြုံး၊ ဦးချိုများ
👿 1F47F *angry face with horns
| demon | devil | face | fairy tale | fantasy | imp *ဆိုးပေ
| မကောင်းဆိုးဝါး၊ ဘီလူး၊ ပုံပြင်၊ စိတ်ကူးယဥ်
👹 1F479 *ogre
| creature | face | fairy tale | fantasy | monster *ဘီလူး
| ဘီလူး၊ မျက်နှာ၊ အကောင်၊ ပုံပြင်၊ စိတ်ကူးယဥ်၊ ဂျပန်
👺 1F47A *goblin
| creature | face | fairy tale | fantasy | monster *နတ်ဆိုးကလေး
| နတ်ဆိုး၊ ဘီလူး၊ မျက်နှာ၊ အကောင်၊ ပုံပြင်၊ စိတ်ကူးယဥ်၊ ဂျပန်
💀 1F480 *skull
| death | face | fairy tale | monster *ဦးခေါင်းခွံ
| ခန္ဓာကိုယ်၊ မရဏ၊ မျက်နှာ၊ ဘီလူး၊ ပုံပြင် | ဦးခွံ
☠ 2620 *skull and crossbones
| crossbones | death | face | monster | skull *ဦးခေါင်းခွံနှင့် အရိုးကြက်ခြေခတ်ပုံ
| ဦးခွံနှင့် ကြက်ခြေခတ်အရိုးများ | ဦးခွံ၊ ခန္ဓာကိုယ်၊ မရဏ၊ မျက်နှာ၊ ဘီလူး၊ အရိုးများ
👻 1F47B *ghost
| creature | face | fairy tale | fantasy | monster
| creature | face | fairy tale | fantasy | monster | spectre *တစ္ဆေ
| တစ္ဆေ၊ ဘီလူး၊ ပုံပြင်၊ စိတ်ကူးယဥ်၊ မျက်နှာ
👽 1F47D *alien
| creature | extraterrestrial | face | fairy tale | fantasy | monster | ufo *ဂြိုဟ်သား
| ဂြိုဟ်သား၊ ဘီလူး၊ ပုံပြင်၊ စိတ်ကူးယဥ်၊ မျက်နှာ၊ အာကာသ၊ ufo
👾 1F47E *alien monster
| alien | creature | extraterrestrial | face | fairy tale | fantasy | monster | ufo *မကောင်းဆိုးဝါး ဂြိုဟ်သား
| မကောင်းဆိုးဝါး၊ ဂြိုဟ်သား၊ ဘီလူး၊ ပုံပြင်၊ စိတ်ကူးယဥ်၊ မျက်နှာ၊ အာကာသ၊ ufo
🤖 1F916 *robot face
| face | monster | robot *စက်ရုပ် မျက်နှာ
| စက်ရုပ်၊ အကောင်းဆိုးဝါး၊ မျက်နှာ
💩 1F4A9 *pile of poo
| comic | dung | face | monster | poo | poop *ချေးပုံ
| ချေး၊ ဟာသ၊ ရယ်စရာ၊ မကောင်းဆိုးဝါး၊ မျက်နှာ
😺 1F63A *grinning cat face
| cat | face | mouth | open | smile *ပြုံးဖြဲဖြဲလုပ်နေသော ကြောင် မျက်နှာ
| ပါးစပ်ဟနေကာ ပြုံးနေသော ကြောင် မျက်နှာ | ပါးစပ်၊ ဖွင့်၊ ပြုံး၊ ကြောင်၊ မျက်နှာ
😸 1F638 *grinning cat face with smiling eyes
| cat | eye | face | grin | smile *ပြုံးနေသော မျက်လုံးများနှင့် ပြုံးဖြဲဖြဲ ကြောင် မျက်နှာ
| ပြုံး၊ မျက်လုံး၊ ပြုံးဖြဲဖြဲ၊ ကြောင်၊ မျက်နှာ
😹 1F639 *cat face with tears of joy
| cat | face | joy | tear *ပျော်ရွှင်မှု မျက်ရည်များဖြင့် ကြောင် မျက်နှာ
| ပျော်ရွှင်၊ မျက်ရည်၊ ကြောင်၊ မျက်နှာ
😻 1F63B *smiling cat face with heart-eyes
| cat | eye | face | love | smile
en_CA: *smiling cat face with heart eyes *နှလုံးပုံစံ မျက်လုံးများနှင့် ပြုံးနေသည့် ကြောင်၏ မျက်နှာ
| နှလုံး၊ မျက်လုံး၊ ပြုံး၊ ကြောင်၊ မျက်နှာ၊ ချစ်
😼 1F63C *cat face with wry smile
| cat | face | ironic | smile | wry
en_001: *cat face with wry smile
| cat | face | ironic | smile | smirk | wry *ခနဲ့တဲ့တဲ့ ပြုံးနေသော ကြောင် မျက်နှာ
| ခနဲ့၊ သရော်၊ ပြုံး၊ ကြောင်၊ မျက်နှာ
😽 1F63D *kissing cat face
| cat | eye | face | kiss *မျက်စိမှိတ်ထားကာ နမ်းနေသည့် ကြောင် မျက်နှာ
| မျက်စိ၊ မှိတ်၊ နမ်း၊ ကြောင်၊ မျက်နှာ
🙀 1F640 *weary cat face
| cat | face | oh | surprised | weary *ငြီးငွေ့နေသော ကြောင် မျက်နှာ
| ငြီးငွေ့၊ အံ့အားသင့်၊ ပင်ပန်း၊ ကြောင်၊ မျက်နှာ
😿 1F63F *crying cat face
| cat | cry | face | sad | tear *ငိုနေသော ကြောင် မျက်နှာ
| ငို၊ ဝမ်းနည်း၊ မျက်ရည်၊ ကြောင်၊ မျက်နှာ
😾 1F63E *pouting cat face
| cat | face | pouting *စိတ်တိုနေသည့် ကြောင်မျက်နှာ
| ကြောင် | စိတ်တို | မျက်နှာ
🙈 1F648 *see-no-evil monkey
| evil | face | forbidden | gesture | monkey | no | not | prohibited | see *မကောင်းတာကို မမြင်လို
| မကောင်းဆိုးဝါး၊ မျင်နှာ၊ တားမြစ်၊ မြင်၊ အမူအရာ၊ မျောက်၊ လက်ဟန်
🙉 1F649 *hear-no-evil monkey
| evil | face | forbidden | gesture | hear | monkey | no | not | prohibited *မကောင်းတာကို မကြားလို
| မကောင်းဆိုးဝါး၊ မျင်နှာ၊ တားမြစ်၊ ကြား၊ အမူအရာ၊ မျောက်၊ လက်ဟန်
🙊 1F64A *speak-no-evil monkey
| evil | face | forbidden | gesture | monkey | no | not | prohibited | speak *မကောင်းတာကို မပြောလို
| မကောင်းဆိုးဝါး၊ မျင်နှာ၊ တားမြစ်၊ ပြော၊ အမူအရာ၊ မျောက်၊ လက်ဟန်
👶 1F476 *baby
| young *ကလေးငယ်
👶🏽 1F476 1F3FD *baby: medium skin tone
| baby | young | medium skin tone *ကလေးငယ် − အသားလတ်ရောင်
| ကလေးငယ် | အသားလတ်ရောင်
🧒 1F9D2 *child
| gender-neutral | young
| gender-neutral | toddler | young *ကလေး
| လိင်မခွဲခြားသော၊ ငယ်ရွယ်သော
👦 1F466 *boy
| young *ယောက်ျားကလေး
👦🏻 1F466 1F3FB *boy: light skin tone
| boy | young | light skin tone *ယောက်ျားကလေး − အသားဖြူရောင်
| ယောက်ျားကလေး | အဖို | အသားဖြူရောင်
👧 1F467 *girl
| Virgo | young | zodiac *မိန်းကလေး
| မိန်းကလေး၊ အပျို၊ ရာသီ
🧑 1F9D1 *adult
| gender-neutral *အရွယ်ရောက်သူ
👨 1F468 *man *အမျိုးသား
👩 1F469 *woman *အမျိုးသမီး
👩🏿 1F469 1F3FF *woman: dark skin tone
| woman | dark skin tone *အမျိုးသမီး − အသားမဲရောင်
| အမ | အမျိုးသမီး | အသားမဲရောင်
🧓 1F9D3 *older adult
| gender-neutral | old *သက်ကြီး အရွယ်ရောက်ပြီးသူ
| လိင်မခွဲခြားသော | သက်ကြီး
👴 1F474 *old man
| man | old *သက်ကြီး အမျိုးသား
| သက်ကြီး၊ အမျိုးသား
👵 1F475 *old woman
| old | woman *သက်ကြီး အမျိုးသမီး
| သက်ကြီး၊ အမျိုးသမီး
👨‍⚕ 1F468 200D 2695 *man health worker
| doctor | healthcare | man | nurse | therapist
en_CA: *man health worker
| doctor | health care | man | nurse | therapist *အမျိုးသား ကျန်းမာရေးလုပ်သား
| ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု | ဆရာဝန် | အဖို | အမျိုးသား
👨🏻‍⚕️ 1F468 1F3FB 200D 2695 FE0F *man health worker: light skin tone
| doctor | healthcare | man | man health worker | nurse | therapist | light skin tone
en_CA: *man health worker: light skin tone
| doctor | health care | man | man health worker | nurse | therapist | light skin tone *အမျိုးသား ကျန်းမာရေးလုပ်သား − အသားဖြူရောင်
| ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု | ဆရာဝန် | အဖို | အမျိုးသား | အမျိုးသား ကျန်းမာရေးလုပ်သား | အသားဖြူရောင်
👩‍⚕ 1F469 200D 2695 *woman health worker
| doctor | healthcare | nurse | therapist | woman
en_CA: *woman health worker
| doctor | health care | nurse | therapist | woman *အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးလုပ်သား
| ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု | ဆရာဝန် | သူနာပြု | အမ
👨‍🎓 1F468 200D 1F393 *man student
| graduate | man | student *ကျောင်းသား
| ဘွဲ့ရ | အမျိုးသား
👩‍🎓 1F469 200D 1F393 *woman student
| graduate | student | woman *ကျောင်းသူ
| ဘွဲ့ရ | အမျိုးသမီး
👨‍🏫 1F468 200D 1F3EB *man teacher
| instructor | man | professor | teacher *ဆရာ
| နည်းပြ | ပါမောက္ခ | အမျိုးသား
👩‍🏫 1F469 200D 1F3EB *woman teacher
| instructor | professor | teacher | woman *ဆရာမ
| နည်းပြ | ပါမောက္ခ | အမျိုးသမီး
👨‍⚖ 1F468 200D 2696 *man judge
| justice | man | scales *အမျိုးသား တရားသူကြီး
| တရားသူကြီး | အမျိုးသား
👨🏿‍⚖ 1F468 1F3FF 200D 2696 *man judge: dark skin tone
| justice | man | man judge | scales | dark skin tone *အမျိုးသား တရားသူကြီး − အသားမဲရောင်
| တရားသူကြီး | အမျိုးသား | အသားမဲရောင်
👩‍⚖ 1F469 200D 2696 *woman judge
| judge | scales | woman *အမျိုးသမီး တရားသူကြီး
| တရားသူကြီး | အမျိုးသမီး
👩🏼‍⚖ 1F469 1F3FC 200D 2696 *woman judge: medium-light skin tone
| judge | scales | woman | medium-light skin tone *အမျိုးသမီး တရားသူကြီး − အသားနုရောင်
| တရားသူကြီး | အမျိုးသမီး | အသားနုရောင်
👨‍🌾 1F468 200D 1F33E *man farmer
| farmer | gardener | man | rancher
en_001: *man farmer
| farmer | gardener | man *လယ်သမား
| ကောက်စိုက်သူ | ပန်းပျိုးသူ | အမျိုးသား
👩‍🌾 1F469 200D 1F33E *woman farmer
| farmer | gardener | rancher | woman
en_001: *woman farmer
| farmer | gardener | woman *လယ်သူမ
| ကောက်စိုက်သမ | ပန်းပျိုးသူ | အမျိုးသမီး
👨‍🍳 1F468 200D 1F373 *man cook
| chef | cook | man *အမျိုးသား စားဖိုမှူး
| စားဖိုမှူး | အမျိုးသား
👩‍🍳 1F469 200D 1F373 *woman cook
| chef | cook | woman *အမျိုးသမီး စားဖိုမှူး
| စားဖိုမှူး | အမျိုးသမီး
👨‍🔧 1F468 200D 1F527 *man mechanic
| electrician | man | mechanic | plumber | tradesperson
en_001: *man mechanic
| electrician | man | mechanic | plumber | tradesman | tradesperson *အမျိုးသား စက်ပြင်သူ
| စက်ပြင်သူ | ပိုက်ဆက်သူ | အမျိုးသား | အရောင်းအဝယ်သမား
👩‍🔧 1F469 200D 1F527 *woman mechanic
| electrician | mechanic | plumber | tradesperson | woman
en_001: *woman mechanic
| electrician | mechanic | plumber | tradesperson | tradeswoman | woman *အမျိုးသမီး စက်ပြင်သူ
| စက်ပြင်သူ | ပိုက်ဆက်သူ | အမျိုးသမီး | အရောင်းအဝယ်သမား
👨‍🏭 1F468 200D 1F3ED *man factory worker
| assembly | factory | industrial | man | worker *စက်ရုံလုပ်သား
| စက်ရုံ | အမျိုးသား | အလုပ်သမား
👩‍🏭 1F469 200D 1F3ED *woman factory worker
| assembly | factory | industrial | woman | worker *စက်ရုံအလုပ်သမ
| စက်ရုံ | အမျိုးသမီး | အလုပ်သမ
👨‍💼 1F468 200D 1F4BC *man office worker
| architect | business | man | manager | office | white-collar
en_AU, en_CA: *man office worker
| architect | business | man | manager | office | white collar *အမျိုးသား ရုံးဝန်ထမ်း
| စီးပွားရေး | ရုံး | အင်ဂျင်နီယာ | အမျိုးသား
👩‍💼 1F469 200D 1F4BC *woman office worker
| architect | business | manager | office | white-collar | woman
en_AU, en_CA: *woman office worker
| architect | business | manager | office | white collar | woman *အမျိုးသမီး ရုံးဝန်ထမ်း
| စီးပွားရေး | ရုံး | အင်ဂျင်နီယာ | အမျိုးသမီး
👨‍🔬 1F468 200D 1F52C *man scientist
| biologist | chemist | engineer | man | mathematician | physicist | scientist *အမျိုးသား သိပ္ပံပညာရှင်
| ဇီဝဗေဒပညာရှင် | ဓာတုဗေဒပညာရှင် | သင်္ချာပညာရှင် | သိပ္ပံပညာရှင်
👩‍🔬 1F469 200D 1F52C *woman scientist
| biologist | chemist | engineer | mathematician | physicist | scientist | woman *အမျိုးသမီး သိပ္ပံပညာရှင်
👨‍💻 1F468 200D 1F4BB *man technologist
| coder | developer | inventor | man | software | technologist *အမျိုးသား နည်းပညာရှင်
| ကုဒ်ရေးသူ | ဆော့ဖ်ဝဲ | ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာ | နည်းပညာရှင် | အမျိုးသား
👩‍💻 1F469 200D 1F4BB *woman technologist
| coder | developer | inventor | software | technologist | woman *အမျိုးသမီး နည်းပညာရှင်
| ကုဒ်ရေးသူ | ဆော့ဖ်ဝဲ | ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာ | နည်းပညာရှင် | အမျိုးသမီး
👨‍🎤 1F468 200D 1F3A4 *man singer
| actor | entertainer | man | rock | singer | star *အမျိုးသား အဆိုတော်
| နာမည်ကျော် | ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူ | သရုပ်ဆောင် | အဆိုတော် | အမျိုးသား
👩‍🎤 1F469 200D 1F3A4 *woman singer
| actor | entertainer | rock | singer | star | woman *အမျိုးသမီး အဆိုတော်
| နာမည်ကျော် | ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူ | သရုပ်ဆောင် | အဆိုတော် | အမျိုးသမီး
👨‍🎨 1F468 200D 1F3A8 *man artist
| artist | man | palette *ပန်းချီဆရာ
| ဆေးရောင်ခြယ် | အနုပညာရှင်
👩‍🎨 1F469 200D 1F3A8 *woman artist
| artist | palette | woman *ပန်းချီဆရာမ
👨‍✈ 1F468 200D 2708 *man pilot
| man | pilot | plane *အမျိုးသား လေယာဉ်မှူး
| လေယာဉ် | လေယာဉ်မှူး | အမျိုးသား
👩‍✈ 1F469 200D 2708 *woman pilot
| pilot | plane | woman *အမျိုးသမီး လေယာဉ်မှူး
| လေယာဉ် | လေယာဉ်မှူး | အမျိုးသမီး
👨‍🚀 1F468 200D 1F680 *man astronaut
| astronaut | man | rocket *အမျိုးသား အာကာသယာဉ်မှူး
| ဒုံးပျံ | အမျိုးသား အာကာသလေယာဉ်မှူး | အာကာသ | အာကာသလေယာဉ်မှူး
👩‍🚀 1F469 200D 1F680 *woman astronaut
| astronaut | rocket | woman *အမျိုးသမီး အာကာသယာဉ်မှူး
| ဒုံးပျံ | အမျိုးသမီး အာကာသလေယာဉ်မှူး | အာကာသ | အာကာသလေယာဉ်မှူး
👨‍🚒 1F468 200D 1F692 *man firefighter
| firefighter | firetruck | man
en_001: *man firefighter
| fire engine | firefighter | fireman | man
en_AU, en_CA: *man firefighter
| fire truck | firefighter | man *မီးသတ်သမား
| မီးသတ်ကား | အမျိုးသား
👩‍🚒 1F469 200D 1F692 *woman firefighter
| firefighter | firetruck | woman
en_001: *woman firefighter
| fire engine | firefighter | firewoman | woman
en_AU, en_CA: *woman firefighter
| fire truck | firefighter | woman *မီးသတ်သမ
| မီးသတ်ကား | အမျိုးသမီး
👮 1F46E *police officer
| cop | officer | police *ရဲအရာရှိ
| ပုလိပ် အရာရှိ | ပုလိပ်၊ ရဲ၊ အရာရှိ
👮‍♂ 1F46E 200D 2642 *man police officer
| cop | man | officer | police
en_001: *man police officer
| cop | man | officer | police | policeman *အမျိုးသား ရဲအရာရှိ
| ရဲ | အမျိုးသား | အရာရှိ
👮🏼‍♂️ 1F46E 1F3FC 200D 2642 FE0F *man police officer: medium-light skin tone
| cop | man | officer | police | medium-light skin tone
en_001: *man police officer: medium-light skin tone
| cop | man | officer | police | policeman | medium-light skin tone *အမျိုးသား ရဲအရာရှိ − အသားနုရောင်
| ရဲ | အမျိုးသား | အမျိုးသား ရဲအရာရှိ | အရာရှိ | အသားနုရောင်
👮🏿‍♂️ 1F46E 1F3FF 200D 2642 FE0F *man police officer: dark skin tone
| cop | man | officer | police | dark skin tone
en_001: *man police officer: dark skin tone
| cop | man | officer | police | policeman | dark skin tone *အမျိုးသား ရဲအရာရှိ − အသားမဲရောင်
| ရဲ | အမျိုးသား | အမျိုးသား ရဲအရာရှိ | အရာရှိ | အသားမဲရောင်
👮‍♀ 1F46E 200D 2640 *woman police officer
| cop | officer | police | woman
en_001: *woman police officer
| cop | officer | police | policewoman | woman *အမျိုးသမီး ရဲအရာရှိ
| ရဲ | အမျိုးသမီး | အရာရှိ
👮🏽‍♀️ 1F46E 1F3FD 200D 2640 FE0F *woman police officer: medium skin tone
| cop | officer | police | woman | medium skin tone
en_001: *woman police officer: medium skin tone
| cop | officer | police | policewoman | woman | medium skin tone *အမျိုးသမီး ရဲအရာရှိ − အသားလတ်ရောင်
| ရဲ | အမျိုးသမီး | အမျိုးသမီး ရဲအရာရှိ | အရာရှိ | အသားလတ်ရောင်
👮🏿‍♀️ 1F46E 1F3FF 200D 2640 FE0F *woman police officer: dark skin tone
| cop | officer | police | woman | dark skin tone
en_001: *woman police officer: dark skin tone
| cop | officer | police | policewoman | woman | dark skin tone *အမျိုးသမီး ရဲအရာရှိ − အသားမဲရောင်
| ရဲ | အမျိုးသမီး | အမျိုးသမီး ရဲအရာရှိ | အရာရှိ | အသားမဲရောင်
🕵 1F575 *detective
| sleuth | spy *စုံထောက်
| စုံထောက်၊ ထောက်လှမ်း
🕵‍♂ 1F575 200D 2642 *man detective
| detective | man | sleuth | spy *အမျိုးသား စုံထောက်
| စုံထောက် | သူလျှို | အမျိုးသား
🕵‍♀ 1F575 200D 2640 *woman detective
| detective | sleuth | spy | woman *အမျိုးသမီး စုံထောက်
| စုံထောက် | သူလျှို | အမျိုးသမီး
💂 1F482 *guard *သက်တော်စောင့်
💂‍♂ 1F482 200D 2642 *man guard
| guard | man
en_001: *man guard
| guard | guardsman | man *အမျိုးသား အစောင့်
| အစောင့် | အမျိုးသား
💂‍♀ 1F482 200D 2640 *woman guard
| guard | woman
en_001: *woman guard
| guard | guardswoman | woman *အမျိုးသမီး အစောင့်
| အစောင့် | အမျိုးသမီး
👷 1F477 *construction worker
| construction | hat | worker
en_001: *construction worker
| builder | construction | hat | worker *ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်သား
| ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ဦးထုပ်၊ လုပ်သား
👷‍♂ 1F477 200D 2642 *man construction worker
| construction | man | worker
en_001: *man construction worker
| builder | construction | man | worker *ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမား
| ဆောက်လုပ်ရေး | အလုပ်သမား
👷‍♀ 1F477 200D 2640 *woman construction worker
| construction | woman | worker
en_001: *woman construction worker
| builder | construction | woman | worker *ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမ
| ဆောက်လုပ်ရေး | အလုပ်သမ
🤴 1F934 *prince *အိမ်ရှေ့မင်းသား
👸 1F478 *princess
| fairy tale | fantasy *မင်းသမီး
| မင်းသမီး၊ စိတ်ကူးယဥ်၊ ပုံပြင်
👳 1F473 *person wearing turban
| turban *ဗောင်းထုပ်နှင့်သူ
| ဗောင်းထုပ်၊ လူ
👳‍♂ 1F473 200D 2642 *man wearing turban
| man | turban *ခေါင်းပေါင်းနှင့် အမျိုးသား
| ခေါင်းပေါင်း | အမျိုးသား
👳‍♀ 1F473 200D 2640 *woman wearing turban
| turban | woman *ခေါင်းပေါင်းနှင့် အမျိုးသမီး
| ခေါင်းပေါင်း | အမျိုးသမီး
👲 1F472 *man with Chinese cap
| gua pi mao | hat | man
en_001: *man with Chinese cap
| gua pi mao | hat | man | skullcap *တရုတ်ဦးထုပ်နှင့်လူ
| တရုတ်၊ ဦးထုပ်၊ လူ
🧕 1F9D5 *woman with headscarf
| headscarf | hijab | mantilla | tichel *ခေါင်းစည်းပဝါနှင့် အမျိုးသမီး
🧔 1F9D4 *bearded person
| beard *မုတ်ဆိတ်ရှိသူ
👱 1F471 *blond-haired person
| blond *ရွှေရောင်ဆံကေသာရှိသူ
👱‍♂ 1F471 200D 2642 *blond-haired man
| blond | man *ရွှေရောင်ဆံကေသာရှိသူ အမျိုးသား
| ရွှေရောင်ဆံကေသာ | အမျိုးသား
👱‍♀ 1F471 200D 2640 *blond-haired woman
| blonde | woman *ရွှေရောင်ဆံကေသာရှိသူ အမျိုးသမီး
| ရွှေရောင်ဆံကေသာ | အမျိုးသမီး
🤵 1F935 *man in tuxedo
| groom | man | tuxedo *ပွဲတက်အပေါ်အင်္ကျီဝတ် အမျိုးသား
| tuxedo | သတို့သား | အမျိုးသား
👰 1F470 *bride with veil
| bride | veil | wedding *မျက်နှာလွှာဇာနှင့် သတို့သမီး
| မျက်နှာလွှာ၊ ဇာ၊ သတို့သမီး၊ မင်္ဂလာဆောင်
🤰 1F930 *pregnant woman
| pregnant | woman *ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီး
| ကိုယ်ဝန်ဆောင် | အမျိုးသမီး
🤱 1F931 *breast-feeding
| baby | breast | nursing
| baby | breast | nursing *နို့ချိုတိုက်ကျွေးခြင်း
| ကလေးငယ် | နို့တိုက်သည် | မိခင်နို့
👼 1F47C *baby angel
| angel | baby | face | fairy tale | fantasy *နတ်သမီးကလေး
| နတ်သမီး၊ စိတ်ကူးယာဥ်၊ ပုံပြင်၊၊ ကလေး၊ မျက်နှာ
🎅 1F385 *Santa Claus
| Christmas | celebration | claus | father | santa
en_CA: *Santa Claus
en_001: *Santa Claus
| Christmas | Father Christmas | celebration | claus | father | santa *ဆန်တာ ကလော့စ်
| ဆန်တာ ကလောစ် | နှစ်သစ်၊ ခရစ္စမတ်၊ စိတ်ကူးယာဥ်၊ ပုံပြင်၊ ဆန်တာ
🤶 1F936 *Mrs. Claus
| Christmas | Mrs. | celebration | claus | mother
en_001: *Mrs Claus
| Christmas | Mrs | celebration | claus | mother
en_CA: *Mrs. Claus
en_AU: *Mrs. Claus
| Christmas | Claus | Mrs | celebration | mother *မစ္စစ် စန်တာကလော့စ်
| ခရစ်စမတ် | မိခင်
🧙 1F9D9 *mage
| sorcerer | sorceress | witch | wizard *မှော်ဆရာ
| မှော်ဆရာ၊ စုန်း
🧙‍♀ 1F9D9 200D 2640 *woman mage
| sorceress | witch *အမျိုးသမီး မှော်ဆရာ
🧙‍♂ 1F9D9 200D 2642 *man mage
| sorcerer | wizard *အမျိုးသား မှော်ဆရာ
🧚 1F9DA *fairy
| Oberon | Puck | Titania *နတ်သမီး
| တိုက်တန်နီးရား | ပက်ခ် | အိုဘာရွန်
🧚‍♀ 1F9DA 200D 2640 *woman fairy
| Titania *နတ်သမီးငယ်
🧚‍♂ 1F9DA 200D 2642 *man fairy
| Oberon | Puck *နတ်သားငယ်
| ပက်ခ် | အိုဘာရွန်
🧛 1F9DB *vampire
| Dracula | undead *သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်
| ဒရက်ကူလာ | မသေနိုင်သော
🧛‍♀ 1F9DB 200D 2640 *woman vampire
| undead *အမျိုးသမီး သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်
🧛‍♂ 1F9DB 200D 2642 *man vampire
| Dracula | undead *အမျိုးသား သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်
🧜 1F9DC *merperson
| mermaid | merman | merwoman *ရေလူ
| ရေသူထီး | ရေသူမ
🧜‍♀ 1F9DC 200D 2640 *mermaid
| merwoman *ရေသူမ
| ရေသူမ (အမျိုးသမီး)
🧜‍♂ 1F9DC 200D 2642 *merman
| Triton *ရေသူထီး
🧝 1F9DD *elf
| magical *နတ်သူငယ်
🧝‍♀ 1F9DD 200D 2640 *woman elf
| magical *အမျိုးသမီး နတ်သူငယ်
🧝‍♂ 1F9DD 200D 2642 *man elf
| magical *အမျိုးသား နတ်သူငယ်
🧞 1F9DE *genie
| djinn *မီးခွက်စောင့်ဘီလူး
| မီးခွက်စောင့် နတ်ဘီလူးတစ်မျိုး
🧞‍♀ 1F9DE 200D 2640 *woman genie
| djinn *အမျိုးသမီး မီးခွက်စောင့်ဘီးလူး
🧞‍♂ 1F9DE 200D 2642 *man genie
| djinn *အမျိုးသား မီးခွက်စောင့်ဘီးလူး
🧟 1F9DF *zombie
| undead | walking dead *ဖုတ်ကောင်
| မသေသော | လမ်းလျှောက်နေသည့် အသေကောင်
🧟‍♀ 1F9DF 200D 2640 *woman zombie
| undead | walking dead *အမျိုးသမီး ဖုတ်ကောင်
🧟‍♂ 1F9DF 200D 2642 *man zombie
| undead | walking dead *အမျိုးသား ဖုတ်ကောင်
🙍 1F64D *person frowning
| frown | gesture *မျက်မှောင်ကြုတ်နေသူ
| မျက်မှောင်ကြုတ်၊ အမူအရာ၊
🙍‍♂ 1F64D 200D 2642 *man frowning
| frowning | gesture | man *မျက်မှောင်ကြုတ်နေသည့် အမျိုးသား
| ဝမ်းနည်းကြေကွဲ | ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေသည့် အမျိုးသား | အမူအယာ | အမျိုးသား
🙍‍♀ 1F64D 200D 2640 *woman frowning
| frowning | gesture | woman *မျက်မှောင်ကြုတ်နေသည့် အမျိုးသမီး
| ဝမ်းနည်းကြေကွဲ | ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေသည့် အမျိုးသမီး | အမူအယာ | အမျိုးသမီး
🙎 1F64E *person pouting
| gesture | pouting *စူတူတူ လူ
| စူတူတူ၊ အမူအရာ
🙎‍♂ 1F64E 200D 2642 *man pouting
| gesture | man | pouting *စိတ်တိုနေသည့် အမျိုးသား
| စိတ်တို | အမူအယာ | အမျိုးသား
🙎‍♀ 1F64E 200D 2640 *woman pouting
| gesture | pouting | woman *စိတ်တိုနေသည့် အမျိုးသမီး
| စိတ်တို | အမူအယာ | အမျိုးသမီး
🙅 1F645 *person gesturing NO
| forbidden | gesture | hand | no | not | prohibited *မလို လက်ဟန်
| မလို၊ လက်ဟန်၊ တားမြစ်၊ လက်၊ အမူအရာ
🙅‍♂ 1F645 200D 2642 *man gesturing NO
| forbidden | gesture | hand | man | no | prohibited *တားမြစ်ကြောင်း လက်ဟန်ပြသူ အမျိုးသား
| တားမြစ် | လက် | အမူအယာ | အမျိုးသား
🙅‍♀ 1F645 200D 2640 *woman gesturing NO
| forbidden | gesture | hand | no | prohibited | woman *တားမြစ်ကြောင်း လက်ဟန်ပြသူ အမျိုးသမီး
| တားမြစ် | လက် | အမူအယာ | အမျိုးသမီး
🙆 1F646 *person gesturing OK
| OK | gesture | hand *အိုကေ လက်ဟန်
| အိုကေ၊ လက်၊ အမူအရာ
🙆‍♂ 1F646 200D 2642 *man gesturing OK
| OK | gesture | hand | man *အဆင်ပြေကြောင်း လက်ဟန်ပြသူ အမျိုးသား
| လက် | အဆင်ပြေ | အမူအယာ | အမျိုးသား | အိုကေ
🙆‍♀ 1F646 200D 2640 *woman gesturing OK
| OK | gesture | hand | woman *အဆင်ပြေကြောင်း လက်ဟန်ပြသူ အမျိုးသမီး
| လက် | အဆင်ပြေ | အမူအယာ | အမျိုးသမီး | အိုကေ
💁 1F481 *person tipping hand
| hand | help | information | sassy | tipping *ကူညီပါရစေဟု လက်ဟန်ပြနေသူ
| စုံစမ်းရေး စားပွဲမှာထိုင်နေသူ | မေး၊ စုံစမ်း၊ အကူအညီ၊
💁‍♂ 1F481 200D 2642 *man tipping hand
| man | sassy | tipping hand *ကူညီပါရစေဟု လက်ဟန်ပြနေသည့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ အမျိုးသား
| ဘောက်ဆူး | လက် | လက်ဖြန့်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ အမျိုးသား | ဝန်ဆောင်မှုပေး | အမျိုးသား
💁‍♀ 1F481 200D 2640 *woman tipping hand
| sassy | tipping hand | woman *ကူညီပါရစေဟု လက်ဟန်ပြနေသည့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ အမျိုးသမီး
| ဘောက်ဆူး | လက် | လက်ဖြန့်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ အမျိုးသမီး | ဝန်ဆောင်မှုပေး | အမျိုးသမီး
🙋 1F64B *person raising hand
| gesture | hand | happy | raised *လက်မြှောက်ပြနေသော ပျော်ရွှင်နေသူ
| လက်ဟန်၊ လက်၊ ပျော်၊ မြှောက်ပြ
🙋‍♂ 1F64B 200D 2642 *man raising hand
| gesture | man | raising hand *လက်မြှောက်ထားသည့် အမျိုးသား
| လက်မြှောက် | အမူအယာ | အမျိုးသား
🙋‍♀ 1F64B 200D 2640 *woman raising hand
| gesture | raising hand | woman *လက်မြှောက်ထားသည့် အမျိုးသမီး
| လက်မြှောက် | အမူအယာ | အမျိုးသမီး
🙇 1F647 *person bowing
| apology | bow | gesture | sorry *ဦးညွတ်နေသူ
| ခွင့်လွှတ်၊ ဦးညွတ်၊ အမူအရာ၊ ဝမ်းနည်း
🙇‍♂ 1F647 200D 2642 *man bowing
| apology | bowing | favor | gesture | man | sorry
en_001: *man bowing
| apology | bowing | favour | gesture | man | sorry *ရိုရိုကျိုးကျိုး ဦးညွှတ်နေသူ အမျိုးသား
| တောင်းပန် | အမူအယာ | အမျိုးသား | ဦးညွှတ်
🙇‍♀ 1F647 200D 2640 *woman bowing
| apology | bowing | favor | gesture | sorry | woman
en_001: *woman bowing
| apology | bowing | favour | gesture | sorry | woman *ရိုရိုကျိုးကျိုး ဦးညွှတ်နေသူ အမျိုးသမီး
| တောင်းပန် | အမူအယာ | အမျိုးသမီး | ဦးညွှတ်
🤦 1F926 *person facepalming
| disbelief | exasperation | face | palm *မျက်နှာလက်ဝါးဖြင့်အုပ်ထားသောရုပ်
| စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေသော | မယုံကြည်မှု | ရုပ် | လက်ဝါး
🤦‍♂ 1F926 200D 2642 *man facepalming
| disbelief | exasperation | facepalm | man *မိမိမျက်နှာကို လက်ဝါးဖြင့်အုပ်ထားသော အမျိုးသား
| မယုံကြည်နိုင် | မျက်နှာအုပ် | လက်ဝါး | အမျိုးသား
🤦‍♀ 1F926 200D 2640 *woman facepalming
| disbelief | exasperation | facepalm | woman *မိမိမျက်နှာကို လက်ဝါးဖြင့်အုပ်ထားသော အမျိုးသမီး
| မယုံကြည်နိုင် | မျက်နှာအုပ် | လက်ဝါး | အမျိုးသမီး
🤷 1F937 *person shrugging
| doubt | ignorance | indifference | shrug *ပခုံးတွန့်သည်
| ဂရုမစိုက် | မယုံသင်္ကာ | မသိနားမလည်
🤷‍♂ 1F937 200D 2642 *man shrugging
| doubt | ignorance | indifference | man | shrug *ပခုံးတွန့်နေသူ အမျိုးသား
| ပုခုန်းတွန့် | ပုခုန်းတွန့်နေသူ အမျိုးသား | လျစ်လျူရှု | အမျိုးသား
🤷‍♀ 1F937 200D 2640 *woman shrugging
| doubt | ignorance | indifference | shrug | woman *ပခုံးတွန့်နေသူ အမျိုးသမီး
| ပုခုန်းတွန့် | ပုခုန်းတွန့်နေသူ အမျိုးသမီး | လျစ်လျူရှု | အမျိုးသမီး
💆 1F486 *person getting massage
| face | massage | salon *မျက်နှာကို နှိပ်နယ်ပေးခြင်း
| မျက်နှာ၊ နှိပ်၊ နယ်
💆‍♂ 1F486 200D 2642 *man getting massage
| face | man | massage *မျက်နှာအနှိပ်ခံနေသူ အမျိုးသား
| မျက်နှာ | အနှိပ်ခံ | အမျိုးသား
💆‍♀ 1F486 200D 2640 *woman getting massage
| face | massage | woman *မျက်နှာအနှိပ်ခံနေသူ အမျိုးသမီး
| မျက်နှာ | အနှိပ်ခံ | အမျိုးသမီး
💇 1F487 *person getting haircut
| barber | beauty | haircut | parlor
en_001: *person getting haircut
| barber | beauty | haircut | hairdresser | parlour
en_CA: *person getting haircut
| barber | beauty | haircut | parlour *ဆံပင်ညှပ်ခြင်း
| ဆံပင်၊ ဆံသ၊ အလှပြင်
💇‍♂ 1F487 200D 2642 *man getting haircut
| haircut | man *ဆံပင်ညှပ်နေသူ အမျိုးသား
| ဆံပင်ညှပ် | အမျိုးသား
💇‍♀ 1F487 200D 2640 *woman getting haircut
| haircut | woman *ဆံပင်ညှပ်နေသူ အမျိုးသမီး
| ဆံပင်ညှပ် | အမျိုးသမီး
🚶 1F6B6 *person walking
| hike | walk | walking *ခြေကျင် လျှောက်သူ
| ခြေကျင်၊ လျှောက်၊ လမ်းလျှောက်
🚶‍♂ 1F6B6 200D 2642 *man walking
| hike | man | walk *လမ်းလျှောက်နေသူ အမျိုးသား
| တောင်တက် | လမ်းလျှောက် | အမျိုးသား
🚶‍♀ 1F6B6 200D 2640 *woman walking
| hike | walk | woman *လမ်းလျှောက်နေသူ အမျိုးသမီး
| တောင်တက် | လမ်းလျှောက် | အမျိုးသမီး
🏃 1F3C3 *person running
| marathon | running *ပြေးသူ
| ပြေး၊ မာရသွန်
🏃‍♂ 1F3C3 200D 2642 *man running
| man | marathon | racing | running *ပြေးနေသူ အမျိုးသား
| မာရသွန် | အပြေးပြိုင်ပွဲ | အမျိုးသား
🏃‍♀ 1F3C3 200D 2640 *woman running
| marathon | racing | running | woman *ပြေးနေသူ အမျိုးသမီး
| မာရသွန် | အပြေးပြိုင်ပွဲ | အမျိုးသမီး
💃 1F483 *woman dancing
| dancing | woman *ကချေသည်
| ကသူ၊ က
🕺 1F57A *man dancing
| dance | man *ကခုန်နေသူ
| ကခုန်သည် | အမျိုးသား
👯 1F46F *people with bunny ears
| bunny ear | dancer | partying *ပါတီပွဲလာသူများ
| ပါတီတက်နေသော အမျိုးသမီးများ | ပျော်ပွဲ၊ ရွှင်ပွဲ၊ ကချေသည်၊ မိန်းကလေး၊ အမျိုးသမီး
👯‍♂ 1F46F 200D 2642 *men with bunny ears
| bunny ear | dancer | men | partying *ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲလုပ်နေသူ အမျိုးသားများ
| ကချေသည် | ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ | ယုန်နားရွက် | အမျိုးသား
👯‍♀ 1F46F 200D 2640 *women with bunny ears
| bunny ear | dancer | partying | women *ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲလုပ်နေသူ အမျိုးသမီးများ
| ကချေသည် | ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ | ယုန်နားရွက် | အမျိုးသမီး
🧖 1F9D6 *person in steamy room
| sauna | steam room *ချွေးထုတ်ခန်းတွင်းရှိ လူ
| ချွေးထုတ်ခန်း | ချွေးပေါင်းအိမ်
🧖‍♀ 1F9D6 200D 2640 *woman in steamy room
| sauna | steam room *ချွေးထုတ်ခန်းတွင်းရှိ အမျိုးသမီး
🧖‍♂ 1F9D6 200D 2642 *man in steamy room
| sauna | steam room *ချွေးထုတ်ခန်းတွင်းရှိ အမျိုးသား
🧗 1F9D7 *person climbing
| climber *တောင်တက်နေသူ
🧗‍♀ 1F9D7 200D 2640 *woman climbing
| climber *တောင်တက် အမျိုးသမီး
🧗‍♂ 1F9D7 200D 2642 *man climbing
| climber *တောင်တက် အမျိုးသား
🧘 1F9D8 *person in lotus position
| meditation | yoga *တင်ပျဥ်ခွေထိုင်သူ
| တရားထိုင်ခြင်း | ယောဂ
🧘‍♀ 1F9D8 200D 2640 *woman in lotus position
| meditation | yoga *တင်ပျဥ်ခွေထိုင်သည့် အမျိုးသမီး
🧘‍♂ 1F9D8 200D 2642 *man in lotus position
| meditation | yoga *တင်ပျဥ်ခွေထိုင်သည့် အမျိုးသား
🛀 1F6C0 *person taking bath
| bath | bathtub *ရေချိုးကန်တွင် ရေချိုးနေသူ
| ရေချိုးကန်၊ ရေချိုး
🛌 1F6CC *person in bed
| hotel | sleep *ခုတင်ပေါ်က လူ
| ဟော်တယ်၊ အိပ်
🕴 1F574 *man in suit levitating
| business | man | suit *ဈာန်ပျံနေသော ရုံးဝတ်စုံနှင့်သူ
| စီးပွားရေး၊ လုပ်ငန်း၊ ၀တ်စုံ
🗣 1F5E3 *speaking head
| face | head | silhouette | speak | speaking
en_001: *speaking head
| face | head | silhouette | speak | speaking | talk | talking *စကားပြောနေသည့် ဦးခေါင်း
| မျက်နှာ၊ ပြော၊ ဦးခေါင်း၊ အရိပ်ပုံမည်း၊ စကား
👤 1F464 *bust in silhouette
| bust | silhouette *ကိုယ်တစ်ပိုင်း အရိပ်ပုံ
| ကိုယ်တစ်ပိုင်း၊ အရိပ်ပုံမည်း
👥 1F465 *busts in silhouette
| bust | silhouette *ကိုယ်တစ်ပိုင်းများ၏ အရိပ်ပုံ
🤺 1F93A *person fencing
| fencer | fencing | sword *ဓားရေးပြိုင်သူ
| ဓား | ဓားရေးပြိုင်ပွဲ | လူပုဂ္ဂိုလ် | အားကစား
🏇 1F3C7 *horse racing
| horse | jockey | racehorse | racing *မြင်းစီးခြင်း
| မြင်း၊ ဂျော်ကီ၊ ပြိုင်မြင်း၊ ပြိုင်ခြင်း
⛷ 26F7 *skier
| ski | snow *စကီးစီးသူ
| စကီး၊ ဆီးနှင်း
🏂 1F3C2 *snowboarder
| ski | snow | snowboard *စနိုးဘုတ်စီးသူ
| စကီး၊ ဆီးနှင်း၊ စနိုးဘုတ်
🏌 1F3CC *person golfing
| ball | golf *ဂေါက်သီးရိုက်သူ
| ဘောလုံး၊ ဂေါက်
🏌‍♂ 1F3CC 200D 2642 *man golfing
| golf | man *ဂေါက်ရိုက်နေသူ အမျိုးသား
| ဂေါက်ရိုက် | အမျိုးသား
🏌‍♀ 1F3CC 200D 2640 *woman golfing
| golf | woman *ဂေါက်ရိုက်နေသူ အမျိုးသမီး
| ဂေါက်ရိုက် | အမျိုးသမီး
🏄 1F3C4 *person surfing
| surfing *ရေလွှာလှိုင်းစီးသူ
| ရေလွှာ၊ လှိုင်းစီး
🏄‍♂ 1F3C4 200D 2642 *man surfing
| man | surfing *ရေလွှာလျှောစီးနေသည့် အမျိုးသား
| ရေလွှာလျှောစီး | အမျိုးသား
🏄‍♀ 1F3C4 200D 2640 *woman surfing
| surfing | woman *ရေလွှာလျှောစီးနေသည့် အမျိုးသမီး
| ရေလွှာလျှောစီး | အမျိုးသမီး
🚣 1F6A3 *person rowing boat
| boat | rowboat
en_001: *person rowing boat
| boat | rowboat | rowing boat *ရိုးရိုးလှေ
| လှေ၊ ယာဥ်
🚣‍♂ 1F6A3 200D 2642 *man rowing boat
| boat | man | rowboat
en_001: *man rowing boat
| boat | man | rowboat | rowing boat *လှေလှော်နေသည့် အမျိုးသား
| လှေ | အမျိုးသား
🚣‍♀ 1F6A3 200D 2640 *woman rowing boat
| boat | rowboat | woman
en_001: *woman rowing boat
| boat | rowboat | rowing boat | woman *လှေလှော်နေသည့် အမျိုးသမီး
| လှေ | အမျိုးသမီး
🏊 1F3CA *person swimming
| swim *ရေကူးသူ
🏊‍♂ 1F3CA 200D 2642 *man swimming
| man | swim *ရေကူးနေသူ အမျိုးသား
| ရေကူး | အမျိုးသား
🏊‍♀ 1F3CA 200D 2640 *woman swimming
| swim | woman *ရေကူးနေသူ အမျိုးသမီး
| ရေကူး | အမျိုးသမီး
⛹ 26F9 *person bouncing ball
| ball *ဘောလုံးနှင့်လူ
⛹‍♂ 26F9 200D 2642 *man bouncing ball
| ball | man *ဘောလုံးကန်နေသည့် အမျိုးသား
| ဘောလုံး | အမျိုးသား
⛹‍♀ 26F9 200D 2640 *woman bouncing ball
| ball | woman *ဘောလုံးကန်နေသည့် အမျိုးသမီး
| ဘောလုံး | အမျိုးသမီး
🏋 1F3CB *person lifting weights
| lifter | weight
en_001: *person lifting weights
| weight | weightlifter *အလေးမသမား
| အလေးမသူ၊ အလေး
🏋‍♂ 1F3CB 200D 2642 *man lifting weights
| man | weight lifter
en_001: *man lifting weights
| man | weightlifter *အလေးမနေသည့် အမျိုးသား
| အမျိုးသား | အလေးမ
🏋‍♀ 1F3CB 200D 2640 *woman lifting weights
| weight lifter | woman
en_001: *woman lifting weights
| weightlifter | woman *အလေးမနေသည့် အမျိုးသမီး
| အမျိုးသမီး | အလေးမ
🚴 1F6B4 *person biking
| bicycle | biking | cyclist *စက်ဘီးစီးသူ
| စက်ဘီး၊ စက်ဘီးစီးသူ
🚴🏿 1F6B4 1F3FF *person biking: dark skin tone
| bicycle | biking | cyclist | person biking | dark skin tone *စက်ဘီးစီးသူ − အသားမဲရောင်
| စက်ဘီးစီးသူ | စက်ဘီး၊ စက်ဘီးစီးသူ | အသားမဲရောင်
🚴‍♂ 1F6B4 200D 2642 *man biking
| bicycle | biking | cyclist | man *စက်ဘီးစီးနေသည့် အမျိုးသား
| စက်ဘီးစီး | အမျိုးသား
🚴🏿‍♂️ 1F6B4 1F3FF 200D 2642 FE0F *man biking: dark skin tone
| bicycle | biking | cyclist | man | dark skin tone *စက်ဘီးစီးနေသည့် အမျိုးသား − အသားမဲရောင်
| စက်ဘီးစီး | စက်ဘီးစီးနေသည့် အမျိုးသား | အမျိုးသား | အသားမဲရောင်
🚴‍♀ 1F6B4 200D 2640 *woman biking
| bicycle | biking | cyclist | woman *စက်ဘီးစီးနေသည့် အမျိုးသမီး
| စက်ဘီးစီး | အမျိုးသမီး
🚴🏿‍♀️ 1F6B4 1F3FF 200D 2640 FE0F *woman biking: dark skin tone
| bicycle | biking | cyclist | woman | dark skin tone *စက်ဘီးစီးနေသည့် အမျိုးသမီး − အသားမဲရောင်
| စက်ဘီးစီး | စက်ဘီးစီးနေသည့် အမျိုးသမီး | အမျိုးသမီး | အသားမဲရောင်
🚵 1F6B5 *person mountain biking
| bicycle | bicyclist | bike | cyclist | mountain *တောင်ပေါ် စက်ဘီးစီးသူ
| တောင်၊ စက်ဘီး၊ စက်ဘီးစီးသူ
🚵‍♂ 1F6B5 200D 2642 *man mountain biking
| bicycle | bike | cyclist | man | mountain *တောင်တက်စက်ဘီးစီးသူ အမျိုးသား
| စက်ဘီးစီး | တောင်တက် | အမျိုးသား
🚵‍♀ 1F6B5 200D 2640 *woman mountain biking
| bicycle | bike | biking | cyclist | mountain | woman *တောင်တက်စက်ဘီးစီးသူ အမျိုးသမီး
| တောင်တက်စက်ဘီးစီး | အမျိုးသမီး
🏎 1F3CE *racing car
| car | racing
en_001: *racing car
| car | motor racing | racing *ပြိုင်ကား
| ကား၊ ကားပြိုင်မောင်းခြင်း
🏍 1F3CD *motorcycle
| motorbike | racing *မော်တော်ဆိုင်ကယ်
🤸 1F938 *person cartwheeling
| cartwheel | gymnastics *ဘေးတိုက်ကျွမ်းထိုးခြင်း
| ကျွမ်းဘား | လူပုဂ္ဂိုလ် | အားကစား
🤸‍♂ 1F938 200D 2642 *man cartwheeling
| cartwheel | gymnastics | man *ကျွမ်းဘားထိုးနေသည့် အမျိုးသား
| ကျွမ်းဘား | အမျိုးသား | အားကစား
🤸‍♀ 1F938 200D 2640 *woman cartwheeling
| cartwheel | gymnastics | woman *ကျွမ်းဘားထိုးနေသည့် အမျိုးသမီး
| ကျွမ်းဘား | အမျိုးသမီး | အားကစား
🤼 1F93C *people wrestling
| wrestle | wrestler *နပန်းသမား
| နပန်းလုံး | လူပုဂ္ဂိုလ် | အားကစား
🤼‍♂ 1F93C 200D 2642 *men wrestling
| men | wrestle *အမျိုးသား နပန်းပွဲ
| လက်ဝှေ့ | လက်ဝှေ့ထိုးနေသည့် အမျိုးသားများ | အမျိုးသား | အားကစား
🤼‍♀ 1F93C 200D 2640 *women wrestling
| women | wrestle *အမျိုးသမီး နပန်းပွဲ
| လက်ဝှေ့ | လက်ဝှေ့ထိုးနေသည့် အမျိုးသမီးများ | အမျိုးသမီး | အားကစား
🤽 1F93D *person playing water polo
| polo | water *ဝါတာပိုလို
| ပိုလို | ရေ | လူပုဂ္ဂိုလ် | အားကစား
🤽‍♂ 1F93D 200D 2642 *man playing water polo
| man | water polo *ဝါတာပိုလိုကစားနေသည့် အမျိုးသား
| ဝါတာပိုလို | အမျိုးသား | အားကစား
🤽‍♀ 1F93D 200D 2640 *woman playing water polo
| water polo | woman *ဝါတာပိုလိုကစားနေသည့် အမျိုးသမီး
| ဝါတာပိုလို | အမျိုးသမီး | အားကစား
🤾 1F93E *person playing handball
| ball | handball *လက်ပစ်ဘော
| ဘောလုံး | လူပုဂ္ဂိုလ် | အားကစား
🤾‍♂ 1F93E 200D 2642 *man playing handball
| handball | man *လက်ပစ်ဘောကစားနေသည့် အမျိုးသား
| လက်ပစ်ဘော | အမျိုးသား | အားကစား
🤾‍♀ 1F93E 200D 2640 *woman playing handball
| handball | woman *လက်ပစ်ဘောကစားနေသည့် အမျိုးသမီး
| လက်ပစ်ဘော | အမျိုးသမီး | အားကစား
🤹 1F939 *person juggling
| balance | juggle | multitask | skill
en_AU: *person juggling
| balance | juggle | multi-task | skill *ရွဲကစားလက်လှည့်အစွမ်းပြ
| ကျွမ်းကျင်မှု | ချိန်ညီခြင်း | ရွဲကစားလက်လှည့် | အလုပ်မျိုးစုံ
🤹‍♂ 1F939 200D 2642 *man juggling
| juggling | man | multitask
en_AU: *man juggling
| juggling | man | multi-task *ရွဲကစားပြသူ အမျိုးသား
| ရွဲကစား | အမျိုးသား
🤹‍♀ 1F939 200D 2640 *woman juggling
| juggling | multitask | woman
en_AU: *woman juggling
| juggling | multi-task | woman *ရွဲကစားပြသူ အမျိုးသမီး
| ရွဲကစား | အမျိုးသမီး
👫 1F46B *man and woman holding hands
| couple | hand | hold | man | woman *လက်တွဲထားသော အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး
| စုံတွဲ၊ လက်၊ ကိုင်၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး
👬 1F46C *two men holding hands
| Gemini | couple | hand | hold | man | twins | zodiac *လက်တွဲထားသော အမျိုးသား နှစ်ယောက်
| စုံတွဲ၊ လက်၊ ကိုင်၊ အမျိုးသား၊ ရာသီခွင်၊ မေထုန်၊ အမွှား
👭 1F46D *two women holding hands
| couple | hand | hold | woman *လက်တွဲထားသော အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်
| လက်၊ အမျိုးသမီး၊ စုံတွဲ၊ ကိုင်
💏 1F48F *kiss
| couple *အနမ်း
| စုံတွဲ၊ ချစ်၊ ကြိုက်
👩‍❤️‍💋‍👩 1F469 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469 *kiss: woman, woman
| couple | kiss | woman *အနမ်း − အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသမီး
| စုံတွဲ၊ ချစ်၊ ကြိုက် | အနမ်း | အမျိုးသမီး
💑 1F491 *couple with heart
| couple | love *နှလုံးသားနှင့် စုံတွဲ
| နှလုံး၊ စုံတွဲ၊ ချစ်၊ ကြိုက်
👩‍❤️‍👩 1F469 200D 2764 FE0F 200D 1F469 *couple with heart: woman, woman
| couple | couple with heart | love | woman *နှလုံးသားနှင့် စုံတွဲ − အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသမီး
| နှလုံးသားနှင့် စုံတွဲ | နှလုံး၊ စုံတွဲ၊ ချစ်၊ ကြိုက် | အမျိုးသမီး
👪 1F46A *family *မိသားစု
| ကလေး၊ ဖခင်၊ မိခင်၊ မိသားစု
👩‍👩‍👧 1F469 200D 1F469 200D 1F467 *family: woman, woman, girl
| family | woman | girl *မိသားစု − အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသမီးနှင့် မိန်းကလေး
| ကလေး၊ ဖခင်၊ မိခင်၊ မိသားစု | မိသားစု | အမျိုးသမီး | မိန်းကလေး
🤳 1F933 *selfie
| camera | phone *ဆဲလ်ဖီ
| ကင်မရာ | ဖုန်း
💪 1F4AA *flexed biceps
| biceps | comic | flex | muscle
en_CA: *flexed bicep *ကွေးထားသည့် လက်ရုံးကြွက်သား
| ကြွက်သား၊ ခန္ဓာ၊ ကိုယ်၊ ကွေး၊ ကာတွန်း
👈 1F448 *backhand index pointing left
| backhand | finger | hand | index | point *ဘယ်သို့ ညွှန်ပြနေသည့် လက်ပြန် အညွှန်း
| လက်ခ​ျောင်း၊ ခန္ဓာ၊ ကိုယ်၊ လက်၊ ညွှန်ပြ၊ လက်ပြန်၊ အညွှန်း
👉 1F449 *backhand index pointing right
| backhand | finger | hand | index | point *ညာသို့ ညွှန်ပြနေသည့် လက်ပြန် အညွှန်း
☝ 261D *index pointing up
| finger | hand | index | point | up *အပေါ်သို့ ညွှန်ပြနေသည့် အညွှန်း
| ခန္ဓာ၊ ကိုယ်၊ လက်၊ ညွှန်ပြ၊ လက်ပြန်၊ အညွှန်း၊ အပေါ်သို့
👆 1F446 *backhand index pointing up
| backhand | finger | hand | index | point | up *အပေါ်သို့ ညွှန်ပြနေသည့် လက်ပြန် အညွှန်း
🖕 1F595 *middle finger
| finger | hand *လက်ခလယ်
| ခန္ဓာ၊ ကိုယ်၊ လက်
👇 1F447 *backhand index pointing down
| backhand | down | finger | hand | index | point *အောက်သို့ ညွှန်ပြနေသည့် လက်ပြန် အညွှန်း
| ခန္ဓာ၊ ကိုယ်၊ လက်၊ ညွှန်ပြ၊ လက်ပြန်၊ အညွှန်း၊ အောက်သို့
✌ 270C *victory hand
| hand | v | victory
en_001: *victory hand
| hand | peace hand | peace sign | v | v sign | victory *အောင်မြင်မှုပြ လက်ဟန်
| ခန္ဓာ၊ ကိုယ်၊ အောင်မြင်မှု၊ လက်၊ v
🤞 1F91E *crossed fingers
| cross | finger | hand | luck *ကံကောင်းပါစေပြ လက်ဟန်
| ကံတရား | လက်ချောင်း | လက်ချောင်းချင်းချိတ်
🖖 1F596 *vulcan salute
| finger | hand | spock | vulcan
en_AU: *Vulcan salute
| finger | hand | spock | vulcan *ဗူလ်ကန် ဆလု
| ခန္ဓာ၊ ကိုယ်၊ လက်၊ vulcan၊ ဂုဏ်ပြု | ညာသို့ ညွှန်ပြနေသည့် လက်ဖမိုး
🤘 1F918 *sign of the horns
| finger | hand | horns | rock-on
en_001, en_CA: *sign of the horns
| finger | hand | horns | rock on *ဦးချိုများ၏ သင်္ကေတ
| ခန္ဓာ၊ ကိုယ်၊ ဦးချို၊ လက်ချောင်း
🤙 1F919 *call me hand
| call | hand
en_001: *call-me hand
| call | hand *ဖုန်းခေါ်ပါပြ လက်ဟန်
| ခေါ်ဆိုသည် | လက်
🖐 1F590 *hand with fingers splayed
| finger | hand | splayed *လက်ချောင်းများ ဖြန့်ပြီး မြှောက်ထားသည့် လက်
| ခန္ဓာ၊ ကိုယ်၊ ဦးချို၊ လက်ချောင်း၊ ဖြ့န်
✋ 270B *raised hand
| hand *မြှောက်ပြထားသည့် လက်
👌 1F44C *OK hand
| OK | hand *အိုကေ လက်
| အိုကေ၊ လက်၊ ခန္ဓာ၊ ကိုယ်
👍 1F44D *thumbs up
| +1 | hand | thumb | up *ထောင်ပြထားသည့် လက်မ
| လက်၊ ခန္ဓာ၊ ကိုယ်၊ +၁၊ အပေါ်
👎 1F44E *thumbs down
| -1 | down | hand | thumb *အောက်သို့ပြနေသည့် လက်မ
| လက်၊ ခန္ဓာ၊ ကိုယ်၊ −၁၊ အောက်
✊ 270A *raised fist
| clenched | fist | hand | punch *မြှောက်ပြထားသည့် လက်သီး
| ခန္ဓာ၊ ကိုယ်၊ လက်၊ ဆုပ်၊ ထိုး၊ လက်သီး
👊 1F44A *oncoming fist
| clenched | fist | hand | punch *ရင်ဆိုင်ရတော့မည့် လက်သီး
| ခန္ဓာ၊ ကိုယ်၊ လက်၊ လက်သီး၊ ဆုပ်၊ ထိုး
🤛 1F91B *left-facing fist
| fist | leftwards
en_CA: *left-facing fist
| fist | leftward *ဘယ်ပြ ညာလက်သီး
| ဘယ်ဝိုက် | လက်သီး
🤜 1F91C *right-facing fist
| fist | rightwards
en_CA: *right-facing fist
| fist | rightward *ညာပြ ဘယ်လက်သီး
| ညာဝိုက် | လက်သီး
🤚 1F91A *raised back of hand
| backhand | raised *လက်ပြန်ထောင်ပြဟန်
| ထောင်ပြ | လက်ပြန်
👋 1F44B *waving hand
| hand | wave | waving *ဝှေ့ယမ်းနေသည့် လက်
| လက်၊ ခန္ဓာ၊ ကိုယ်၊ဝှေ့ယမ်း
🤟 1F91F *love-you gesture
| ILY | hand *ချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ အမူအရာ
| ILY | လက်
✍ 270D *writing hand
| hand | write *စာရေးနေသည့် လက်
| ရေး၊ လက်၊ ခန္ဓာ၊ ကိုယ်
👏 1F44F *clapping hands
| clap | hand *လက်ခုပ်တီးနေသည့် လက်များ
| လက်၊ ခန္ဓာ၊ ကိုယ်၊ လက်ခုပ်
👐 1F450 *open hands
| hand | open *ဖွင့်ထားသည့် လက်များ
| လက်၊ ခန္ဓာ၊ ကိုယ်၊ ဖွင့်
🙌 1F64C *raising hands
| celebration | gesture | hand | hooray | raised
en_001: *raising hands
| celebration | gesture | hand | hooray | raised | woo hoo | yay *လက်မြှောက်ပြနေသူ
| ခန္ဓာကိုယ်၊ နှုတ်ဆက်၊ လက်၊ မြှောက်ပြ၊ အားရ
🤲 1F932 *palms up together
| prayer *လက်နှစ်ဘက်အတူတူမြှောက်သည်
🙏 1F64F *folded hands
| ask | bow | folded | gesture | hand | please | pray | thanks *ယှက်ထားသည့် လက်များ
| အမူအရာ၊ လက်၊ ဆုတောင်း၊ ကျေးဇူးတင်၊ လက်ချင်းဆက်၊ ကျေနပ်
🤝 1F91D *handshake
| agreement | hand | meeting | shake *လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်
| ဆွဲလှုပ် | တွေ့ဆုံခြင်း | လက် | သဘောတူညီချက်
💅 1F485 *nail polish
| care | cosmetics | manicure | nail | polish *လက်သည်း ဆိုးဆေး
| လက်သည်း၊ ဆိုးဆေး၊ လက်၊ ခန္ဓာ၊ ကိုယ်၊ အလှပြင်၊ ပြုစု
👂 1F442 *ear
| body *နားရွက်
👃 1F443 *nose
| body *နှာခေါင်း
| ကိုယ်ခန္ဓာ | နာခေါင်း
👣 1F463 *footprints
| clothing | footprint | print *ခြေရာများ
| ခန္ဓာ၊ ကိုယ်၊ ခြေရာများ၊ အရာ
👀 1F440 *eyes
| eye | face *မျက်လုံးများ
| ခန္ဓာ၊ ကိုယ်၊ မျက်လုံး၊ မျက်နှာ
👁 1F441 *eye
| body *မျက်လုံး
| ခန္ဓာ၊ ကိုယ်
👁‍🗨 1F441 200D 1F5E8 *eye in speech bubble
| eye | speech bubble | witness *မျက်နှာလုံးပုံစံ စကားပြောအကွက်
| စကားပြောအကွက် | မျက်လုံး | သက်သေ
🧠 1F9E0 *brain
| intelligent *ဦးနှောက်
👅 1F445 *tongue
| body *လျှာ
| ခန္ဓာ၊ ကိုယ်၊
👄 1F444 *mouth
| lips *ပါးစပ်
| ခန္ဓာ၊ ကိုယ်၊ နှုတ်ခမ်း
💋 1F48B *kiss mark
| kiss | lips *အနမ်း တံဆိပ်
| အနမ်း၊ အမှတ်၊ တံဆိပ်၊ နှုတ်ခမ်း၊ ချစ်၊ နှလုံး
💘 1F498 *heart with arrow
| arrow | cupid *မြားနှင့် နှလုံး
| မြား၊ နှလုံး၊ ဖူးစာ၊ မြားနတ်မောင်
❤ 2764 *red heart
| heart *အနီရောင် နှလုံး
💓 1F493 *beating heart
| beating | heartbeat | pulsating *ခုန်နေသည့် နှလုံး
| ခုန်၊ လှုပ်ခါ၊ နှလုံး၊ နလုံးခုန်၊
💔 1F494 *broken heart
| break | broken *အက်ကွဲနေသည့် နှလုံး
| အက်၊ ကွဲ၊ နှလုံး
💕 1F495 *two hearts
| love *နှလုံးနှစ်ခု
| နှလုံး၊ အချစ်
💖 1F496 *sparkling heart
| excited | sparkle *အရောင်လက်နေသည့် နှလုံး
| စိတ်လှုပ်၊ နှလုံး၊ တောက်ပ၊ လက်
💗 1F497 *growing heart
| excited | growing | nervous | pulse *ကြီးထွားလာနေသည့် နှလုံး
| စိတ်လှုပ်၊ နှလုံး၊ ကြီးထွား၊ နှလုံးခုန်၊ ဗျာများ
💙 1F499 *blue heart
| blue *အပြာရောင် နှလုံး
| အပြာ၊ နှလုံး
💚 1F49A *green heart
| green *အစိမ်းရောင် နှလုံး
| အစိမ်း၊ နှလုံး
💛 1F49B *yellow heart
| yellow *အဝါရောင် နှလုံး
| အဝါ၊ နှလုံး
🧡 1F9E1 *orange heart
| orange *လိမ္မော်ရောင် အသည်းနှလုံး
💜 1F49C *purple heart
| purple *ခရမ်းရောင် နှလုံး
| ခရမ်း၊ နှလုံး
🖤 1F5A4 *black heart
| black | evil | wicked *အနက်ရောင်နှလုံးသား
| နှလုံးသား | မကောင်းစိတ် | ယုတ်မာသော | အနက်
💝 1F49D *heart with ribbon
| ribbon | valentine *ဖဲကြိုးနှင့် နှလုံး
| ဖဲကြိုး၊ နှလုံး၊ ဗာလင်တင်
💞 1F49E *revolving hearts
| revolving *လည်နေသည့် နှလုံးများ
| နှလုံး၊ လည်နေ
💟 1F49F *heart decoration
| heart *နှလုံးဖြင့် အလှပြင်ဆင်ခြင်း
| နှလုံး၊ အလှပြင်
❣ 2763 *heavy heart exclamation
| exclamation | mark | punctuation *လေးလံသည့် နှလုံးပုံစံ အာမေဍိတ်အတွဲ
| နှလုံး၊ အာမေဍိတ်၊ အမှတ်၊ အသား၊ ပုဒ်ြဖတ်ပုဒ်ရပ်
💌 1F48C *love letter
| heart | letter | love | mail *ရည်းစား စာ
| စာ၊ ချစ်၊ နှလုံး၊ ချစ်ကြိုက်
💤 1F4A4 *zzz
| comic | sleep
| comic | sleep | sleeping | sleepy *ခေါ ခေါ ခေါ
| ဟာသ၊ အိပ်
💢 1F4A2 *anger symbol
| angry | comic | mad *ဒေါသ
| ဒေါသာ၊ ဟာသ၊ အရူး
💣 1F4A3 *bomb
| comic *ဗုံး
💥 1F4A5 *collision
| boom | comic *တိုက်မိခြင်း
| တိုက်မိ၊ ဟာသ
💦 1F4A6 *sweat droplets
| comic | splashing | sweat *ချွေးစက်များ
| ချွေး၊စီးကျ၊ ဟာသ
💨 1F4A8 *dashing away
| comic | dash | running *တစ်ဟုန်ထိုးပြေးခြင်း
| တဟုန်ထိုးပြေးခြင်း | ဟာသ၊ တဟုန်ထိုး၊ ပြေး
💫 1F4AB *dizzy
| comic | star
| comic | spinning | spinning stars | star *မူးဝေခြင်း
| ဟာသ၊ ကြယ်
💬 1F4AC *speech balloon
| balloon | bubble | comic | dialog | speech
en_001: *speech balloon
| balloon | bubble | comic | dialogue | speech *စကားပြော အကွက်
| ပူဖောင်း၊ ဗလုံ၊ ဟာသ၊ မေးဖြေ၊ စကား
🗨 1F5E8 *left speech bubble
| dialog | speech
en_001: *left speech bubble
| dialogue | speech *ဘယ်ဘက် စကားပြော အကွက်
| မေးဖြေ၊ စကား
🗯 1F5EF *right anger bubble
| angry | balloon | bubble | mad *ညာဘက် ဒေါသ အကွက်
| ဒေါသ၊ ဗလုံ၊ ရူး၊ လေပူဖောင်း
💭 1F4AD *thought balloon
| balloon | bubble | comic | thought
en_001: *thought bubble
| balloon | bubble | comic | thought *အတွေး ပူဖောင်းအကွက်
| ပူဖောင်း၊ ဗလုံ၊ ဟာသ၊ အတွေး
🕳 1F573 *hole *အပေါက်
👓 1F453 *glasses
| clothing | eye | eyeglasses | eyewear
| clothing | eye | eyeglasses | eyewear | specs | spectacles *မျက်မှန်
| မျက်မှန်၊ ဝတ်စရာ၊ မျက်မှန်၊ မျက်လုံး
🕶 1F576 *sunglasses
| dark | eye | eyewear | glasses *နေကာ မျက်မှန်
| မှောင်၊ မျက်လုံး၊ နေကာ၊ မျက်မှန်
👔 1F454 *necktie
| clothing | tie *နက်ကတိုင်
👕 1F455 *t-shirt
| clothing | shirt | tshirt
| clothing | shirt | tshirt *တီရှပ်
| တီရှပ်၊ ရှပ်၊ ဝတ်စရာ
👖 1F456 *jeans
| clothing | pants | trousers
| clothing | trousers *ဂျင်းဘောင်းဘီ
| ဝတ်စရာ၊ ဘောင်းဘီ၊ ဂျင်း
🧣 1F9E3 *scarf
| neck *လည်စည်း
🧤 1F9E4 *gloves
| hand *လက်အိတ်
🧥 1F9E5 *coat
| jacket *ကုတ်
🧦 1F9E6 *socks
| stocking *ခြေအိတ်
👗 1F457 *dress
| clothing *ဝတ်စုံ
👘 1F458 *kimono
| clothing *ကီမိုနို
👙 1F459 *bikini
| clothing | swim *ဘီကီနီ
| အဝတ်အစား၊ ရေကူး
👚 1F45A *woman’s clothes
| clothing | woman *အမျိုးသမီး အဝတ်အစားများ
| အမျိုးသမီး၊ အဝတ်အစာ
👛 1F45B *purse
| clothing | coin *ပိုက်ဆံအိတ်
| အသုံးအဆောင်၊ အကြွေ၊ အိတ်
👜 1F45C *handbag
| bag | clothing | purse *လက်ဆွဲအိတ်
| အိတ်၊ အသုံးအဆောင်
👝 1F45D *clutch bag
| bag | clothing | pouch *လက်ကိုင်အိတ်
🛍 1F6CD *shopping bags
| bag | hotel | shopping *ဈေးဝယ် အိတ်များ
| ဈေး၀ယ်၊ အိတ်၊ ဟော်တယ်
🎒 1F392 *backpack
| bag | rucksack | satchel | school
en_001: *school bag
| backpack | bag | rucksack | satchel | school *ကျောင်းသား ကျောပိုးအိတ်
| ကျောင်း၊ ကျောပိုး၊ အိတ်
👞 1F45E *man’s shoe
| clothing | man | shoe *အမျိုးသား ဖိနပ်
| အမျိုးသား၊ ဖိနပ်၊ အ၀တ်အစား
👟 1F45F *running shoe
| athletic | clothing | shoe | sneaker
en_001: *running shoe
| athletic | clothing | shoe | trainer *အပြေး ဖိနပ်
| ပြေး၊ ဖိနပ်၊ အဝတ်အစား၊ အားကစား
👠 1F460 *high-heeled shoe
| clothing | heel | shoe | woman
en_001: *high-heeled shoe
| clothing | heel | shoe | stiletto | woman *ဒေါက်မြင့် ဖိနပ်
| ဒေါက်၊ ဖိနပ်၊ အမျိုးသမီး၊ အဝတ်အစား
👡 1F461 *woman’s sandal
| clothing | sandal | shoe | woman *အမျိုးသမီး ညှပ်ဖိနပ်
| အမျိုးသမီး၊ ဖိနပ်၊ ကြိုးသိုင်း၊ အဝတ်အစား
👢 1F462 *woman’s boot
| boot | clothing | shoe | woman *အမျိုးသမီး ဘွတ်ဖိနပ်
| အမျိုးသမီး၊ ဖိနပ်၊ ဘွတ်၊ အဝတ်အစား
👑 1F451 *crown
| clothing | king | queen *သရဖူ
| သရဖူ၊ ဘုရင်၊ ဘုရင်မ၊ အဝတ်အစား
👒 1F452 *woman’s hat
| clothing | hat | woman *အမျိုးသမီး ဦးထုပ်
| အမျိုးသမီး၊ ဦးထုပ်၊ အဝတ်အစား
🎩 1F3A9 *top hat
| clothing | hat | top | tophat *ဦးထုပ်မြင့်
| ဦးထုပ်၊ အဝတ်အစား၊ မြင့်၊
🎓 1F393 *graduation cap
| cap | celebration | clothing | graduation | hat
en_001: *graduation cap
| cap | celebration | clothing | graduation | hat | mortarboard *ဘွဲ့ဦးထုတ်
| ဘွဲ့ယူ ကက်ဦးထုပ် | ဘွဲ့ယူ၊ အခမ်းအနား၊ ကက်ဦးထုပ်၊ ဦးထုပ်၊ အဝတ်အစား
🧢 1F9E2 *billed cap
| baseball cap *ကက်ဦးထုတ်
⛑ 26D1 *rescue worker’s helmet
| aid | cross | face | hat | helmet *ကြက်ခြေခတ်ဖြူနှင့် ခမောက်
| သူနာပြု၊ ကူညီ၊ ကြက်ခြေခတ်၊ ခမောက်
📿 1F4FF *prayer beads
| beads | clothing | necklace | prayer | religion *တရားကျင့် ပုတီး
| တရား၊ ဆုတောင်း၊ ပုတီး၊ လည်ဆွဲ၊ ဘာသာရေး
💄 1F484 *lipstick
| cosmetics | makeup *နှုတ်ခမ်းနီ
| မိတ်ကပ်၊ အလှပြင်၊
💍 1F48D *ring
| diamond *လက်စွပ်
| စိန်၊ ချစ်
💎 1F48E *gem stone
| diamond | gem | jewel *ကျောက်မျက် ရတနာ
| စိန်၊ ချစ်၊ ကျောက်မျက်၊ ရတနာ
🐵 1F435 *monkey face
| face | monkey *မျောက်ရုပ်
| မျောက်မျက်နှာ | မျောက်၊ မျက်နှာ
🐒 1F412 *monkey *မျောက်
🦍 1F98D *gorilla *လူဝံ
🐶 1F436 *dog face
| dog | face | pet *ခွေးရုပ်
| ခွေး မျက်နှာ | ခွေး၊ မျက်နှာ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်
🐕 1F415 *dog
| pet *ခွေး
🐩 1F429 *poodle
| dog *အမွှေးထူခွေး
| အမွှေး၊ ခွေး
🐺 1F43A *wolf face
| face | wolf *ဝံပုလွေရုပ်
| ဝံပုလွေ မျက်နှာ | ဝံပုလွေ၊ မျက်နှာ
🦊 1F98A *fox face
| face | fox *မြေခွေးရုပ်
| တိရစ္ဆာန် | မြေခွေး | ရုပ်
🐱 1F431 *cat face
| cat | face | pet *ကြောင်ရုပ်
| ကြောင် မျက်နှာ | ကြောင်၊ မျက်နှာ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်
🐈 1F408 *cat
| pet *ကြောင်
🦁 1F981 *lion face
| Leo | face | lion | zodiac *ခြင်္သေ့ရုပ်
| ခြင်္သေ့ မျက်နှာ | ခြင်္သေ့၊ မျက်နှာ၊ ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်
🐯 1F42F *tiger face
| face | tiger *ကျားရုပ်
| ကျား မျက်နှာ | ကျား၊ မျက်နှာ
🐅 1F405 *tiger *ကျား
🐆 1F406 *leopard *ကျားသစ်
🐴 1F434 *horse face
| face | horse *မြင်းရုပ်
| မြင်း မျက်နှာ | မြင်း၊ မျက်နှာ
🐎 1F40E *horse
| equestrian | racehorse | racing *မြင်း
| မြင်း၊ ပြိုင်မြင်း၊ အပြေးပြိုင်
🦄 1F984 *unicorn face
| face | unicorn *ချိုတစ်ချောင်းမြင်းရုပ်
| ချိုတစ်ချောင်းမြင်း မျက်နှာ | ချိုတစ်ချောင်း၊ မျက်နှာ၊ မြင်း
🦓 1F993 *zebra
| stripe *မြင်းကျား
🦌 1F98C *deer *သမင်
🐮 1F42E *cow face
| cow | face *နွားမရုပ်
| နွားမ မျက်နှာ | နွားမ၊ မျက်နှာ
🐂 1F402 *ox
| Taurus | bull | zodiac *နွားထီး
| နွားထီး၊ ပြီဿာ၊ ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်
🐃 1F403 *water buffalo
| buffalo | water *ကျွဲ
| ကျွဲ၊ ရေ၊ ရွှံ့
🐄 1F404 *cow *နွားမ
🐷 1F437 *pig face
| face | pig *ဝက်ရုပ်
| ဝက် မျက်နှာ | ဝက်၊ မျက်နှာ
🐖 1F416 *pig
| sow *ဝက်
🐗 1F417 *boar
| pig *တောဝက်
🐽 1F43D *pig nose
| face | nose | pig
en_001: *pig nose
| face | nose | pig | snout *ဝက်နှာခေါင်း
| ဝက်၊ နှာခေါင်း၊ မျက်နှာ
🐏 1F40F *ram
| Aries | male | sheep | zodiac *သိုးထီး
| သိုးထီး၊ သိုး၊ ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်
🐑 1F411 *ewe
| female | sheep *သိုး
🐐 1F410 *goat
| Capricorn | zodiac *ဆိတ်
| မကရ၊ ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်
🐪 1F42A *camel
| dromedary | hump
| dromedary | hump | one hump | single hump *ကုလားအုတ်
| ဘို့၊ ကုလားအုတ်
🐫 1F42B *two-hump camel
| bactrian | camel | hump
en_CA: *two-hump camel
en_001: *two-hump camel
| bactrian | camel | hump | two humps *ဘို့နှစ်ဘို့ရှိ ကုလားအုတ်
🦒 1F992 *giraffe
| spots *သစ်ကုလားအုတ်
🐘 1F418 *elephant *ဆင်
🦏 1F98F *rhinoceros *ကြံ့
🐭 1F42D *mouse face
| face | mouse *ကြွက် မျက်နှာ
| ကြွက်၊ မျက်နှာ
🐁 1F401 *mouse *ကြွက်ငယ်
🐀 1F400 *rat *ကြွက်
🐹 1F439 *hamster face
| face | hamster | pet *မြီးတိုပါးတွဲကြွက်ရုပ်
| မြီးတိုပါးတွဲကြွက် | မြီးတိုပါးတွဲကြွက်၊ မျက်နှာ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်
🐰 1F430 *rabbit face
| bunny | face | pet | rabbit *ယုန်ရုပ်
| ယုန် မျက်နှာ | ယုန်၊ မျက်နှာ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၊ ယုန်ကလေး
🐇 1F407 *rabbit
| bunny | pet *ယုန်
| အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၊ ယုန်ကလေး
🐿 1F43F *chipmunk
| squirrel *ကျောရိုးတွင် အဖြူအနက်စင်းပါ ရှဥ့်ငယ်တမျိုး
🦔 1F994 *hedgehog
| spiny *ဖြူငယ်
🦇 1F987 *bat
| vampire *လင်းနို့
| တိရစ္ဆာန် | သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်
🐻 1F43B *bear face
| bear | face *ဝက်ဝံရုပ်
| ဝက်ဝံ မျက်နှာ | ဝက်ဝံ၊ မျက်နှာ
🐨 1F428 *koala
| bear *ကိုအာလာ
🐼 1F43C *panda face
| face | panda *ပန်ဒါရုပ်
| ပန်ဒါ မျက်နှာ | ပန်ဒါ၊ မျက်နှာ
🐾 1F43E *paw prints
| feet | paw | print *တိရိစ္ဆာန် ခြေရာ
| တိရိစ္ဆာန်ဖဝါး အရာများ | ဖဝါး၊ ခြေ၊ အရာများ
🦃 1F983 *turkey
| bird *ကြက်ဆင်
🐔 1F414 *chicken
| bird *ကြက်
🐓 1F413 *rooster
| bird | rooster *ကြက်ဖ
🐣 1F423 *hatching chick
| baby | bird | chick | hatching *ပေါက်ခါစ ကြက်ကလေး
🐤 1F424 *baby chick
| baby | bird | chick *ကြက်ပေါက်စကလေး
| ကြက်ပေါက်စ၊ ပေါက်စ
🐥 1F425 *front-facing baby chick
| baby | bird | chick *ရှေ့သို့မျက်နှာမူထားသည့် ကြက်ပေါက်စ
🐦 1F426 *bird *ငှက်
🐧 1F427 *penguin
| bird *ပင်ဂွင်းငှက်
🕊 1F54A *dove
| bird | fly | peace *ချိုးငှက်
| ငှက်၊ ပျံ၊ ငြိမ်းချမ်း
🦅 1F985 *eagle
| bird *လင်းယုန်
🦆 1F986 *duck
| bird *ဘဲ
🦉 1F989 *owl
| bird | wise *ဇီးကွက်
| ငှက် | ပညာရှိ
🐸 1F438 *frog face
| face | frog *ဖားရုပ်
| ဖား မျက်နှာ | ဖား၊ မျက်နှာ
🐊 1F40A *crocodile *မိကျောင်း
🐢 1F422 *turtle
| terrapin | tortoise *လိပ်
🦎 1F98E *lizard
| reptile *အိမ်မြှောင်
🐍 1F40D *snake
| Ophiuchus | bearer | serpent | zodiac *မြွေ
| မြွေ၊ ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်၊
🐲 1F432 *dragon face
| dragon | face | fairy tale *နဂါးရုပ်
| နဂါး မျက်နှာ | နဂါး၊ မျက်နှာ၊ ပုံပြင်
🐉 1F409 *dragon
| fairy tale *နဂါး
🦕 1F995 *sauropod
| brachiosaurus | brontosaurus | diplodocus *ဆော်ရိုပေါ့ဒ်
| ဒိုင်ပလိုဒိုးကပ်စ် | ဘရာခီယိုဆောရက်စ် | ဘရွန်တိုဆောရက်
🦖 1F996 *T-Rex
| Tyrannosaurus Rex *တီ ရက်စ်
| တိုင်ရန်နိုဆောရက်စ် ရက်စ်
🐳 1F433 *spouting whale
| face | spouting | whale *ရေမှုတ်ထုတ်နေသည့် ဝေလငါး
| ရေပန်း၊ မျက်နှာ၊ ဝေလငါး
🐋 1F40B *whale *ဝေလငါး
🐬 1F42C *dolphin
| flipper *လင်းပိုင်
🐟 1F41F *fish
| Pisces | zodiac *ငါး
| ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင် | မိန်ရာသီ
🐠 1F420 *tropical fish
| fish | tropical *အပူပိုင်း ငါး
| အပူပိုင်း၊ ငါး
🐡 1F421 *blowfish
| fish *ငါးပူဖောင်း
| ငါး၊ ပူဖောင်း
🦈 1F988 *shark
| fish *ငါးမန်း
🐙 1F419 *octopus *ဘဝဲ
| ဘဝဲ၊ ပြည်ကြီးငါး
🐚 1F41A *spiral shell
| shell | spiral *ခရုခွံ
| ခရု၊ ခွံ
🦀 1F980 *crab
| Cancer | zodiac *ကဏန်း
| ကဏန်း၊ ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်၊
🦐 1F990 *shrimp
| food | shellfish | small
| food | prawn | shellfish | small *ပုစွန်
| ဂုံး | သေးသေး | အစားအသောက်
🦑 1F991 *squid
| food | molusc
| food | mollusc *ပြည်ကြီးငါး
| ခရု | အစားအသောက်
🐌 1F40C *snail *ခရု
🦋 1F98B *butterfly
| insect | pretty *လိပ်ပြာ
| ချစ်စဖွယ် | ပိုးမွှား
🐛 1F41B *bug
| insect *ပိုးကောင်ကလေး
| အင်းဆက်၊ ပိုးကောင်
🐜 1F41C *ant
| insect *ပုရွက်ဆိတ်
🐝 1F41D *honeybee
| bee | insect *ပျား
| ပျား၊ အင်းဆက်
🐞 1F41E *lady beetle
| beetle | insect | ladybird | ladybug
| beetle | insect | ladybeetle | ladybug *ပိုးတောင်မာ
| ပိုးတောင်မာ၊ လေဒီဘတ်၊ အင်းဆက်
🦗 1F997 *cricket
| grasshopper *ပုရစ်ကောင်
🕷 1F577 *spider
| insect *ပင့်ကူ
🕸 1F578 *spider web
| spider | web
en_001: *spider’s web
| spider | web *ပင့်ကူမျှင်
| ပင့်ကူမျှင်၊ ဝဘ်
🦂 1F982 *scorpion
| Scorpio | scorpio | zodiac *ကင်းမြီးကောက်
| ကင်း | ကင်း၊ ကင်းမြီးကောက်၊ ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်
💐 1F490 *bouquet
| flower *ပန်းစည်း
| ပန်း၊ အပင်၊ ချစ်
🌸 1F338 *cherry blossom
| blossom | cherry | flower *ချယ်ရီပန်း
| ချယ်ရီ၊ ပန်း၊ အပင်၊ ပွင့်
💮 1F4AE *white flower
| flower *ပန်းဖြူ
🏵 1F3F5 *rosette
| plant *နှင်းဆီပွင့်ပုံစံ
| စိုက်၊ ပွင့်
🌹 1F339 *rose
| flower *နှင်းဆီပန်း
| ပန်း၊ အပင်
🥀 1F940 *wilted flower
| flower | wilted *ပန်းညှိုးတစ်ပွင့်
| ညှိုးနွမ်း | ပန်း
🌺 1F33A *hibiscus
| flower *ခေါင်ရန်းပန်း
| ခေါင်ရန်း၊ အပင်
🌻 1F33B *sunflower
| flower | sun *နေကြာပန်း
| နေ၊ ပန်း၊ အပင်
🌼 1F33C *blossom
| daisy | flower *ပန်းပွင့်
🌷 1F337 *tulip
| flower *ကျူးလစ်ပန်း
🌱 1F331 *seedling
| young *ပျိုးပင်
| ပျိုးပင်၊ အပင်
🌲 1F332 *evergreen tree
| tree *အမြဲစိမ်း
| အပင်၊ သစ်ပင်
🌳 1F333 *deciduous tree
| deciduous | shedding | tree *ရွက်ပြတ်ပင်
| ရွက်ပြတ်ပင်၊ အပင်၊ အရိပ်၊ သစ်ပင်
🌴 1F334 *palm tree
| palm | tree *ထန်းမျိုးအပင်
| ထန်း၊ အပင်
🌵 1F335 *cactus
| plant *ရှားစောင်းပင်
🌾 1F33E *sheaf of rice
| ear | grain | rice
en_001: *ear of rice
| grain | rice | sheaf *ကောက်နှံပင်
| ကောက်၊ အနှံ၊ အပင်
🌿 1F33F *herb
| leaf *ဆေးဖက်ဝင်အပင်
| အရွက်၊ အပင်
☘ 2618 *shamrock
| plant *ပဲမျိုးရင်း အပင်ငယ်
🍀 1F340 *four leaf clover
|4| clover | four | four-leaf clover | leaf
en_001: *four-leaf clover
|4| clover | four | leaf *လေးရွက်ဆိုင် ပဲရိုင်းပင်
| အရွက်၊ ၄၊ အပင်၊ ပဲရိုင်းပင်
🍁 1F341 *maple leaf
| falling | leaf | maple *မေပယ်ရွက်
| မေပယ်၊ အရွက်၊ အပင်၊ ကျ
🍂 1F342 *fallen leaf
| falling | leaf *ရွက်ကြွေ
| ရွက်၊ ကျ၊ အပင်
🍃 1F343 *leaf fluttering in wind
| blow | flutter | leaf | wind *လေနှင်ရာလွင့်နေသည့် အရွက်
| ပျံဝဲနေသည့် အရွက် | လေ၊ ပျံ၊ ဝဲ၊ အပင်၊ အရွက်
🍇 1F347 *grapes
| fruit | grape *စပျစ်သီး
| စပျစ်၊ အသီး၊ အပင်
🍈 1F348 *melon
| fruit *သခွားမွှေး
| အသီး၊ အပင်
🍉 1F349 *watermelon
| fruit *ဖရဲသီး
🍊 1F34A *tangerine
| fruit | orange
| fruit | orange *အခွံပွလိမ္မော်သီး
| လိမ္မော်၊ အသီး၊ အပင်
🍋 1F34B *lemon
| citrus | fruit *ရှောက်သီး
| ရှောက်၊ အသီး၊ အပင်
🍌 1F34C *banana
| fruit *ငှက်ပျောသီး
🍍 1F34D *pineapple
| fruit *နာနတ်သီး
🍎 1F34E *red apple
| apple | fruit | red *ပန်းသီးအနီ
| ပန်းသီး၊ အသီး၊ အပင်၊ နီ
🍏 1F34F *green apple
| apple | fruit | green *ပန်းသီးစိမ်း
| ပန်းသီး၊ အသီး၊ အပင်၊ စိမ်း
🍐 1F350 *pear
| fruit *သစ်တော်သီး
🍑 1F351 *peach
| fruit *မက်မွန်သီး
🍒 1F352 *cherries
| berries | cherry | fruit | red *ချယ်ရီသီးများ
| ချယ်ရီ၊ အသီး၊ အပင်
🍓 1F353 *strawberry
| berry | fruit *စတော်ဘယ်ရီ
| ဘယ်ရီ၊ အသီး၊ အပင်
🥝 1F95D *kiwi fruit
| food | fruit | kiwi *ကီဝီသီး
| သစ်သီး | အစားအသောက်
🍅 1F345 *tomato
| fruit | vegetable *ခရမ်းချဉ်သီး
| ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အပင်
🥥 1F965 *coconut
| palm | piña colada *အုန်းသီး
| piña colada | ထန်းပင်
🥑 1F951 *avocado
| food | fruit *ထောပတ်သီး
🍆 1F346 *eggplant
| aubergine | vegetable
en_CA: *eggplant *ခရမ်းသီး
| ခရမ်းသီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အပင်
🥔 1F954 *potato
| food | vegetable *အာလူး
| အစားအသောက် | အသီးအနှံ | အားလူး
🥕 1F955 *carrot
| food | vegetable *မုန်လာဥ
| အစားအသောက် | အသီးအနှံ
🌽 1F33D *ear of corn
| corn | ear | maize | maze *ပြောင်းနှံ
| ပြောင်း၊ နှံ၊ အပင်
🌶 1F336 *hot pepper
| hot | pepper
en_AU: *hot pepper
| chilli | pepper *ငရုတ်သီး
| စပ်၊ အပင်၊ ငရုတ်
🥒 1F952 *cucumber
| food | pickle | vegetable *သခွားသီး
| ဆားရည်စိမ် | အစားအသောက် | အသီးအနှံ
🥦 1F966 *broccoli
| wild cabbage *ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း
| ဂေါ်ဖီထုပ် အရိုင်း
🍄 1F344 *mushroom
| toadstool *မှို
🥜 1F95C *peanuts
| food | nut | peanut | vegetable
| food | monkey nut | nut | nuts | peanut *မြေပဲ
| အခွံမာသီး | အစားအသောက် | အသီးအနှံ
🌰 1F330 *chestnut
en_AU, en_CA: *chestnut
| nut *သစ်အယ်သီး
🍞 1F35E *bread
| loaf *ပေါင်မုန့်
🥐 1F950 *croissant
| bread | crescent roll | food | french
| French | bread | crescent roll | food *လခြမ်းကွေးပေါင်မုန့်
| ပေါင်မုန့် | ပြင်သစ် | လခြမ်းကွေးပေါင်မုန့်လိပ် | အစားအသောက်
🥖 1F956 *baguette bread
| baguette | bread | food | french
en_AU: *French stick
en_CA: *baguette bread
| French | baguette | bread | food
| bread | food | french *ပြင်သစ်ပေါင်မုန့်
| ပေါင်မုန့် | ပြင်သစ် | အစားအသောက်
🥨 1F968 *pretzel
| twisted *မုန့်ကြိုးလိမ်
🥞 1F95E *pancakes
| crêpe | food | hotcake | pancake *မုန့်အိုးကင်းကြော်
🧀 1F9C0 *cheese wedge
| cheese *ဒိန်ခဲ အတုံး
🍖 1F356 *meat on bone
| bone | meat *အရိုးပါ အသား
| အရိုး၊ အသား
🍗 1F357 *poultry leg
| bone | chicken | drumstick | leg | poultry *ကြက်ပေါင်
| အရိုး၊ ကြက်၊ ခြေထောက်၊ ကြက်ငှက်
🥩 1F969 *cut of meat
| chop | lambchop | porkchop | steak *အသားပြား
| ကင်ရန်အမဲသား | ဝက်သားတုံး | သိုးသား | အတုံး
🥓 1F953 *bacon
| food | meat *ဝက်ပေါင်ခြောက်
| အစားအသောက် | အသား
🍔 1F354 *hamburger
| burger | hamburger *ဟမ်ဘာဂါ
🍟 1F35F *french fries
| french | fries
en_CA: *French fries
| french fries | fries
en_AU: *french fries
| chips | fries *အာလူးချောင်းကြော်
| အားလူး၊ ချောင်း၊ ကြော်
🍕 1F355 *pizza
| cheese | slice *ပီဇာ
| ဒိန်ခဲ၊ အချပ်
🌭 1F32D *hot dog
| frankfurter | hotdog | sausage
en_CA: *hot dog
| frankfurter | sausage *ဟော့ဒေါ့
| ဟော့ဒေါ့၊ ဝက်အူခ​ျောင်း၊ ဖရန့်ဖွတ်
🥪 1F96A *sandwich
| bread *အသားညှပ်ပေါင်မုန့်
🌮 1F32E *taco
| Mexican *တာကို
🌯 1F32F *burrito
| mexican | wrap
| Mexican | wrap *ဘူရီတို
🥙 1F959 *stuffed flatbread
| falafel | flatbread | food | gyro | kebab | stuffed *နံပြားအစာသွတ်
| ခဘတ် | နံပြား | ဘယာကြော် | အစာသွတ် | အစားအသောက်
🥚 1F95A *egg
| food *ဥ
🍳 1F373 *cooking
| egg | frying | pan *ချက်ပြုတ်ခြင်း
| ကြက်ဥ၊ ကျော်၊ ဒယ်အိုး
🥘 1F958 *shallow pan of food
| casserole | food | paella | pan | shallow *ဒယ်အိုးပါးနှင့်စားစရာ
| ဒယ်အိုးပါး | ပီယာလာ | အစားအသောက်
🍲 1F372 *pot of food
| pot | stew *အစားအစာ အိုး
| ပြုတ်ချက်၊ အိုး
🥣 1F963 *bowl with spoon
| breakfast | cereal | congee *ဇွန်းနှင့် ဟင်းခွက်
| နံနက်စာ | အနှံအစေ့
🥗 1F957 *green salad
| food | green | salad
en_AU: *garden salad
| food | garden | salad *အရွက်သုပ်
| အစားအသောက် | အရွက်စိမ်း | အသုပ်
🍿 1F37F *popcorn *ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်
🥫 1F96B *canned food
en_001: *tinned food
| can | canned food | tin *စည်သွပ်အစားအစာ
🍱 1F371 *bento box
| bento | box *ဘင်တို ဘူး
| ဘင်တို၊ ဘူး
🍘 1F358 *rice cracker
| cracker | rice *ထမင်းခြောက်မုန့်
| ဆန်၊ ခရက်ကာ
🍙 1F359 *rice ball
| Japanese | ball | rice *ထမင်းလုံး
| ထမင်းလုံး၊ ထမင်း၊ ဂျပန်
🍚 1F35A *cooked rice
| cooked | rice *ထမင်း
| ထမင်း၊ ချက်
🍛 1F35B *curry rice
| curry | rice *ထမင်းဟင်း
| ထမင်း၊ ဟင်း
🍜 1F35C *steaming bowl
| bowl | noodle | ramen | steaming *ခေါက်ဆွဲပြုပ် ပန်းကန်လုံး
| ဆူ၊ ပန်းကန်လုံး၊ ခေါက်ဆွဲ
🍝 1F35D *spaghetti
| pasta *အီတလီခေါက်ဆွဲ
🍠 1F360 *roasted sweet potato
| potato | roasted | sweet *ကင်ထားသည့် ကန်စွန်းဥ
| ကင်၊ ကန်စွန်းဥ
🍢 1F362 *oden
| kebab | seafood | skewer | stick *အိုဒင်
| ကီးဘာဘ်၊ ပင်လယ်စာ၊ သီတံ၊ အချောင်း
🍣 1F363 *sushi *ဆူရှီ
🍤 1F364 *fried shrimp
| fried | prawn | shrimp | tempura
en_001: *fried prawn
| fried | prawn | shrimp | tempura *ပုဇွန်ကြော်
| ပုစွန်ကျော် | ပုစွန်၊ ပုစွန်တုပ်၊ ကျော်၊ တမ်ပူရာ၊
🍥 1F365 *fish cake with swirl
| cake | fish | pastry | swirl *ငါးဆုပ် အလိပ်
| ငါးဆုပ်၊ အလိပ်၊ မုန့်၊ ငါး
🍡 1F361 *dango
| Japanese | dessert | skewer | stick | sweet *ဒန်ဂို
| အချိုစာ၊ ဂျပန်၊ သီတံ၊ အချောင်း၊ ချို
🥟 1F95F *dumpling
| empanada | gyōza | jiaozi | pierogi | potsticker *အစာသွတ်မုန့်
🥠 1F960 *fortune cookie
| prophecy *တရုတ်မုန့်
🥡 1F961 *takeout box
| oyster pail
en_001: *takeaway box
| oyster pail | takeout box *ထုပ်ယူသွားနိုင်သည့် ဘူး
| စက္ကူနှင့်လုပ်တဲ့ ထည့်စရာပုံး
🍦 1F366 *soft ice cream
| cream | dessert | ice | icecream | soft | sweet
en_CA: *soft ice cream
| cream | dessert | ice | soft | sweet *ရေခဲမုန့် အပျော့
| မလိုင်၊ ရေခဲ၊ မုန့်၊ အပျော့၊ ချို၊ အချိုပွဲ
🍧 1F367 *shaved ice
| dessert | ice | shaved | sweet
| dessert | ice | sweet *ရေခဲခြစ်မုန့်
| ရေခဲ၊ ခြစ်၊ မုန့်၊ အချိုပွဲ
🍨 1F368 *ice cream
| cream | dessert | ice | sweet *ရေခဲမုန့်
| မလိုင်၊ ရေခဲ၊ မုန့်၊ ချို၊ အချိုပွဲ
🍩 1F369 *doughnut
| dessert | donut | sweet *ဒိုးနတ်
| ဒိုးနတ်၊ ချို၊ အချိုပွဲ
🍪 1F36A *cookie
| dessert | sweet
| cookie | dessert | sweet
| biscuit | dessert | sweet *ကွတ်ကီး
| ကွတ်ကီး၊ အချိုပွဲ
🎂 1F382 *birthday cake
| birthday | cake | celebration | dessert | pastry | sweet *မွေးနေ့ ကိတ်မုန့်
| မွေးနေ့၊ ကိတ်၊ မုန့်၊ အချိုပွဲ ချို၊ ကျင်းပ
🍰 1F370 *shortcake
| cake | dessert | pastry | slice | sweet
| dessert | pastry | slice | sweet *အသီးနှင့်မလိုင်အုပ် ကိတ်မုန့်
| မလိုင်၊ ကိတ်၊ မုန့်၊ အချိုပွဲ
🥧 1F967 *pie
| filling | pastry
| filling | pastry | slice | tart *ပိုင်မုန့်
🍫 1F36B *chocolate bar
| bar | chocolate | dessert | sweet *ချောကလက် အချောင်း
| ချောကလက်၊ အချောင်း၊ ချို၊ အချိုပွဲ
🍬 1F36C *candy
| dessert | sweet *သကြားလုံး
| အချိုပွဲ၊ အချို
🍭 1F36D *lollipop
| candy | dessert | sweet
| dessert | lolly | sweet *ချိုချဉ်ပလုတ်တုတ်
| ချိုချဥ်၊ ချို၊ အချိုပွဲ
🍮 1F36E *custard
| dessert | pudding | sweet
en_001: *egg custard
| dessert | pudding | sweet *ပူတင်း
| ပူတင်း၊ အချို၊ အချိုပွဲ
🍯 1F36F *honey pot
| honey | honeypot | pot | sweet *ပျားရည်အိုး
| ပျားရည်၊ အိုး၊ ပျားအိုး၊ ချို
🍼 1F37C *baby bottle
| baby | bottle | drink | milk
en_001: *baby bottle
| baby | baby’s bottle | bottle | drink | milk *ကလေးနို့ဗူး
| ကလေးငယ်၊ တိုက်၊ နို့၊ ပုလင်း
🥛 1F95B *glass of milk
| drink | glass | milk *နွားနို့တစ်ခွက်
| နွားနို့ | ဖန်ခွက် | အသောက်
☕ 2615 *hot beverage
| beverage | coffee | drink | hot | steaming | tea *သောက်စရာ အပူ
| သောက်စရာ၊ ယမကာ၊ အပူ၊ အငွေ့ထွက်၊ လဖက်ရည်
🍵 1F375 *teacup without handle
| beverage | cup | drink | tea | teacup *လက်ဖက်ရည် ပန်းကန်လုံး
| လဖက်ရည် ပန်းကန်လုံး၊ သောက်စရာ၊ ယမကာ၊ လဖက်ရည်
🍶 1F376 *sake
| bar | beverage | bottle | cup | drink
| bar | beverage | bottle | cup | drink | saké *ဆာကေ
| ဘား၊ ပုလင်း၊ ခွက်၊ သောက်စရာ၊ ယမကာ
🍾 1F37E *bottle with popping cork
| bar | bottle | cork | drink | popping
en_001: *bottle with popping cork
| bar | bottle | champagne | cork | drink | popping *လွင့်ထွက်ပွင့်လာမည့် ဖော့ဆို့ပါ ပုလင်း
| ဖော့ဆို့ လွှင့်ထွက်လာနေသည့် ပုလင်း | ဘား၊ ဖော့ဆို့၊ သောက်စရာ၊ လွှင့်ထွက်၊ ပုလင်း
🍷 1F377 *wine glass
| bar | beverage | drink | glass | wine *ဝိုင်ခွက်
| ဝိုင်၊ ခွက်၊ သောက်၊ ယမကာ၊ ဘား
🍸 1F378 *cocktail glass
| bar | cocktail | drink | glass *အရက်စုံယမကာခွက်
| အရက်စုံ၊ ယမကာ၊ ခွက်၊ ဘား
🍹 1F379 *tropical drink
| bar | drink | tropical *အပူပိုင်းဒေသ ဖျော်ရေ
| အပူပိုင်း ယမကာ | အပူပိုင်း၊ ယမကာ၊ ဘား
🍺 1F37A *beer mug
| bar | beer | drink | mug
en_001: *beer mug
| bar | beer | drink | mug | stein *ဘီယာ မတ်ခွက်
| ဘီယာ၊ မတ်ခွက်၊ ယမကာ၊ ဘား
🍻 1F37B *clinking beer mugs
| bar | beer | clink | drink | mug
en_001: *clinking beer mugs
| bar | beer | clink | drink | mug | steins *ဘီယာမတ်ခွက်များဖြင့် အသံမြည်အောင် ထိပေးခြင်း
| ဘီယာ၊ မတ်ခွက်၊ ယမကာ၊ ဘား၊ ချွင်ချွင်မြည်
🥂 1F942 *clinking glasses
| celebrate | clink | drink | glass *ဖန်ခွက်ခြင်းထိသည်
| ဖန်ခွက် | ဖန်ခွက်ထိ | အသောက် | အောင်ပွဲ
🥃 1F943 *tumbler glass
| glass | liquor | shot | tumbler | whisky *အောက်ခြေပြား ဖန်ခွက်
| ဖန်ခွက် | ဝီစကီ | အရက်ပြင်း | အောက်ခြေပြား
🥤 1F964 *cup with straw
| juice | soda
en_001: *cup with straw
| fizzy drink | juice | soft drink *ပိုက်နှင့်ခွက်
| ဆိုဒါ | သစ်သီးဖျော်ရည်
🥢 1F962 *chopsticks
| hashi *စားတူ
| ဟာရှီ (စားတူ)
🍽 1F37D *fork and knife with plate
| cooking | fork | knife | plate
en_001: *knife and fork with plate
| cooking | fork | knife | plate *ဇွန်း၊ ခက်ရင်းနှင့် ပန်းကန်
| ချက်ပြုတ်၊ ပန်းကန်၊ ဇွန်းနှင့် ခက်ရင်း
🍴 1F374 *fork and knife
| cooking | cutlery | fork | knife
en_001: *knife and fork
| cooking | cutlery | fork | knife *ခက်ရင်းနှင့် ဓား
| ခက်ရင်း၊ ဓား၊ ချက်ပြုတ်
🥄 1F944 *spoon
| cutlery | tableware *ဇွန်း
🔪 1F52A *kitchen knife
| cooking | hocho | knife | tool | weapon
en_001: *kitchen knife
| cooking | cutlery | hocho | knife | tool | weapon *မီးဖိုသုံး ဓား
| ချက်ပြုတ်မှု၊ ဓား၊ ကိရိယာ၊ လက်နက်
🏺 1F3FA *amphora
| Aquarius | cooking | drink | jug | tool | weapon | zodiac
| Aquarius | cooking | drink | jar | jug | tool | weapon | zodiac *စဥ့်အိုး
| ကုံ၊ ချက်ပြုတ်၊ သောက်၊ အိုး၊ ကိရိယာ၊ တန်ဆာပလာ၊ ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်
🌍 1F30D *globe showing Europe-Africa
| Africa | Europe | earth | globe | world *ဥရောပနှင့် အာဖရိကကို ပြသထားသည့် ကမ္ဘာလုံး
| ဥရောပ၊ အာဖရိက၊ မြေကြီး၊ ကမ္ဘာလုံး၊ ကမ္ဘာ
🌎 1F30E *globe showing Americas
| Americas | earth | globe | world *အမေရိကတိုက်များကို ပြသထားသည့် ကမ္ဘာလုံး
| အမေရိက၊ မြေကြီး၊ ကမ္ဘာလုံး၊ ကမ္ဘာ
🌏 1F30F *globe showing Asia-Australia
| Asia | Australia | earth | globe | world *အာရှ−ဩစတြေးလျကို ပြသထားသည့် ကမ္ဘာလုံး
| အာရှ၊ ဩစတြေးလျ၊ မြေကြီး၊ ကမ္ဘာလုံး၊ ကမ္ဘာ
🌐 1F310 *globe with meridians
| earth | globe | meridians | world *လောင်ဂျီတွဒ်များပါသည့် ကမ္ဘာလုံး
| လောင်ဂျီတွဒ်များ၊ မြေကြီး၊ ကမ္ဘာလုံး၊ ကမ္ဘာ
🗺 1F5FA *world map
| map | world *ကမ္ဘာ့မြေပုံ
| ကမ္ဘာ၊ မြေပုံ
🗾 1F5FE *map of Japan
| Japan | map *ဂျပန်နိုင်ငံမြေပုံ
| ဂျပန်၊ မြေပုံ
🏔 1F3D4 *snow-capped mountain
| cold | mountain | snow *ဆီးနှင်းဖုံးနေသည့် တောင်
| အေး၊ တောင်၊ ဆီးနှင်း
⛰ 26F0 *mountain *တောင်
🌋 1F30B *volcano
| eruption | mountain *မီးတောင်
| ပေါက်ကွဲ၊ တောင်၊ မိုးလေဝသ
🗻 1F5FB *mount fuji
| fuji | mountain
en_CA: *mount Fuji
en_AU: *mount Fuji
| Fuji | mountain *ဖူဂျီတောင်
| ဖူဂျီ၊ တောင်
🏕 1F3D5 *camping *စခန်းချနေခြင်း
| စခန်း၊ နေ
🏖 1F3D6 *beach with umbrella
| beach | umbrella
en_001: *beach with umbrella
| beach | parasol | umbrella *ကမ်းခြေနှင့် ထီး
| သောင်ယံ၊ ထီး
🏜 1F3DC *desert *သဲကန္တာရ
🏝 1F3DD *desert island
| desert | island *လူသူမဲ့ကျွန်း
| လူသူမရှိ၊ ကျွန်း
🏞 1F3DE *national park
| park *အမျိုးသား ဥယျာဉ်
🏟 1F3DF *stadium *ဘောလုံးကွင်း
🏛 1F3DB *classical building
| classical *ရှေးရိုး အဆောက်အအုံ
| ရှေးရိုး၊ အဆောက်အအုံ
🏗 1F3D7 *building construction
| construction *အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်း
| အဆောက်အအုံ၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း
🏘 1F3D8 *houses *အိမ်ရာ အဆောက်အအုံများ
| အိမ်ယာ၊ အဆောက်အအုံ
🏚 1F3DA *derelict house
| derelict | house
en_001: *derelict house
| derelict | dilapidated | house *စွန့်ပစ်အိမ်ရာ
| စွန့်ပစ်နေရာ၊ အိမ်ယာ၊ အဆောက်အအုံ | ပိုင်ရှင်စွန့်နေရာများတွင် အိမ်ရာဆောက်လုပ်ခြင်း
🏠 1F3E0 *house
| home *အိမ်
| အိမ်ယာ၊ အိမ်၊ အဆောက်အအုံ | အိမ်ရာ ဆောက်လုပ်ခြင်း
🏡 1F3E1 *house with garden
| garden | home | house *ပန်းခြံနှင့် အိမ်
| ပန်းခြံ၊ အိမ်ယာ၊ အဆောက်အအုံ၊ အိမ်
🏢 1F3E2 *office building
| building *ရုံး အဆောက်အအုံ
🏣 1F3E3 *Japanese post office
| Japanese | post *ဂျပန် စာတိုက်
| ဂျပန်၊ အဆောက်အအုံ၊ စာတိုက်
🏤 1F3E4 *post office
| European | post *စာတိုက်
| ဥရောပ၊ အဆောက်အအုံ၊ စာတိုက်
🏥 1F3E5 *hospital
| doctor | medicine *ဆေးရုံ
| ဆရာဝန်၊ ဆေးကုသ၊ အဆောက်အအုံ
🏦 1F3E6 *bank
| building *ဘဏ်
🏨 1F3E8 *hotel
| building *ဟိုတယ်
🏩 1F3E9 *love hotel
| hotel | love *ချစ်သူ ဟိုတယ်
| အဆောက်အအုံ ချစ်၊ ဟော်တယ်
🏪 1F3EA *convenience store
| convenience | store
en_001: *convenience store
| convenience | shop | store *ကုန်စုံဆိုင်
| ကုန်စုံ၊ စတိုး၊ အဆောက်အအုံ
🏫 1F3EB *school
| building *ကျောင်း
🏬 1F3EC *department store
| department | store *စတိုးဆိုင်ကြီး
| အဆောက်အအုံ၊ ရပ်ကွက်၊ စတိုး
🏭 1F3ED *factory
| building *စက်ရုံ
🏯 1F3EF *Japanese castle
| Japanese | castle *ဂျပန် ရဲတိုက်
| အဆောက်အအုံ၊ ဂျပန်၊ ရဲတိုက်
🏰 1F3F0 *castle
| European *ရဲတိုက်
| အဆောက်အအုံ၊ ဥရောပ
💒 1F492 *wedding
| chapel | romance *မင်္ဂလာဆောင်
| ဘုရားကျောင်း၊ ချစ်
🗼 1F5FC *Tokyo tower
| Tokyo | tower
en_CA: *Tokyo Tower *တိုကျို မျှော်စင်
| တိုကျို၊ မျှော်စင်
🗽 1F5FD *Statue of Liberty
| liberty | statue
en_CA: *Statue of Liberty
| Liberty | Statue *လေဘာတီ ရုပ်တု
| လေဘာတီ | အထိန်းအမှတ်
⛪ 26EA *church
| Christian | cross | religion *ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း
| အဆောက်အအုံ၊ ခရစ်ယာန်၊ ကားတိုင်၊ ဘာသာရေး
🕌 1F54C *mosque
| Muslim | islam | religion
| Islam | Muslim | religion *ဗလီကျောင်း
| အစ္စလမ်၊ မူဆလင်၊ ဘာသာရေ
🕍 1F54D *synagogue
| Jew | Jewish | religion | temple *ဂျူးဘုရားရှိခိုးကျောင်း
| ဂျူး၊ ဂျူးလူမျိုး၊ ဘာသာရေး၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
⛩ 26E9 *shinto shrine
| religion | shinto | shrine
en_CA: *Shinto shrine *ရှင်တို ဘုရားကျောင်း
| ရှင်တို၊ ဘာသာရေး၊ ဘုရားကျောင်း
🕋 1F54B *kaaba
| Islam | Muslim | religion *kaaba
| အစ္စလမ်၊ မူဆလင်၊ ဘာသာရေး
⛲ 26F2 *fountain *အလှပြ ရေပန်း
⛺ 26FA *tent
| camping *ရွက်ဖျင်တဲ
| ရွက်တဲ | ရွက်တဲ၊ စခန်း
🌁 1F301 *foggy
| fog *မြူအုံ့ဆိုင်းသော
| မြူ၊ မိုးလေဝသ
🌃 1F303 *night with stars
| night | star *ကြယ်များလင်းသည့် ည
| ကြယ်၊ မိုးလေဝသ၊ ည
🏙 1F3D9 *cityscape
| city *မြို့ပြရှုခင်း
| အဆောက်အအုံ၊ မြို့
🌄 1F304 *sunrise over mountains
| morning | mountain | sun | sunrise *တောင်ကြောပေါ်မှာ နေထွက်ခြင်း
| နံနက်၊ တောင်၊ နေ၊ နေထွက်၊ မိုးလေဝသ
🌅 1F305 *sunrise
| morning | sun *နေထွက်ခြင်း
| နံနက်၊ နေ၊ မိုးလေဝသ
🌆 1F306 *cityscape at dusk
| city | dusk | evening | landscape | sun | sunset *နေဝင်ဆည်းဆာချိန် မြို့ပြရှုခင်း
| အဆောက်အအုံ၊ မြို့၊ နေဝင်၊ ဆည်းဆာ၊ ရှုခင်း၊ မိုးလေဝသ
🌇 1F307 *sunset
| dusk | sun *နေဝင်ချိန်
| အဆောက်အအုံ၊ မြို့၊ နေ၊ မိုးလေဝသ
🌉 1F309 *bridge at night
| bridge | night *ညအချိန်မှာ တံတား
| ည၊ တံတား၊ မိုးလေဝသ
♨ 2668 *hot springs
| hot | hotsprings | springs | steaming
en_CA: *hot springs
| hot | springs | steaming *ရေပူစမ်းများ
| ရေပူစမ်း၊ ပူ၊ စမ်း၊ အငွေ့
🌌 1F30C *milky way
en_CA: *Milky Way
en_AU: *Milky Way
| space *နဂါးငွေ့တန်း
| အာကာသ၊ မိုးလေဝသ
🎠 1F3A0 *carousel horse
| carousel | horse
en_001: *carousel horse
| carousel | horse | merry-go-round
| carousel | horse *ချားရဟတ် မြင်း
| ချားရဟတ်၊ မြင်း
🎡 1F3A1 *ferris wheel
| amusement park | ferris | wheel
en_CA: *Ferris wheel
en_001: *ferris wheel
| amusement park | ferris | theme park | wheel *ချားရဟတ်
| ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ ပန်းခြံ၊ ရဟတ်
🎢 1F3A2 *roller coaster
| amusement park | coaster | roller
| amusement park | coaster | roller | theme park *သည်းဖိုရထား
| ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ ပန်းခြံ၊ သည်းဖို၊ ရထား
💈 1F488 *barber pole
| barber | haircut | pole
en_001: *barber’s pole
| barber | haircut | pole *ဆံပင်ညှပ်ဆိုင် တိုင်
| ဆံပင်၊ညှပ်ဆရာ၊ တိုင်
🎪 1F3AA *circus tent
| circus | tent
en_AU: *big top
| circus *ဆပ်ကပ်တဲ
| ဆပ်ကပ် | တဲ
🚂 1F682 *locomotive
| engine | railway | steam | train *မီးရထားစက်ခေါင်း
| အင်ဂျင်၊ သံလမ်း၊ ရထား၊ ယာဥ်
🚃 1F683 *railway car
| car | electric | railway | train | tram | trolleybus
en_AU, en_CA: *railway car
| car | electric | railway | train | tram | trolley bus
en_001: *railway carriage
| car | electric | railway | train | tram | trolleybus *ရထားတွဲ
| အင်ဂျင်၊ သံလမ်း၊ ရထား၊ ယာဥ်၊ ရထားတွဲ၊ လျှပ်စစ်၊ ထရော်လီဘတ်စ်၊
🚄 1F684 *high-speed train
| railway | shinkansen | speed | train
en_CA: *high-speed train
| Shinkansen | railway | speed | train
en_001: *high-speed train
| TGV | railway | shinkansen | speed | train *အမြန်ရထား
| သံလမ်း၊ ရထား၊ ယာဥ်၊ နှုန်း၊ ရှင်ကန်စင်၊ ရထား
🚅 1F685 *bullet train
| bullet | railway | shinkansen | speed | train
en_CA: *bullet train
| Shinkansen | bullet | railway | speed | train *ကျည်ဆံရထား
| ကျည်ဆံ၊ သံလမ်း၊ ရှင်ကန်စင်၊ နှုန်း၊ ရထား၊ ယာဥ် | ကျည်ထိပ်ဖူးခေါင်းတွဲဖြင့် အမြန်ရထား
🚆 1F686 *train
| railway *ရထား
| ရထား၊ ယာဥ်
🚇 1F687 *metro
| subway | tube | underground *မြေအောက်ရထား
| မြေအောက်၊ ယာဥ်
🚈 1F688 *light rail
| railway *အပေါ့စား ရထား
| သံလမ်း၊ ယာဥ်
🚉 1F689 *station
| railway | train *ဘူတာရုံ
| သံလမ်း၊ ရထား၊ ယာဥ်
🚊 1F68A *tram
| trolley bus *ဓာတ်ရထား
| ထရော်လီဘတ်စ်၊ ယာဥ်
🚝 1F69D *monorail
| vehicle *မိုနိုရထား
🚞 1F69E *mountain railway
| car | mountain | railway *တောင်ပ​ေါ် ရထားလမ်း
| တောင်၊ ရထားတွဲ၊ သံလမ်း၊ ယာဥ်
🚋 1F68B *tram car
| car | tram | trolleybus
en_AU: *tram car
| car | tram | trolley bus
en_CA: *tramcar *ဓာတ်ရထားတွဲ
| ရထားတွဲ၊ ဓာတ်ရထား၊ ထရော်လီဘတ်စ်၊ ယာဥ်
🚌 1F68C *bus
| vehicle *ဘတ်စ်ကား
🚍 1F68D *oncoming bus
| bus | oncoming *လာနေသည့် ဘတ်စ်ကား
| လာနေ၊ ဘတ်စ်ကား၊ ယာဥ်
🚎 1F68E *trolleybus
| bus | tram | trolley
en_CA: *trolley bus
en_AU: *trolley bus
| bus | tram | trolley *ထရော်လီဘတ်စ်ကား
| ထရော်လီ၊ ဘတ်စ်ကား၊ ဘတ်စ်ကား၊ ဓာတ်ရထား၊ ယာဥ်
🚐 1F690 *minibus
| bus *မီနီဘတ်စ်ကား
| ဘတ်စ်ကား၊ ယာဥ်
🚑 1F691 *ambulance
| vehicle *လူနာတင်ကား
🚒 1F692 *fire engine
| engine | fire | truck *မီးသတ်ကား
| အင်ဂျင်၊ မီး၊ ထရပ်ကား၊ ယာဥ်
🚓 1F693 *police car
| car | patrol | police *ရဲကား
| ကား၊ ကင်းလှည့်၊ ပုလိပ်၊ ယာဥ်
🚔 1F694 *oncoming police car
| car | oncoming | police *လာနေသည့် ရဲကား
| လာနေ၊ ကား၊ ပုလိပ်၊ ယာဥ်
🚕 1F695 *taxi
| cab | vehicle *တက္ကစီ
🚖 1F696 *oncoming taxi
| oncoming | taxi
en_001: *oncoming taxi
| cab | oncoming | taxi *လာနေသည့် တက္ကစီ
| လာနေ၊ တက္ကစီ၊ ယာဥ်
🚗 1F697 *automobile
en_001: *car *မော်တော်ကား
| ကား၊ ယာဥ်
🚘 1F698 *oncoming automobile
| automobile | car | oncoming
en_001: *oncoming car
| automobile | car | oncoming *လာနေသည့် မော်တော်ကား
| မော်တော်ကား၊ လာနေ၊ ယာဥ်၊ ကား
🚙 1F699 *sport utility vehicle
| recreational | sport utility
en_001: *sport utility vehicle
| RV | camper van | motorhome | recreational | sport utility *ခရီးကြမ်းသုံးယာဉ်
| လူစီးယာဉ် | အပန်းဖြေရေး၊ rv၊ ယာဥ်
🚚 1F69A *delivery truck
| delivery | truck
en_001: *delivery van
| delivery | truck *ပစ္စည်းပို့သည့် ထရပ်ကား
| ပစ္စည်းပို့၊ ထရပ်ကား၊ ယာဥ်
🚛 1F69B *articulated lorry
| lorry | semi | truck *ချိတ်တွဲထားသည့် လော်ရီကား
| လော်ရီ၊ ချိတ်ကား၊ ထရပ်ကား၊ ယာဥ်
🚜 1F69C *tractor
| vehicle *လယ်ထွန်စက်
🚲 1F6B2 *bicycle
| bike *စက်ဘီး
| စက်ဘီး၊ ယာဥ်
🛴 1F6F4 *kick scooter
| kick | scooter *စကူတာ
🛵 1F6F5 *motor scooter
| motor | scooter *မော်တာစက်တပ် စကူတာ
| စကူတာ | မော်တာ
🚏 1F68F *bus stop
| bus | busstop | stop
en_CA: *bus stop
| bus | stop *ဘတ်စ်ကား မှတ်တိုင်
| ဘတ်စ်ကား၊ ဘတ်စ်ကား မှတ်တိုင်၊ ရပ်
🛣 1F6E3 *motorway
| highway | road
| highway | road *ကားလမ်း
| ကားလမ်း၊ လမ်း
🛤 1F6E4 *railway track
| railway | train *သံလမ်း
| သံလမ်း၊ ရထား
🛢 1F6E2 *oil drum
| drum | oil *ဆီ စည်ပိုင်း
| ဆီ၊ စည်ပိုင်း
⛽ 26FD *fuel pump
| diesel | fuel | fuelpump | gas | pump | station
en_001: *fuel pump
| diesel | fuel | fuelpump | gas | petrol | pump | station
en_AU: *fuel pump
| fuel | fuelpump | petrol | pump | station
en_CA: *fuel pump
| fuel | gas | pump | station *ဆီဖြည့်တိုင်
| လောင်စာ၊ လောင်စာ မှုတ်စက်၊ ဓာတ်ငွေ့၊ မှုတ်စက်၊ ဆိုင်
🚨 1F6A8 *police car light
| beacon | car | light | police | revolving *ရဲကား အချက်ပြမီး
| အချက်ပြမီး၊ ကား၊ မီး၊ ပုလိပ်၊ လည်နေ၊ ယာဥ်
🚥 1F6A5 *horizontal traffic light
| light | signal | traffic *ဘေးတိုက် အချက်ပြမီး
| မီး၊ အချက်ပြ၊ ယာဥ်ကြော
🚦 1F6A6 *vertical traffic light
| light | signal | traffic *​ဒေါင်လိုက် အချက်ပြမီး
🛑 1F6D1 *stop sign
| octagonal | sign | stop *ရပ်ရန် ဆိုင်းဘုတ်
| ဆိုင်းဘုတ် | ရပ် | အဋ္ဌဂံ
🚧 1F6A7 *construction
| barrier *ဆောက်လုပ်ရေး
| အဆောက်အအုံ | အတားအဆီး
⚓ 2693 *anchor
| ship | tool *ကျောက်ဆူး
| သင်္ဘော၊ တန်ဆာပလာ
⛵ 26F5 *sailboat
| boat | resort | sea | yacht
en_001: *sailing boat
| boat | resort | sailboat | sailing | sea | yacht *ရွက်လှေ
| ရွက်၊ လှေ၊ အပန်းဖြေ၊ ယာဥ်၊ ပင်လယ်
🛶 1F6F6 *canoe
| boat *ကနူး
🚤 1F6A4 *speedboat
| boat *အမြန်စက်လှေ
🛳 1F6F3 *passenger ship
| passenger | ship
en_001: *passenger ship
| cruise | liner | passenger | ship *ခရီးသည်တင် သင်္ဘော
| ခရီးသည်၊ သင်္ဘော၊ ယာဥ်
⛴ 26F4 *ferry
| boat | passenger *ကူးတို့
🛥 1F6E5 *motor boat
| boat | motorboat *စက်တပ် လှေ
| လှေ၊ ယာဥ်၊ စက်တပ် လှေ
🚢 1F6A2 *ship
| boat | passenger *သင်္ဘော
✈ 2708 *airplane
en_CA: *airplane *လေယာဉ်
🛩 1F6E9 *small airplane
| aeroplane | airplane
en_CA: *small airplane *လေယာဉ်ငယ်
| လေယာဥ်၊ ယာဥ်
🛫 1F6EB *airplane departure
| aeroplane | airplane | check-in | departure | departures
en_CA: *airplane departure
en_001: *airplane departure
| aeroplane | airplane | check-in | departure | departures | take-off *လေယာဉ် ထွက်ခွာခြင်း
| လေယာဥ်၊ စာရင်းသွင်းခြင်း၊ ထွက်၊ ထွက်ချိန်များ၊ ယာဥ်
🛬 1F6EC *airplane arrival
| aeroplane | airplane | arrivals | arriving | landing
en_CA: *airplane arrival *လေယာဉ် ဆိုက်ရောက်ခြင်း
| လေယာဥ်၊ ဆိုက်ရောက်၊ ဆိုက်ရောက်နေ၊ ဆင်းနေ၊ ယာဥ်
💺 1F4BA *seat
| chair *ထိုင်ခုံ
🚁 1F681 *helicopter
| chopper | vehicle *ရဟတ်ယာဉ်
🚟 1F69F *suspension railway
| railway | suspension *ဓာတ်ကြိုးတပ် ရထား
| သံလမ်း၊ သံကြိုး၊ ယာဥ်
🚠 1F6A0 *mountain cableway
| cable | gondola | mountain *တောင်တက် ဓာတ်ကြိုးရထားလမ်း
| တောင်၊ သံကြိုး၊ ငွန်ဒိုလာ၊ ယာဥ်
🚡 1F6A1 *aerial tramway
| aerial | cable | car | gondola | tramway
en_AU: *cable car
| aerial | cable | car | gondola | tramway *ဝေဟင် ဓာတ်ရထားလမ်း
| ဝေဟင်၊ ဓာတ်ရထားလမ်း၊ ကြိုးလမ်း၊ သံကြိုး၊ ဂွန်ဒိုလာ၊ ယာဥ်၊ ရထားတွဲ
🛰 1F6F0 *satellite
| space *ဂြိုဟ်တု
| အာကာသ၊ ယာဥ်
🚀 1F680 *rocket
| space *ဒုံးယာဉ်
🛸 1F6F8 *flying saucer
| UFO *ပန်းကန်ပြားပျံ
| ပန်းကန်ပြားနှင့်တူသည့် ယာဥ်ပျံ
🛎 1F6CE *bellhop bell
| bell | bellhop | hotel *နှိပ်ခေါင်းလောင်း
| နှိပ်ခေါင်းလောင်း၊ ခေါင်းလောင်း၊ ဟော်တယ်
⌛ 231B *hourglass done
| sand | timer
en_AU: *hourglass done
| hourglass | sand | timer *သဲနာရီ
| သဲ၊ တိုင်မား
⏳ 23F3 *hourglass not done
| hourglass | sand | timer *တစ်နာရီမပြည့်သေးသည့် သဲနာရီ
| သဲစီးကျနေသည့် သဲနာရီ | သဲနာရီ၊ သဲ၊ တိုင်မား
⌚ 231A *watch
| clock *လက်ပတ်နာရီ
⏰ 23F0 *alarm clock
| alarm | clock *နှိုးစက်နာရီ
| နှိုးစက်၊ နာရီ
⏱ 23F1 *stopwatch
| clock *အချိန်ဖမ်းနာရီ
⏲ 23F2 *timer clock
| clock | timer
| clock *အချိန်မှတ်နာရီ
| တိုင်မား၊ နာရီ
🕰 1F570 *mantelpiece clock
en_AU: *clock *မီးလင်းဖိုစင် နာရီ
🕛 1F55B *twelve o’clock
| 00 | 12 | 12:00 | clock | o’clock | twelve *ဆယ့်နှစ်နာရီ
| ၀၀၊ ၁၂၊ ၁၂ ၀၀၊ နာရီ၊ ဆယ့်နှစ်၊ နာရီ
🕧 1F567 *twelve-thirty
| 12 | 12:30 | 30 | clock | thirty | twelve
en_001: *half past twelve
| 12 | 12.30 | 12:30 | 30 | clock | thirty | twelve | twelve-thirty *ဆယ့်နှစ်နာရီခွဲ
| ၁၂၊ ၁၂၊ ၃၀၊ ၃၀၊ နာရီ၊ ဆယ့်နှစ်၊ နာရီခွဲ
🕐 1F550 *one o’clock
| 00 | 1 | 1:00 | clock | one | o’clock *တစ်နာရီ
| ၀၀၊ ၁၊ ၁ ၀၀၊ နာရီ၊ တစ်၊ နာရီ
🕜 1F55C *one-thirty
| 1 | 1:30 | 30 | clock | one | thirty
en_001: *half past one
| 1 | 1.30 | 1:30 | 30 | clock | one | one-thirty | thirty *တစ်နာရီခွဲ
| ၁၊ ၁ ၃၀၊ နာရီ၊ တစ်၊ နာရီခွဲ
🕑 1F551 *two o’clock
| 00 |2| 2:00 | clock | o’clock | two *နှစ်နာရီ
| ၀၀၊ ၂၊ ၂ ၀၀၊ နာရီ၊ နှစ်၊ နာရီ
🕝 1F55D *two-thirty
|2| 2:30 | 30 | clock | thirty | two
en_001: *half past two
|2| 2.30 | 2:30 | 30 | clock | thirty | two | two-thirty *နှစ်နာရီခွဲ
| ၂၊ ၂ ၃၀၊ နာရီ၊ နှစ်၊ နာရီခွဲ
🕒 1F552 *three o’clock
| 00 |3| 3:00 | clock | o’clock | three *သုံးနာရီ
| ၀၀၊ ၃၊ ၃ ၀၀၊ နာရီ၊ သုံး၊ နာရီ
🕞 1F55E *three-thirty
|3| 30 | 3:30 | clock | thirty | three
en_001: *half past three
|3| 3.30 | 30 | 3:30 | clock | thirty | three | three-thirty *သုံးနာရီခွဲ
| ၃၊ ၃ ၃၀၊ နာရီ၊ သုံး၊ နာရီခွဲ
🕓 1F553 *four o’clock
| 00 |4| 4:00 | clock | four | o’clock *လေးနာရီ
| ၀၀၊ ၄၊ ၄ ၀၀၊ နာရီ၊ လေး၊ နာရီ
🕟 1F55F *four-thirty
| 30 |4| 4:30 | clock | four | thirty
en_001: *half past four
| 30 |4| 4.30 | 4:30 | clock | four | four-thirty | thirty *လေးနာရီခွဲ
| ၃၀၊ ၄၊ ၄ ၃၀၊ လေး၊ နာရီခွဲ
🕔 1F554 *five o’clock
| 00 |5| 5:00 | clock | five | o’clock *ငါးနာရီ
| ၀၀၊ ၅၊ ၅ ၀၀၊ ငါး၊ နာရီ
🕠 1F560 *five-thirty
| 30 |5| 5:30 | clock | five | thirty
en_001: *half past five
| 30 |5| 5.30 | 5:30 | clock | five | five-thirty | thirty *ငါးနာရီခွဲ
| ၃၀၊ နာရီ၊ ငါး၊ နာရီခွဲ | ၃၀၊ ၅၊ ၅
🕕 1F555 *six o’clock
| 00 |6| 6:00 | clock | o’clock | six *ခြောက်နာရီ
| ၀၀၊ ၆၊ ၆ ၀၀၊ နာရီ၊ ခြောက်၊ နာရီ
🕡 1F561 *six-thirty
| 30 |6| 6:30 | clock | six | thirty
en_001: *half past six
| 30 |6| 6.30 | 6:30 | clock | six | six-thirty | thirty *ခြောက်နာရီခွဲ
| ၃၀၊ ၆၊ ၆ ၃၀၊ နာရီ၊ ခြောက်၊ နာရီခွဲ
🕖 1F556 *seven o’clock
| 00 |7| 7:00 | clock | o’clock | seven *ခုနစ်နာရီ
| ၀၀၊ ၇၊ ၇ ၀၀၊ နာရီ၊ ခုနစ်၊ နာရီ
🕢 1F562 *seven-thirty
| 30 |7| 7:30 | clock | seven | thirty
en_001: *half past seven
| 30 |7| 7.30 | 7:30 | clock | seven | seven-thirty | thirty *ခုနစ်နာရီခွဲ
| ၃၀၊ ၇၊ ရ ၃၀၊ နာရီ၊ ခုနစ်၊ နာရီခွဲ
🕗 1F557 *eight o’clock
| 00 | 8 | 8:00 | clock | eight | o’clock *ရှစ်နာရီ
| ၀၀၊ ဂ၊ ၈ ၀၀၊ နာရီ၊ ရှစ်၊ နာရီ
🕣 1F563 *eight-thirty
| 30 | 8 | 8:30 | clock | eight | thirty
en_001: *half past eight
| 30 | 8 | 8.30 | 8:30 | clock | eight | eight-thirty | thirty *ရှစ်နာရီခွဲ
| ၃၀၊ ဂ၊ ၈ ၃၀၊ နာရီ၊ ရှစ်၊ နာရီခွဲ
🕘 1F558 *nine o’clock
| 00 |9| 9:00 | clock | nine | o’clock *ကိုးနာရီ
| ၀၀၊ ၉၊ ၉ ၀၀၊ နာရီ၊ ကိုး၊ နာရီ
🕤 1F564 *nine-thirty
| 30 |9| 9:30 | clock | nine | thirty
en_001: *half past nine
| 30 |9| 9.30 | 9:30 | clock | nine | nine-thirty | thirty *ကိုးနာရီခွဲ
| ၃၀၊ ၉၊ ၉ ၃၀၊ နာရီ၊ ကိုး၊ နာရီခွဲ
🕙 1F559 *ten o’clock
| 00 | 10 | 10:00 | clock | o’clock | ten *ဆယ်နာရီ
| ၀၀၊ ၁၀၊ ၁၀ ၀၀၊ နာရီ၊ ဆယ်၊ နာရီ
🕥 1F565 *ten-thirty
| 10 | 10:30 | 30 | clock | ten | thirty
en_001: *half past ten
| 10 | 10.30 | 10:30 | 30 | clock | ten | ten-thirty | thirty *ဆယ်နာရီခွဲ
| ၁၀၊ ၁၀ ၃၀၊ ၃၀၊ နာရီ၊ ဆယ်၊ နာရီခွဲ
🕚 1F55A *eleven o’clock
| 00 | 11 | 11:00 | clock | eleven | o’clock *ဆယ့်တစ်နာရီ
| ၀၀၊ ၁၁၊ ၁၁ ၀၀၊ နာရီ၊ ဆယ့်တစ်၊ နာရီ
🕦 1F566 *eleven-thirty
| 11 | 11:30 | 30 | clock | eleven | thirty
en_001: *half past eleven
| 11 | 11.30 | 11:30 | 30 | clock | eleven | eleven-thirty | thirty *ဆယ့်တစ်နာရီခွဲ
| ၁၁၊ ၁၁ ၃၀၊ ၃၀၊ နာရီ၊ ဆယ့်တစ်၊ နာရီခွဲ
🌑 1F311 *new moon
| dark | moon *လကွယ်
| မှောင်မည်း၊ လ၊ အာကာသ၊ မိုးလေဝသ
🌒 1F312 *waxing crescent moon
| crescent | moon | waxing *လဆန်းရက်
| လခြမ်း၊ လ၊ အာကာသ၊ လဆန်း၊ မိုးလေဝသ
🌓 1F313 *first quarter moon
| moon | quarter *လ၏ ပထမအပတ်
| လ၊ လေးပုံတစ်ပုံ၊ မိုးလေဝသ
🌔 1F314 *waxing gibbous moon
| gibbous | moon | waxing *လပြည့်မတိုင်မီ အပတ်
| လပြည့်ခါနီး၊ လ အာကာသ၊ လဆန်း၊ မိုးလေဝသ
🌕 1F315 *full moon
| full | moon *လပြည့်
| လ၊ အပြည့်၊ အာကာသ၊ မိုးလေဝသ
🌖 1F316 *waning gibbous moon
| gibbous | moon | waning *လဆုပ်ရက်
| လပြည့်နီးပါး၊ လဆုပ်၊ လ၊ အာကာသ၊ မိုးလေဝသ
🌗 1F317 *last quarter moon
| moon | quarter *လ၏ နောက်ဆုံးအပတ်
| လ၊ လေးပုံတစ်ပုံ၊ အာကာသ၊ မိုးလေဝသ
🌘 1F318 *waning crescent moon
| crescent | moon | waning *လကွယ်မတိုင်မီ အပတ်
| လခြမ်း၊ လဆုပ်၊ အာကာသ၊ မိုးလေဝသ
🌙 1F319 *crescent moon
| crescent | moon *လခြမ်း
| လခြမ်း၊ လ၊ အာကာသ၊ မိုးလေဝသ
🌚 1F31A *new moon face
| face | moon *လကွယ် မျက်နှာ
| လ၊ မျက်နှာ၊ အာကာသ၊ မိုးလေဝသ
🌛 1F31B *first quarter moon face
| face | moon | quarter *လဆန်းစ မျက်နှာ
| လ၊ လေးပုံတစ်ပုံ၊ မျက်နှာ၊ အာကာသ၊ မိုးလေဝသ
🌜 1F31C *last quarter moon face
| face | moon | quarter *လဆုပ်လု မျက်နှာ
🌡 1F321 *thermometer
| weather *သာမိုမီတာ
☀ 2600 *sun
| bright | rays | sunny *နေ
| တောက်ပ၊ နေသာ၊ အလင်းရောင်၊ အာကာသ၊ မိုးလေဝသ
🌝 1F31D *full moon face
| bright | face | full | moon
en_CA: *full-moon face *လပြည့် မျက်နှာ
| အပြည့်၊ လ၊ တောက်ပ၊ မျက်နှာ၊ အာကာသ၊ မိုးလေဝသ
🌞 1F31E *sun with face
| bright | face | sun *နေ၏ မျက်နှာ
| တောက်ပ၊ နေ၊ မျက်နှာ၊ အာကာသ၊ မိုးလေဝသ
⭐ 2B50 *star
| yellow medium star
en_CA: *yellow medium star *အဖြူရောင် အလတ်စား ကြယ်
🌟 1F31F *glowing star
| glittery | glow | shining | sparkle | star *တောက်ပသည့် ကြယ်
| တောက်ပ၊ ၀င်း၊ လက်၊ ကြယ်
🌠 1F320 *shooting star
| falling | shooting | star *ကြယ်ကြွေခြင်း
| ကျလာ၊ ပစ်လွှတ်၊ အာကာသ၊ ကြယ်
☁ 2601 *cloud
| weather *တိမ်
⛅ 26C5 *sun behind cloud
| cloud | sun *တိမ်နောက်ရှိ နေ
| တိမ်၊ နေ၊ မိုးလေဝသ
⛈ 26C8 *cloud with lightning and rain
| cloud | rain | thunder *လျှပ်စီးလက်ပြီး မိုးရွာနေသည့် တိမ်
| မိုးကြိုး၊ တိမ်၊ မိုး၊ မိုးလေဝသ
🌤 1F324 *sun behind small cloud
| cloud | sun *တိမ်ငယ် နောက်က နေ
🌥 1F325 *sun behind large cloud
| cloud | sun *တိမ်တိုက်ကြီး နောက်က နေ
🌦 1F326 *sun behind rain cloud
| cloud | rain | sun *မိုးနှင့်တိမ်နောက်က နေ
| တိမ်၊ မိုး၊ နေ၊ မိုးလေဝသ
🌧 1F327 *cloud with rain
| cloud | rain *မိုးနှင့် တိမ်
| တိမ်၊ မိုး၊ မိုးလေဝသ
🌨 1F328 *cloud with snow
| cloud | cold | snow *ဆီးနှင်းနှင့် တိမ်
| တိမ်၊ ဆီးနှင်း၊ အေး၊ မိုးလေဝသ
🌩 1F329 *cloud with lightning
| cloud | lightning *လျှပ်စီးနှင့်တိမ်
| တိမ်၊ လျှပ်စီးလက်၊ မိုးလေဝသ
🌪 1F32A *tornado
| cloud | whirlwind
| cloud | twister | whirlwind *လေဆင်နှာမောင်း
| တိမ်၊ မိုးလေဝသ၊ လေပြင်း
🌫 1F32B *fog
| cloud *မြူ
| တိမ်၊ မိုးလေဝသ
🌬 1F32C *wind face
| blow | cloud | face | wind *လေတိုက် မျက်နှာ
| လေတိုက်၊ တိမ်၊ မျက်နှာ၊ လေ၊ မိုးလေဝသ
🌀 1F300 *cyclone
| dizzy | hurricane | twister | typhoon
| dizzy | hurricane | typhoon *ဆိုင်ကလုန်း
| မူးဝေ၊ လေတင်၊ နှာမောင်း၊ မုန်တိုင်း၊ မိုးလေဝသ
🌈 1F308 *rainbow
| pride | rain *သက်တံ
| မိုး၊ မိုးလေဝသ
🌂 1F302 *closed umbrella
| clothing | rain | umbrella *ပိတ်ထားသည့် ထီး
| ဆောင်စရာ၊ မိုး၊ ထီး၊ မိုးလေဝသ
☂ 2602 *umbrella
| clothing | rain *ထီး
| ဆောင်စရာ၊ မိုး၊ မိုးလေဝသ
☔ 2614 *umbrella with rain drops
| clothing | drop | rain | umbrella *မိုးစက်များနှင့် ထီး
| ဆောင်စရာ၊ အစက်၊ မိုး၊ ထီး၊ မိုးလေဝသ
⛱ 26F1 *umbrella on ground
| rain | sun | umbrella
en_AU: *beach umbrella
| beach | sand | sun | umbrella *မြေပေါ်ရှိ ထီး
| မိုး၊ နေ၊ ထီး၊ မိုးလေဝသ
⚡ 26A1 *high voltage
| danger | electric | electricity | lightning | voltage | zap *ဗို့အားမြင့်
| အန္တရာယ်၊ လျှပ်စစ်၊ ဓာတ်အား၊ မိုးကြိုး၊ ဗို့အား၊ သတိမေ့
❄ 2744 *snowflake
| cold | snow *နှင်းပွင့်
| အေး၊ ဆီးနှင်း၊ မိုးလေဝသ
☃ 2603 *snowman
| cold | snow *ဆီးနှင်းလူ
⛄ 26C4 *snowman without snow
| cold | snow | snowman *နှင်းမပါသည့် ဆီးနှင်းလူ
| ဆီးနှင်းလူ၊ အေး၊ ဆီးနှင်း၊ မိုးလေဝသ
☄ 2604 *comet
| space *ကြယ်တံခွန်
🔥 1F525 *fire
| flame | tool *မီး
| မီးလျှံ၊ တန်ဆာပလာ
💧 1F4A7 *droplet
| cold | comic | drop | sweat
| cold | drop | sweat *အစက်ကလေး
| အေး၊ ဟာသ၊ အစက်၊ ချွေး၊ မိုးလေဝသ
🌊 1F30A *water wave
| ocean | water | wave
en_001: *water wave
| ocean | sea | swell | water | wave *ရေလှိုင်း
| သမုဒ္ဒရာ၊ ရေ၊ လှိုင်း၊ မိုးလေဝသ
🎃 1F383 *jack-o-lantern
| celebration | halloween | jack | lantern
| Halloween | celebration | jack | lantern
| celebration | halloween | jack | lantern | pumpkin *ဖရုံသီး မီးအိမ်
| ပွဲတော်၊ ဟော်လိုဝင်း၊ ဖရုံသီး မီးအိမ်
🎄 1F384 *Christmas tree
| Christmas | celebration | tree *ခရစ္စမတ် အပင်
| ပွဲတော်၊ ခရစ္စမတ်၊ အပင်
🎆 1F386 *fireworks
| celebration *မီးရှူးမီးပန်းများ
🎇 1F387 *sparkler
| celebration | fireworks | sparkle *မီးပန်း
| ပွဲတော်၊ မီးရှူး၊ မီးပန်း၊ ၀င်းလက်
✨ 2728 *sparkles
| sparkle | star *မီးပွင့်များ
| ကြယ် | ဝင်းလက်
🎈 1F388 *balloon
| celebration *လေပူဖောင်း
🎉 1F389 *party popper
| celebration | party | popper | tada *ပါတီဗြောက်အိုး
| ပွဲတော်၊ ပါတီ၊ ဗျောက်အိုး၊ တာဒါ | ဗျောက်အိုး
🎊 1F38A *confetti ball
| ball | celebration | confetti *ရောင်စုံစက္ကူ ဗြောက်အိုး
| ရောင်စုံစက္ကူ ဗျောက်အိုး | ရောင်စုံ၊ စက္ကူ၊ဗျောက်အိုး၊ ပွဲတော်
🎋 1F38B *tanabata tree
| Japanese | banner | celebration | tree
en_CA: *Tanabata tree
en_001: *tanabata tree
| Japanese | banner | celebration | star festival | tanabata | tree *တာနာဘာတာ အပင်
| တံခွန်၊ ပွဲတော်၊ ဂျပန်၊ အပင်
🎍 1F38D *pine decoration
| Japanese | bamboo | celebration | pine
en_AU: *bamboo decoration
| Japanese | bamboo | celebration | decoration *အလှ ထင်းရှူးပင်
| ဝါး၊ ပွဲတော်၊ ဂျပန်၊ အပင်
🎎 1F38E *Japanese dolls
| Japanese | celebration | doll | festival *ဂျပန် အရုပ်များ
| ပွဲတော်၊ ဂျပန်၊ ကျင်းပ၊ အရုပ်
🎏 1F38F *carp streamer
| carp | celebration | streamer
en_001: *carp streamer
| Japanese wind socks | carp | carp wind sock | carp wind socks | celebration | koinobori | streamer *ငါးကြင်း တံခွန်
| ငါးကြင်း၊ ပွဲတော်၊ ကြွေးကြော်ချက်
🎐 1F390 *wind chime
| bell | celebration | chime | wind *သံစုံခေါင်းလောင်း
| လေတိုက် ခေါင်းလောင်းများ | လေ၊ ခေါင်းလောင်း၊ ပွဲတော်၊ အသံ
🎑 1F391 *moon viewing ceremony
| celebration | ceremony | moon
en_001: *moon viewing ceremony
| celebration | ceremony | jugoya | moon | moon-viewing ceremony | otsukimi | tsukimi *လ အခမ်းအနား
| လ၊ အခမ်းအနား၊ ပွဲတော်
🎀 1F380 *ribbon
| celebration *ဖဲကြိုး
🎁 1F381 *wrapped gift
| box | celebration | gift | present | wrapped
| box | celebration | present | wrapped *ထုပ်ပိုးထားသည့် လက်ဆောင်
| ဘူး၊ အခမ်းအနား၊ လက်ဆောင်၊ ထုပ်ပိုး
🎗 1F397 *reminder ribbon
| celebration | reminder | ribbon
en_001: *reminder ribbon
| awareness ribbon | celebration | reminder | ribbon *အောက်မေ့ဖွယ် ဖဲကြိုး
| အခမ်းအနား၊ သတိပေး၊ ဖဲကြိုး
🎟 1F39F *admission tickets
| admission | ticket
en_AU: *admission tickets
| admission | entry | ticket *ဝင်ခွင့် လက်မှတ်များ
| ဝငျခှငျ့ လကျမှတျများ | ၀ငျခှငျ့၊ လကျမှတျ
🎫 1F3AB *ticket
| admission *လက်မှတ်
🎖 1F396 *military medal
| celebration | medal | military *တပ်မတော်ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့တံဆိပ်
| စစ်တပ် တံဆိပ် | အခမ်းအနား၊၊ ဆုတံဆိပ်၊ စစ်တပ်
🏆 1F3C6 *trophy
| celebration | prize *ဖလားဆု
🏅 1F3C5 *sports medal
en_AU: *sports medal
| celebration | medal | sports *အားကစား ဆုတံဆိပ်
🥇 1F947 *1st place medal
| first | gold | medal *ပထမ ဆုတံဆိပ်
| တံဆိပ် | ပထမ | ရွှေ
🥈 1F948 *2nd place medal
| medal | second | silver *ဒုတိယ ဆုတံဆိပ်
| ငွေ | တံဆိပ် | ဒုတိယ
🥉 1F949 *3rd place medal
| bronze | medal | third *တတိယ ဆုတံဆိပ်
| ကြေး | တတိယ | တံဆိပ်
⚽ 26BD *soccer ball
| ball | football | soccer *ဘောလုံး
| ဘောလုံး၊ အားကစား
⚾ 26BE *baseball
| ball *ဘေ့စ်ဘော
🏀 1F3C0 *basketball
| ball | hoop *ဘတ်စကက်ဘော
| ဘော၊ ကွင်း
🏐 1F3D0 *volleyball
| ball | game *ဘော်လီဘော
| ဘော၊ ပွဲစဥ်
🏈 1F3C8 *american football
| american | ball | football *အမေရိကန် ဘောလုံး
| အမေရိကန်၊ ဘော၊ ဘောလုံး
🏉 1F3C9 *rugby football
| ball | football | rugby
en_CA: *rugby *ရာဂ်ဘီ ဘောလုံး
| ရာဂ်ဘီ၊ ဘော၊ ဘောလုံး
🎾 1F3BE *tennis
| ball | racquet
| ball | racket | racquet *တင်းနစ်
| ဘော၊ ရိုက်တံ
🎳 1F3B3 *bowling
| ball | game
| ball | game | pins *ဘိုးလင်း
| ဘောလုံး၊ ကစားပွဲ
🏏 1F3CF *cricket game
| ball | bat | game
en_001: *cricket game
| ball | bat | cricket ball | cricket bat | game
en_AU: *cricket game
| ball | bat | cricket | game *ခရစ်ကက်
| ဘော၊ ရိုက်တံ၊ ပွဲစဥ်
🏑 1F3D1 *field hockey
| ball | field | game | hockey | stick *ဟော်ကီ
| ကွင်းပြင် ဟော်ကီ | ဘော၊ ကွင်းပြင်၊ ဟော်ကီ၊ ရိုက်တံ၊ ပွဲစဥ်
🏒 1F3D2 *ice hockey
| game | hockey | ice | puck | stick *ရေခဲပြင် ဟော်ကီ
| ရေခဲပြင် ဘော၊ ကွင်းပြင်၊ ဟော်ကီ၊ ရိုက်တံ၊ ရော်ဘာဒိုးပြား | ရေခဲပြင် ဟော်ကီရိုက်တံနှင့် ရော်ဘာဒိုးပြား
🏓 1F3D3 *ping pong
| ball | bat | game | paddle | table tennis *စားပွဲတင် တင်းနစ်
| ဘော၊ ရိုက်တံ၊ ပွဲစဥ်၊ ရိုက်တံ၊ စားပွဲ၊ တင်းနစ်
🏸 1F3F8 *badminton
| birdie | game | racquet | shuttlecock *ကြက်တောင်ရိုက်ခြင်း
| ကြက်၊ တောင်၊ ရိုက်တံ၊ ကြက်တောင်
🥊 1F94A *boxing glove
| boxing | glove *လက်ဝှေ့အိတ်
| လက်ဝှေ့ထိုး | လက်အိတ် | အားကစား
🥋 1F94B *martial arts uniform
| judo | karate | martial arts | taekwondo | uniform *သိုင်းသမားဝတ်စုံ
| ကရာတေး | ဂျူဒို | တိုက်ကွမ်ဒို | တူညီဝတ်စုံ | ရိုးရာသိုင်း | အားကစား
🥅 1F945 *goal net
| goal | net *ဂိုးပေါက်
| ပိုက်ကွန် | အားကစား
⛳ 26F3 *flag in hole
| golf | hole
en_AU: *flag in hole
| flag | golf | hole *ကျင်းထဲက အလံ
| ဂေါက်၊ ကျင်း
⛸ 26F8 *ice skate
| ice | skate
en_AU: *ice skate
| ice | iceskating | skate *ရေခဲပြင်စကိတ်
| ရေခဲစကိတ် | ရေခဲ၊ စကိတ်
🎣 1F3A3 *fishing pole
| fish | pole
en_AU: *fishing pole
| fish | fishing | pole | rod *ငါးမျှားတံ
| ငါး၊ မျှားတံ
🎽 1F3BD *running shirt
| athletics | running | sash | shirt *အပြေးသမား ရှပ်အင်္ကျီ
| ပြေး၊ ရှပ်အင်္ကျီ
🎿 1F3BF *skis
| ski | snow
| ski | skiing | snow *နှင်းလျှောစီး စကီး
| စကီးများ | စကီး၊ ဆီးနှင်း
🛷 1F6F7 *sled
| sledge | sleigh
| sleigh *စွတ်ဖားလှည်း
🥌 1F94C *curling stone
| game | rock
en_AU: *curling stone
| curling | game | rock | stone *ရေခဲပြင်ကျောက်ပြားဝိုင်း
| ကစားနည်း | ကျောက်တုံး
🎯 1F3AF *direct hit
| bull | bullseye | dart | eye | game | hit | target
| bull | dart | eye | game | hit | target *ဗဟိုချက်ထိမှန်ခြင်း
| စက်ကွင်း၊ လှံတို၊ မျက်စိ၊ ပွဲစဥ်၊ ထိမှန်၊ ပစ်မှတ်
🎱 1F3B1 *pool 8 ball
| 8 | ball | billiard | eight | game *ဘိလိယက် ဘောလုံးနံပါတ် ၈
| ဘီလိယက် | ၈၊ ဂ၊ အလုံး၊ ဘီလိယက်၊ ရှစ်၊ ကစားပွဲ
🔮 1F52E *crystal ball
| ball | crystal | fairy tale | fantasy | fortune | tool *ကသိုဏ်းဖန်လုံး
| ကသိုဏ်း၊ ဖန်လုံး၊ ပုံပြင်၊ စိတ်ကူးယဥ်၊ ကံ၊ ကိရိယာ
🎮 1F3AE *video game
| controller | game *ဗီဒီယို ဂိမ်း
| ဂိမ်း၊ ထိန်းချုပ်စက်
🕹 1F579 *joystick
| game | video game *ပဲ့ထိန်းမဏ္ဍိုင်
| ဂိမ်း၊ ဗီဒီယိုဂိမ်း
🎰 1F3B0 *slot machine
| game | slot
| game | pokies
en_001: *slot machine
| fruit machine | game | one-armed bandit | slot *လောင်းကစားစက်
| ဂိမ်း၊ ဈေးရောင်းစက်
🎲 1F3B2 *game die
| dice | die | game
en_001: *game dice
| dice | die | game *အံစာတုံး
| ကစားပွဲ၊ ကြွေ၊ အံစာတုံး
♠ 2660 *spade suit
| card | game *ဖူးဖဲချပ်အတွဲ
| ဖဲ၊ ကစားပွဲ၊ ဖူးဖဲ၊ သုံးချပ်
♥ 2665 *heart suit
| card | game *ဖူးနီဖဲချပ်အတွဲ
| ဖဲ၊ ကစားပွဲ၊ သုံးချပ်၊ ဖူးနီ
♦ 2666 *diamond suit
| card | game
en_AU: *diamond suit
| card | diamonds | game *ချွန်းဖဲချပ်အတွဲ
| ဖဲ၊ ချွန်းဖဲ၊ ကစားပွဲ၊ သုံးချပ်
♣ 2663 *club suit
en_AU: *club suit
| card | clubs | game *ညှင်းဖဲချပ်အတွဲ
| ညှင်းဖဲသုံးချပ် | ညှင်းဖဲ၊ သုံးချပ်၊ ဖဲ၊ ကစားပွဲ၊
🃏 1F0CF *joker
| card | game | wildcard *ဂျိုကာဖဲချပ်
| ဖဲ၊ ကစားပွဲ၊ ကစား
🀄 1F004 *mahjong red dragon
| game | mahjong | red
en_CA: *Mahjong red dragon *မာဂျောက် နဂါးနီ
| ဂိမ်း | မာဂျောက် | အနီ
🎴 1F3B4 *flower playing cards
| Japanese | card | flower | game | playing
en_001: *flower playing cards
| Japanese | card | flower | game | hanafuda | playing *ပန်း ဖဲချပ်များ
| ဖဲ၊ ပန်း၊ ကစားပွဲ၊ ဂျပန်၊ ကစား
🎭 1F3AD *performing arts
| art | mask | performing | theater | theatre *ဖြေဖျော်ရေး အနုပညာများ
| ဖြေဖျော်မှု၊ ဇာတ်ရုံ၊ ပြဇာတ်၊ အနုပညာ၊ မျက်နှာဖုံး
🖼 1F5BC *framed picture
| art | frame | museum | painting | picture *ဘောင်ပါသည့် ပုံ
| အနုပညာ၊ ဘောင်၊ ပန်းချီ၊ ပုံ
🎨 1F3A8 *artist palette
| art | museum | painting | palette *ဆေးစပ်ရာ အပြား
| အနုပညာ၊ ပြတိုက်၊ ပန်းချီ၊ ဆေးစပ်ရာ အပြား
🔇 1F507 *muted speaker
| mute | quiet | silent | speaker *စပီကာ ပိတ်
| အသံတိတ်၊ ဆိတ်ငြိမ်၊ တိတ်ဆိတ်၊ စပီကာ၊ အတိုးအကျယ်
🔈 1F508 *speaker low volume
en_AU: *speaker low volume
| low | quiet | soft | speaker | volume *စပီကာ အသံတိုး
| စပီကာ | အတိုးအကျယ်
🔉 1F509 *speaker medium volume
| medium *စပီကာ ဖွင့်
| နိမ့်၊ စပီကာ၊ အတိုးအကျယ်၊ လှိုင်း
🔊 1F50A *speaker high volume
| loud *စပီကာ အသံကျယ်
📢 1F4E2 *loudspeaker
| loud | public address
| loud | public address *အသံချဲ့စက်
| ကျယ်လောင်၊ အများပြည်သူ၊ ပြောရန်
📣 1F4E3 *megaphone
| cheering *အော်လန်
📯 1F4EF *postal horn
| horn | post | postal *စာတိုက်ခရာ
| စာတိုက်၊ ဦးချို၊ စာ
🔔 1F514 *bell *ခေါင်းလောင်း
🔕 1F515 *bell with slash
| bell | forbidden | mute | no | not | prohibited | quiet | silent *အသံပိတ် ခေါင်းလောင်း
| ခေါင်းလောင်း၊ တားမြစ်၊ တိတ်၊ မသုံးရ၊ မလုပ်ရ၊ တိတ်၊ ဆိတ် | မျဉ်းစောင်းနှင့် ခေါင်းလောင်း
🎼 1F3BC *musical score
| music | score *တေးသွား သင်္ကေတ
| ဂီတ ရမှတ်များ | ဂီတ၊ ရမှတ်များ
🎵 1F3B5 *musical note
| music | note *ဂီတ သင်​္ကေတ
| ဂီတ၊ သင်​္ကေတ
🎶 1F3B6 *musical notes
| music | note | notes *ဂီတ သင်​္ကေတများ
| ဂီတ၊ သင်​္ကေတ၊ သင်​္ကေတများ
🎙 1F399 *studio microphone
| mic | microphone | music | studio *စတူဒီယို မိုက်ကရိုဖုန်း
| စတူဒီယို မိုက်ခရိုဖုန်း | မိုက်၊ စတူဒီယို၊ မိုက်ခရိုဖုန်း၊ တေး၊ ဂီတ
🎚 1F39A *level slider
| level | music | slider *အသံ ညှိတံ
| အသံ၊ အဆင့်၊ ညှိတံ
🎛 1F39B *control knobs
| control | knobs | music *ထိန်းချုပ်မှု ခလုတ်များ
| ထိန်းချုပ်မှု၊ ခလုတ်များ၊ တေး၊ ဂီတ
🎤 1F3A4 *microphone
| karaoke | mic *မိုက်ကရိုဖုန်း
| မိုက်ခရိုဖုန်း | မိုက်၊ ကာရာအိုကေ
🎧 1F3A7 *headphone
| headphone *နားကြပ်
| နားစို့ | ဖုန်းနားကြပ်
📻 1F4FB *radio
| AM | FM | wireless *ရေဒီယို
🎷 1F3B7 *saxophone
| instrument | music | sax *ဆက်ဆိုဖုန်း
| တူရီယာ၊ ဂီတ၊ ဆက်ဆို
🎸 1F3B8 *guitar
| instrument | music *ဂစ်တာ
| ဂီတာ | တူရီယာ၊ ဂီတ
🎹 1F3B9 *musical keyboard
| instrument | keyboard | music | piano
en_AU: *musical keyboard
| instrument | keyboard | music | organ | piano *ဂီတ ကီးဘုတ်
| တူရီယာ၊ ဂီတ၊ ကီးဘုတ်၊ စန္ဒရား
🎺 1F3BA *trumpet
| instrument | music *ခရာ
| တူရီယာ၊ ဂီတ
🎻 1F3BB *violin
| instrument | music *တယော
🥁 1F941 *drum
| drumsticks | music
| drum kit | drumsticks | instrument | music *ဗုံ
| ဂီတ | ဗုံလက်ရိုက်တန်
📱 1F4F1 *mobile phone
| cell | mobile | phone | telephone *မိုဘိုင်း ဖုန်း
| ဆဲလ်၊ မိုဘိုင်း၊ ဖုန်း၊ တယ်လီဖုန်း
📲 1F4F2 *mobile phone with arrow
| arrow | call | cell | mobile | phone | receive | telephone *မြားနှင့် မိုဘိုင်း ဖုန်း
| မြား၊ ခ​ေါ်ဆိုမှု၊ ဆဲလ်၊ မိုဘိုင်း၊ ဖုန်း၊ တယ်လီဖုန်း၊ လက်ခံ
☎ 260E *telephone
| land line | phone *တယ်လီဖုန်း
📞 1F4DE *telephone receiver
| phone | receiver | telephone *တယ်လီဖုန်း အသံဖမ်းခွက်
| ဖုန်း၊ အသံဖမ်းစက်၊ တယ်လီဖုန်း
📟 1F4DF *pager *ပေဂျာ
📠 1F4E0 *fax machine
en_001: *fax machine
| facsimile | fax *ဖက်စ် စာပို့စက်
🔋 1F50B *battery *ဘက်ထရီ
🔌 1F50C *electric plug
| electric | electricity | plug *လျှပ်စစ် ပလပ်
| လျှပ်စစ်၊ ဓာတ်အား၊ ပလပ်
💻 1F4BB *laptop computer
| computer | pc | personal
en_AU: *laptop computer
| PC | computer | laptop | personal
en_001: *laptop computer
| computer | laptop | pc | personal *ခရီးဆောင် ကွန်ပျူတာ
| ကွန်ပျူတာ၊ pc၊ ကိုယ်ပိုင်
🖥 1F5A5 *desktop computer
| computer | desktop *စားပွဲတင် ကွန်ပျူတာ
| ဒက်စ်တော့၊ ကွန်ပျူတာ
🖨 1F5A8 *printer
| computer *ပုံနှိပ်စက်
⌨ 2328 *keyboard
| computer *ကီးဘုတ်
🖱 1F5B1 *computer mouse
| computer *ကွန်ပျူတာမောက်စ်
| ၃၊ ခလုတ်၊ ကွန်ပျူတာ၊ မောက်စ်၊ သုံး
🖲 1F5B2 *trackball
| computer *မောက်စ်
💽 1F4BD *computer disk
| computer | disk | minidisk | optical *မီနီဒစ်
| ကွန်ပျူတာ၊ မီနီဒစ်က်၊ ဒစ်က်၊ အလင်း
💾 1F4BE *floppy disk
| computer | disk | floppy *ဖလော်ပီဒစ်
| ကွန်ပျူတာ၊ ဒစ်က်၊ ဖလော်ပီ
💿 1F4BF *optical disk
| cd | computer | disk | optical *အလင်းသုံးဒစ်
| ဒီဗီဒီ၊ ဘလူးရေး၊ စီဒီ၊ ကွန်ပျူတာ၊ မီနီဒစ်က်၊ ဒစ်က်၊ အလင်း
📀 1F4C0 *dvd
| blu-ray | computer | disk | optical
| blu-ray | computer | disk | dvd | optical *ဒီဗီဒီ
| ဘလူးရေး၊ စီဒီ၊ ကွန်ပျူတာ၊ ဒစ်က်၊ အလင်း
🎥 1F3A5 *movie camera
| camera | cinema | movie
en_001: *film camera
| camera | cinema | film | movie
en_AU: *movie camera
| camera | cinema | film *ရုပ်ရှင် ကင်မရာ
| ရုပ်ရှင်၊ ကင်မရာ
🎞 1F39E *film frames
| cinema | film | frames | movie *ဖလင်ကွက်များ
| ရုပ်ရှင်၊ ဖလင်၊ အကွက်များ
📽 1F4FD *film projector
| cinema | film | movie | projector | video *ရုပ်ရှင်ပြစက်
| ရုပ်ရှင်၊ ဖလင်၊ ရုပ်ရှင်ပြစက်၊ ဗီဒီယို
🎬 1F3AC *clapper board
| clapper | movie
en_AU: *clapper board
| clapper | film
| clapper | movie *ရုပ်ရှင် ကလက်ဘုတ်
| ရုပ်ရှင်၊ ကလက်
📺 1F4FA *television
| tv | video
| tele | telly | tv | video *ရုပ်မြင်သံကြား
| tv | ဗီဒီယို
📷 1F4F7 *camera
| video *ကင်မရာ
📸 1F4F8 *camera with flash
| camera | flash | video *မီးပါသည့် ကင်မရာ
| ဖလက်ရှ်၊ ကင်မရာ၊ ဗီဒီယို
📹 1F4F9 *video camera
| camera | video
en_001: *video camera
| camcorder | camera | video *ဗီဒီယို ကင်မရာ
| ဗီဒီယို၊ ကင်မရာ
📼 1F4FC *videocassette
| tape | vhs | video *ဗီဒီယို ကက်ဆက်
| ဗီဒီယို၊ တိပ်၊ vhs
🔍 1F50D *magnifying glass tilted left
| glass | magnifying | search | tool *ဘယ်သို့စောင်းထားသည့် မှန်ဘီလူး
| ဘယ်သို့ ညွှန်ပြနေသည့် မှန်ဘီလူး | မှန်ဘီလူး၊ ရှာဖွေ၊ ကိရိယာ
🔎 1F50E *magnifying glass tilted right
| glass | magnifying | search | tool *ညာသို့စောင်းထားသည့် မှန်ဘီလူး
| ညာသို့ ညွှန်ပြနေသည့် မှန်ဘီလူး | မှန်ဘီလူး၊ ရှာဖွေ၊ ကိရိယာ
🕯 1F56F *candle
| light *ဖယောင်းတိုင်
💡 1F4A1 *light bulb
| bulb | comic | electric | idea | light *မီးလုံး
| မီးလုံး၊ ဟာသ၊ လျှပ်စစ်၊ အကြံအစည်၊ မီး
🔦 1F526 *flashlight
| electric | light | tool | torch
| electric | light | tool *ဓာတ်မီး
| ဓာတ်မီး၊ မီး၊ လျှပ်စစ်၊ ကိရိယာ
🏮 1F3EE *red paper lantern
| bar | lantern | light | red *စက္ကူမီးအိမ် အနီ
| ဘား၊ ဂျပန်၊ မီးအိမ်၊ နီ
📔 1F4D4 *notebook with decorative cover
| book | cover | decorated | notebook *အလှမျက်နှာဖုံးနှင့် မှတ်စုစာအုပ်
| စာအုပ်၊ အဖုံး၊ ပြင်ဆင်ထား၊ မှတ်စုစာအုပ်
📕 1F4D5 *closed book
| book | closed *ပိတ်ထားသည့် စာအုပ်
| ပိတ်၊ စာအုပ်
📖 1F4D6 *open book
| book | open *ဖွင့်ထားသည့် စာအုပ်
| ဖွင့်ထား၊ စာအုပ်
📗 1F4D7 *green book
| book | green *အစိမ်းရောင် စာအုပ်
| အစိမ်း၊ စာအုပ်
📘 1F4D8 *blue book
| blue | book *အပြာရောင် စာအုပ်
| အပြာ၊ စာအုပ်
📙 1F4D9 *orange book
| book | orange *လိမ္မော်ရောင် စာအုပ်
| လိမ္မော်၊ စာအုပ်
📚 1F4DA *books
| book *စာအုပ်များ
📓 1F4D3 *notebook *မှတ်စုစာအုပ်
📒 1F4D2 *ledger
| notebook *လယ်ဂျာစာအုပ်
📃 1F4C3 *page with curl
| curl | document | page *တွန့်လိပ်နေသော စာရွက်
| တွန့်၊ လိပ်၊ စာရွက်
📜 1F4DC *scroll
| paper *စက္ကူလိပ်
| စာရွက် | လှိမ့်ပါ
📄 1F4C4 *page facing up
| document | page *မြင်နေရသည့် စာမျက်နှာ
| စာတမ်း၊ စာမျက်နှာ
📰 1F4F0 *newspaper
| news | paper *သတင်းစာ
| သတင်း၊ စာမျက်နှာ
🗞 1F5DE *rolled-up newspaper
| news | newspaper | paper | rolled *လိပ်ထားသည့် သတင်းစာ
| သတင်း၊ သတင်းစာ၊ စက္ကူ၊ လိပ်ထား
📑 1F4D1 *bookmark tabs
| bookmark | mark | marker | tabs *စာညှပ် တဘ်များ
| စာညှပ်၊ တံဆိပ်များ၊ အမှတ်၊ မာရ်ကား
🔖 1F516 *bookmark
| mark *စာညှပ်
🏷 1F3F7 *label
| tag *တံဆိပ်
💰 1F4B0 *money bag
| bag | dollar | money | moneybag *ငွေအိတ်
| အိတ်၊ ဒေါ်လာ၊ ငွေ၊ ငွေအိတ်
💴 1F4B4 *yen banknote
| bank | banknote | bill | currency | money | note | yen *ယန်း ငွေစက္ကူ
| ဘဏ်၊ ယန်း၊ ငွေစက္ကူ၊ ငွေတောင်းခံလွှာ၊ ငွေကြေး၊ ငွေ၊ မှတ်စု
💵 1F4B5 *dollar banknote
| bank | banknote | bill | currency | dollar | money | note *ဒေါ်လာ ငွေစက္ကူ
| ဒေါ်လာ၊ ဘဏ်၊ ငွေစက္ကူ၊ ငွေတောင်းခံလွှာ၊ ငွေကြေး၊ ငွေ၊ မှတ်စု
💶 1F4B6 *euro banknote
| bank | banknote | bill | currency | euro | money | note *ယူရို ငွေစက္ကူ
| ယူရို၊ ဘဏ်၊ ငွေစက္ကူ၊ ငွေတောင်းခံလွှာ၊ ငွေကြေး၊ ငွေ၊ မှတ်စု
💷 1F4B7 *pound banknote
| bank | banknote | bill | currency | money | note | pound
en_001: *pound banknote
| bank | banknote | bill | currency | money | note | pound | sterling *ပေါင် ငွေစက္ကူ
| ပေါင်၊ ငွေစက္ကူ၊ ဘဏ်၊ ငွေတောင်းခံလွှာ၊ ငွေကြေး၊ ငွေ၊ မှတ်စု
💸 1F4B8 *money with wings
| bank | banknote | bill | dollar | fly | money | note | wings *အတောင်ပံပါ ငွေ
| ဘဏ်၊ ငွေစက္ကူ၊ ငွေတောင်းခံလွှာ၊ ဒေါ်လာ၊ ပျံ၊ ငွေ၊ မှတ်စု၊ အတောင် | အတောင်အပံပါ ငွေ
💳 1F4B3 *credit card
| bank | card | credit | money *ခရက်ဒစ်ကတ်
| ခရက်တစ်ကတ် | ဘဏ်၊ ကဒ်၊ ခရက်တစ်၊ ငွေ
💹 1F4B9 *chart increasing with yen
| bank | chart | currency | graph | growth | market | money | rise | trend | upward | yen *ယန်းတန်ဖိုး မြင့်တက်နေသည့် ဇယားပုံ
| ဘဏ်၊ ဇယားပုံ၊ ငွေကြေး၊ ဂရပ်ပုံ၊ မြင့်တက်မှု၊ ဈေးကွက်၊ ငွေ၊ တက်၊ ဦးတည်ချက်၊ အပေါ်သို့၊ ယန်း
💱 1F4B1 *currency exchange
| bank | currency | exchange | money *နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်ခြင်း
| ဘဏ်၊ ငွေကြေး၊ လဲလှယ်ခြင်း၊ ငွေ
💲 1F4B2 *heavy dollar sign
| currency | dollar | money *ဒေါ်လာ သင်​္ကေတ စာလုံးမည်း
| နိုငျငံခွားငှကွေး၊ ဒျေါလာ၊ ငှေ်
✉ 2709 *envelope
| email | letter *စာအိတ်
| အီး−မေးလ်၊ အီးမေးလ်
📧 1F4E7 *e-mail
| email | letter | mail
| letter | mail *အီးမေးလ်
| အီးမေးလ်၊ စာ၊ မေးလ်
📨 1F4E8 *incoming envelope
| e-mail | email | envelope | incoming | letter | mail | receive *အဝင် စာအိတ်
| အီး−မေးလ်၊ အီးမေးလ်၊ စာအိတ်၊ အ၀င်၊ စာ၊ မေးလ်၊ လက်ခံ
📩 1F4E9 *envelope with arrow
| arrow | down | e-mail | email | envelope | letter | mail | outgoing | sent *မြားပါ စာအိတ်
| အီး−မေးလ်၊ အီးမေးလ်၊ စာအိတ်၊ အထွက်၊ စာ၊ မေးလ်၊ ပို့ခဲ့
📤 1F4E4 *outbox tray
| box | letter | mail | outbox | sent | tray
en_AU: *out tray
| box | letter | mail | outbox | sent | tray *စာထွက်ဗန်း
| ပုံး၊ စာ၊ မေးလ်၊ ထွက်စာ၊ ပို့ခဲ့၊ ဗန်း
📥 1F4E5 *inbox tray
| box | inbox | letter | mail | receive | tray
en_AU: *in tray
| box | inbox | letter | mail | receive | tray *စာဝင်ဗန်း
| ပုံး၊ ၀င်စာ၊ စာ၊ မေးလ်၊ လက်ခံ၊ ဗန်း
📦 1F4E6 *package
| box | parcel *အထုပ်
| သေတ္တာ၊ ပါဆယ်
📫 1F4EB *closed mailbox with raised flag
| closed | mail | mailbox | postbox
en_AU: *closed letterbox with raised flag
en_001: *closed mailbox with raised flag
| closed | closed postbox with raised flag | letterbox | mail | mailbox | post | post box | postbox *အလံတင်ထားသည့် စာတိုက်ပုံးအပိတ်
| ပိတ်ထား၊ မေးလ်၊ စာတိုက်ပုံး၊ စာတိုက်သေတ္တာ
📪 1F4EA *closed mailbox with lowered flag
| closed | lowered | mail | mailbox | postbox
en_AU: *closed letterbox with lowered flag
en_001: *closed mailbox with lowered flag
| closed | closed postbox with lowered flag | letterbox | lowered | mail | mailbox | post | post box | postbox *အလံချထားသည့် စာတိုက်ပုံးအပိတ်
| ပိတ်ထား၊ အလံချထား၊ မေးလ်၊ စာတိုက်ပုံး၊ စာတိုက်သေတ္တာ
📬 1F4EC *open mailbox with raised flag
| mail | mailbox | open | postbox
en_AU: *open letterbox with raised flag
en_001: *open mailbox with raised flag
| mail | mailbox | open | open postbox with raised flag | post | post box | postbox *အလံတင်ထားသည့် စာတိုက်ပုံးအပွင့်
| မေးလ်၊ စာတိုက်ပုံး၊ ဖွင့်၊ စာတိုက်သေတ္တာ
📭 1F4ED *open mailbox with lowered flag
| lowered | mail | mailbox | open | postbox
en_AU: *open letterbox with lowered flag
en_001: *open mailbox with lowered flag
| lowered | mail | mailbox | open | open postbox with lowered flag | post | post box | postbox *အလံချထားသည့် စာတိုက်ပုံးအပွင့်
| အလံချထား၊ မေးလ်၊ စာတိုက်ပုံး၊ ဖွင့်၊စာတိုက်သေတ္တာ
📮 1F4EE *postbox
| mail | mailbox
en_CA: *mailbox *စာတိုက်ပုံး
| မေးလ်၊ စာတိုက်ပုံး
🗳 1F5F3 *ballot box with ballot
| ballot | box *မဲပါသည့် မဲပုံး
| မဲ၊ ပုံး
✏ 270F *pencil *ခဲတံ
✒ 2712 *black nib
| nib | pen *အနက်ရောင် ကလောင်သွား
| ကလောင်တံ | ကလောင်သွား
🖋 1F58B *fountain pen
| fountain | pen *ဖောင်တိန်
| ဖောင်တိန်၊ ကလောင်တံ
🖊 1F58A *pen
| ballpoint *မင်တံ
🖌 1F58C *paintbrush
| painting *စုတ်တံ
🖍 1F58D *crayon *ရောင်စုံဖယောင်းခဲတံ
📝 1F4DD *memo
| pencil *မှတ်စု
💼 1F4BC *briefcase *ရုံးသုံးလက်ဆွဲအိတ်
| ရုံး | လက်ဆွဲအိတ်
📁 1F4C1 *file folder
| file | folder *ဖိုင်တွဲ
| ဖိုင်၊ အတွဲ
📂 1F4C2 *open file folder
| file | folder | open *ဖွင့်ထားသည့် ဖိုင်တွဲ
| ဖွင့်၊ ဖိုင်၊ အတွဲ
🗂 1F5C2 *card index dividers
| card | dividers | index *အညွှန်းကဒ် ခွဲသည့်အရာ
| ကဒ်၊ ခြားပေး၊ အညွှန်း
📅 1F4C5 *calendar
| date *ပြက္ခဒိန်
📆 1F4C6 *tear-off calendar
| calendar *ရွက်ဆုတ် ပြက္ခဒိန်
| ဆုတ်ဖြဲယူရသည့် ပြက္ခဒိန် | ပြက္ခဒိန်
🗒 1F5D2 *spiral notepad
| note | pad | spiral *လှည့်နိုင်သည့် မှတ်စုစာအုပ်
| မှတ်စု၊ စာအုပ်၊ လှည့်
🗓 1F5D3 *spiral calendar
| calendar | pad | spiral *လှည့်နိုင်သည့် ပြက္ခဒိန်
| ပြက္ခဒိန်၊ စာအုပ်၊ လှည့်
📇 1F4C7 *card index
| card | index | rolodex *ကဒ် အညွှန်း
| ကဒ်၊ အညွှန်း၊ ရိုလိုဒက်စ်
📈 1F4C8 *chart increasing
| chart | graph | growth | trend | upward *မြင့်တက်နေပုံပြ ဇယား
| ဇယားပုံ၊ ဂရပ်ပုံ၊ မြင့်တက်မှု၊ ဦးတည်ချက်၊ အပေါ်သို့ | မြင့်တက်နေသည့် ဇယားပုံ
📉 1F4C9 *chart decreasing
| chart | down | graph | trend *နိမ့်ဆင်းနေပုံပြ ဇယား
| ဇယားပုံ၊ အောက်သို့၊ ဂရပ်ပုံ၊ ဦးတည်ချက် | နိမ့်ဆင်းနေသည့် ဇယားပုံ
📊 1F4CA *bar chart
| bar | chart | graph *ဘားကွက်ပြ ဇယား
| ဘား ဇယားပုံ | ဘား၊ ဇယားပုံ၊ ဂရပ်ပုံ
📋 1F4CB *clipboard *ကလစ်ဘုတ်
| ကလစ်ဖြင့်ညှပ်သည့် ဘုတ်ပြား
📌 1F4CC *pushpin
| pin *ဖိထိုးရသည့် ပင်အပ်
📍 1F4CD *round pushpin
| pin | pushpin
en_AU: *round drawing-pin
| pin | pushpin *ထိုးအပ် အဝိုင်း
| အပ်၊ ဖိအပ်
📎 1F4CE *paperclip *စက္ကူညှပ်
🖇 1F587 *linked paperclips
| link | paperclip *ချိတ်ထားသည့် စက္ကူညှပ်များ
| ချိတ်၊ စက္ကူညှပ်များ
📏 1F4CF *straight ruler
| ruler | straight edge *ပေတံ
| ပေတံ၊ ဖြောင့်နေသည့် အနား
📐 1F4D0 *triangular ruler
| ruler | set | triangle
en_001: *set square
| ruler | set | triangle *ထောင့်မှန် ပေတံ
| ပေတံ၊ ထောင့်မှန်၊ အစုံ
✂ 2702 *scissors
| cutting | tool *ကတ်ကြေး
🗃 1F5C3 *card file box
| box | card | file *ကဒ်ဖိုင် သေတ္တာ
| ကဒ်၊ ဖိုင်၊ သေတ္တာ
🗄 1F5C4 *file cabinet
| cabinet | file | filing *ဖိုင် အံဆွဲ
| ဖိုင်၊ အံဆွဲ
🗑 1F5D1 *wastebasket
en_001: *wastepaper basket
| paper bin | wastebasket *အမှိုက်ခြင်း
| ထည့်ရန် | အမှိုက်
🔒 1F512 *locked
| closed *ပိတ်နေသော သော့ခလောက်
🔓 1F513 *unlocked
| lock | open | unlock *ပွင့်နေသော သော့ခလောက်
| သော့ခလောက်၊ ဖွင့်၊ သော့ဖွင့်
🔏 1F50F *locked with pen
| ink | lock | nib | pen | privacy *မင်တံနှင့် သော့ခလောက်
| မင်၊ သော့ခလောက်၊ နစ်၊ ကလောင်တံ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ
🔐 1F510 *locked with key
| closed | key | lock | secure *ပိတ်ထားသည့် သော့ခလောက်နှင့် သော့
| ပိတ်ထား၊ သော့၊ သော့ခလောက်၊ လုံခြုံစေပါ
🔑 1F511 *key
| lock | password *သော့
| သော့ခလောက်၊ စကားဝှက်
🗝 1F5DD *old key
| clue | key | lock | old *သော့ဟောင်း
| သဲလွန်စ၊ သော့၊ သော့ခလောက်၊ အဟောင်း
🔨 1F528 *hammer
| tool *တူ
⛏ 26CF *pick
| mining | tool
| mining | pickaxe | tool *ပေါက်ချွန်း
| တူးဖေါ်ရေး ကိရိယာ
⚒ 2692 *hammer and pick
| hammer | pick | tool
en_001: *hammer and pick
| hammer | hammer and pickaxe | pick | tool *တူနှင့် ပေါက်ချွန်း
| တူ၊ ပေါက်ချွန်း၊ ကိရိယာ
🛠 1F6E0 *hammer and wrench
| hammer | spanner | tool | wrench
en_CA: *hammer and wrench *တူနှင့် ခွ
| တူ၊ ကိရိယာ၊ ခွ
🗡 1F5E1 *dagger
| knife | weapon *ဓားမြှောင်
| ဓား၊ လက်နက်
⚔ 2694 *crossed swords
| crossed | swords | weapon *ဓားနှစ်လက် ကြက်ခြေခတ်
| ကြက်ခြေခတ် | ဓားနှစ်လက် | လက်နက်
🔫 1F52B *pistol
| gun | handgun | revolver | tool | weapon *ပစ္စတို
| သေနတ်၊ ခြောက်လုံးပြူး၊ လက်နက်၊ ကိရိယာ
🏹 1F3F9 *bow and arrow
| Sagittarius | archer | archery | arrow | bow | tool | weapon | zodiac *လေးနှင့် မြား
| လေး၊ မြား၊ ဓနု၊ ကိရိယာ၊ လက်နက်၊ ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်
🛡 1F6E1 *shield
| weapon *ဒိုင်း
🔧 1F527 *wrench
| spanner | tool
en_CA: *wrench *ခွ
🔩 1F529 *nut and bolt
| bolt | nut | tool *မူလီနှင့် မူလီခေါင်း
| မူလီ၊ မူလီခေါင်း၊ ကိရိယာ
⚙ 2699 *gear
| cog | cogwheel | tool *ဂီယာ
🗜 1F5DC *clamp
| compress | tool | vice *ပြုတ်တူ
| ကိရိယာ၊ ပြုတ်တူ | ဖိညှပ်စက်
⚖ 2696 *balance scale
| Libra | balance | justice | scales | tool | weight | zodiac *ချိန်ခွင်
| ချိန်ခွင်၊ ညီမျှရေး၊ ချိန်ခွင်ကိုင်ထားသူ၊ ကိရိယာ၊ အလေးချိန်၊ ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်
🔗 1F517 *link *ချိတ်
⛓ 26D3 *chains
| chain *ချိန်းကြိုး
⚗ 2697 *alembic
| chemistry | tool *အငွေ့ပြန်ဘူး
| ဓာတုဗေဒ၊ ကိရိယာ
🔬 1F52C *microscope
| science | tool *အဏုကြည့်မှန်ပြောင်း
🔭 1F52D *telescope
| science | tool *အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်း
📡 1F4E1 *satellite antenna
| antenna | dish | satellite *ဂြိုဟ်တု စလောင်း
| ဂြိုဟ်တု၊ စလောင်း၊ ဧရီယာတိုင်
💉 1F489 *syringe
| doctor | medicine | needle | shot | sick | tool *ဆေးထိုးအပ်
| ဆေးကု၊ ဆရာဝန်၊ အပ်၊ ထိုး၊ ကိရိယာ၊ ဖျားနာ
💊 1F48A *pill
| doctor | medicine | sick
| capsule | doctor | medicine | sick | tablet *ဆေးလုံး
| ဆေးကု၊ ဆရာဝန်၊ ဖျားနာ
🚪 1F6AA *door *တံခါး
🛏 1F6CF *bed
| hotel | sleep *ခုတင်
🛋 1F6CB *couch and lamp
| couch | hotel | lamp
en_001: *sofa and lamp
| couch | hotel | lamp | sofa *ဆိုဖာနှင့် မီးတိုင်
| ဆိုဖာ၊ ဟော်တယ်၊ မီး
🚽 1F6BD *toilet
| WC | facilities | loo
| lavatory | loo *အိမ်သာ
🚿 1F6BF *shower
| water *ရေပန်း
🛁 1F6C1 *bathtub
| bath | tub *ရေချိုးကန်
🛒 1F6D2 *shopping cart
| cart | shopping | trolley
en_CA: *shopping cart *စျေးဝယ်တွန်းလှည်း
| စျေးဝယ်သည် | တွန်းလှည်း | လက်တွန်းလှည်း
🚬 1F6AC *cigarette
| smoking *ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း
| မီးခို၊ သောက်
⚰ 26B0 *coffin
| death *အခေါင်းတလား
⚱ 26B1 *funeral urn
| ashes | death | funeral | urn *အရိုးအိုး
| သေခြင်း၊ အရိုးအိုး
🗿 1F5FF *moai
| face | moyai | statue *moai
| moai၊ မျက်နှာ၊ အထိမ်းအမှတ်
🏧 1F3E7 *ATM sign
| atm | automated | bank | teller
en_001: *ATM sign
| atm | automated | bank | cashpoint | teller *ATM သင်္ကေတ
| ATM၊ အလိုအလျောက်၊ ဘဏ်၊ ငွေထုတ်စက်
🚮 1F6AE *litter in bin sign
| litter | litter bin
en_001: *litter in bin sign
| litter | litter bin | rubbish *အမှိုက်ထည့်ရန် ဆိုင်းဘုတ်
| အမှိုက်၊ အမှိုက်ပုံး
🚰 1F6B0 *potable water
| drinking | potable | water *သောက်ရေ
| သောက်၊ သောက်ရေ၊ ရေ
♿ 267F *wheelchair symbol
| access *ဘီးတပ်ကုလားထိုင်
🚹 1F6B9 *men’s room
| lavatory | man | restroom | wc
en_001: *men’s toilet
| lavatory | man | restroom | wc *အမျိုးသား သန့်စင်ခန်း
| အမျိုးသား အခန်း | အိမ်သာ၊ အမျိုးသား၊ ရေအိမ်၊ wc
🚺 1F6BA *women’s room
| lavatory | restroom | wc | woman
en_001: *women’s toilet
| lavatory | restroom | wc | woman *အမျိုးသမီး သန့်စင်ခန်း
| အမျိုးသမီး အခန်း | အိမ်သာ၊ အမျိုးသမီး၊ ရေအိမ်၊ wc
🚻 1F6BB *restroom
| WC | lavatory
| WC | lavatory | restroom
en_CA: *washroom *အများသုံး ရေအိမ်
| ရေအိမ်၊ wc
🚼 1F6BC *baby symbol
| baby | changing *ကလေး သင်္ကေတ
| ကလေး၊ လဲရန်
🚾 1F6BE *water closet
| closet | lavatory | restroom | water | wc
| closet | lavatory | restroom | water | wc *ရေအိမ်
| ရေအိမ်၊ အိမ်သာ၊ ရေ၊ w
🛂 1F6C2 *passport control
| control | passport *နိုင်ငံကူးလက်မှတ် စစ်ဆေးရေးဌာန
| နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ စစ်ဆေး
🛃 1F6C3 *customs *အကောက်ခွန်
🛄 1F6C4 *baggage claim
| baggage | claim *ပစ္စည်းရွေးရန်
| အထုပ်အပိုး၊ ပြန်ရယူ
🛅 1F6C5 *left luggage
| baggage | locker | luggage *ပစ္စည်းအပ်ရန်
| ရာဌာန၊ ၀န်စည်များ | အထုပ်အပိုး၊ ခေတ္တအပ်နှံထား
⚠ 26A0 *warning *သတိပေးချက်
🚸 1F6B8 *children crossing
| child | crossing | pedestrian | traffic *ကလေးများ လမ်းကူးသည့်နေရာ
| ကလေး၊ လမ်းဆုံ၊ ခြေကျင်၊ ယာဥ်သွားလာမှု
⛔ 26D4 *no entry
| entry | forbidden | no | not | prohibited | traffic *မဝင်ရ
| အဝင်၊ တားမြစ်၊ မလုပ်ရ၊ မရှိ၊ ခွင့်မပြု၊ ယာဥ်သွားလာမှု
🚫 1F6AB *prohibited
| entry | forbidden | no | not *တားမြစ်နေရာ
| အဝင်၊ တားမြစ်၊ မလုပ်ရ၊ မရှိ
🚳 1F6B3 *no bicycles
| bicycle | bike | forbidden | no | not | prohibited *စက်ဘီးမစီးရ
| စက်ဘီး၊ တားမြစ်၊ မစီးရ၊ မလုပ်ရ၊ ခွင့်မပြု၊ ယာဥ်
🚭 1F6AD *no smoking
| forbidden | no | not | prohibited | smoking *ဆေးလိပ် မသောက်ရ
| တားမြစ်၊ မလုပ်ရ၊ ခွင့်မပြု၊ စီးကရက် သောက်
🚯 1F6AF *no littering
| forbidden | litter | no | not | prohibited *အမှိုက် မပစ်ရ
| တားမြစ်၊ အမှိုက်၊ မပစ်ရ၊ ခွင့်မပြု
🚱 1F6B1 *non-potable water
| non-drinking | non-potable | water
en_AU: *non-drinkable water
| non-drinking | non-potable | water *သောက်ရေ မဟုတ်
| သောက်၊ တားမြစ်၊ မဟုတ်၊ သောက်ရေ၊ ခွင့်မပြု၊ ရေ
🚷 1F6B7 *no pedestrians
| forbidden | no | not | pedestrian | prohibited *ဖြတ်သန်း မသွားရ
| ခြေကျင်မလျှောက်ရ | တားမြစ်၊ ခြေကျင်၊ မလျှောက်ရ၊ ခွင့်မပြု
📵 1F4F5 *no mobile phones
| cell | forbidden | mobile | no | not | phone | prohibited | telephone *မိုဘိုင်းဖုန်း မသုံးရ
| ဆဲလ်၊ တားမြစ်၊ မိုဘိုင်း၊ မသုံးရ၊ မရ၊ ဖုန်း၊ ခွင့်မပြု၊ တယ်လီဖုန်း
🔞 1F51E *no one under eighteen
| 18 | age restriction | eighteen | forbidden | no | not | prohibited | underage *ဆယ့်ရှစ်နှစ်အောက် ခွင့်မပြု
| ၁၈၊ အသက် ကန့်သတ်ချက်၊ ဆယ့်ရှစ်၊ တားမြစ်၊ မလုပ်ရ။ မရ၊ တားမြစ်၊ အသက်မပြည့်
☢ 2622 *radioactive
| sign *ရေဒီယိုသတ္တိကြွ
☣ 2623 *biohazard
| sign *ဇီဝအန္တရာယ်
| ဆိုင်းဘုတ် | လူသားအတွက် အန္တရာယ်ရှိသော
⬆ 2B06 *up arrow
| arrow | cardinal | direction | north *အပေါ်ညွှန် မြား
| မြား၊ အရေးကြီးဆုံး၊ လမ်းညွှန်၊ မြောက် | အပေါ် မြား
↗ 2197 *up-right arrow
| arrow | direction | intercardinal | northeast *ညာဘက်အပေါ်ညွှန် မြား
| ညာဖက်အပေါ် မြား | မြား၊ ဌာနတွင်း အရေးကြီးဆုံး၊ လမ်းညွှန်၊ အရှေ့မြောက်
➡ 27A1 *right arrow
| arrow | cardinal | direction | east *ညာညွှန် မြား
| ညာ မြား | မြား၊ အရေးကြီးဆုံး၊ လမ်းညွှန်၊ အရှေ့
↘ 2198 *down-right arrow
| arrow | direction | intercardinal | southeast *ညာဘက်အောက်ညွှန် မြား
| ညာဖက်အောက် မြား | မြား၊ ဌာနတွင်း အရေးကြီးဆုံး၊ အရှေ့တောင်
⬇ 2B07 *down arrow
| arrow | cardinal | direction | down | south *အောက်ညွှန် မြား
| မြား၊ အရေးကြီးဆုံး၊ လမ်းညွှန်၊ အောက်သို့၊ တောင် | အောက် မြား
↙ 2199 *down-left arrow
| arrow | direction | intercardinal | southwest *ဘယ်ဘက်အောက်ညွှန် မြား
| ဘယ်ဖက်အောက် မြား | မြား၊ ဌာနတွင်း အရေးကြီးဆုံး၊ လမ်းညွှန်၊ အနောက်တောင်
⬅ 2B05 *left arrow
| arrow | cardinal | direction | west *ဘယ်ညွှန် မြား
| ဘယ် မြား | မြား၊ အရေးကြီးဆုံး၊ လမ်းညွှန်၊ အနောက်
↖ 2196 *up-left arrow
| arrow | direction | intercardinal | northwest *ဘယ်ဘက်အပေါ်ညွှန် မြား
| ဘယ်အပေါ် မြား | မြား၊ ဌာနတွင်း အရေးကြီးဆုံး၊ လမ်းညွှန်၊ အနောက်မြောက်
↕ 2195 *up-down arrow
| arrow *အပေါ်−အောက်ပြ မြား
| မြား | အပေါ်−အ​ောက် မြား
↔ 2194 *left-right arrow
| arrow *ဘယ်−ညာပြ မြား
| ဘယ်−ညာ မြား | မြား
↩ 21A9 *right arrow curving left
| arrow *ညာညွှန် ဘယ်ဝိုက် မြား
| ဘယ်ကွေ့ ညာဖက် မြား | မြား
↪ 21AA *left arrow curving right
| arrow *ဘယ်ညွှန် ညာဝိုက် မြား
| ညာကွေ့ ဘယ်ဖက် မြား | မြား
⤴ 2934 *right arrow curving up
| arrow *ညာညွှန် အပေါ်ဝိုက် မြား
| မြား | အပေါ်ကွေ့ ညာ မြား
⤵ 2935 *right arrow curving down
| arrow | down *ညာညွှန် အောက်ဝိုက် မြား
| အောက်ကွေ့ ညာ မြား | အောက်သို့၊ မြား
🔃 1F503 *clockwise vertical arrows
| arrow | clockwise | reload *ညာရစ် ​ဒ​ေါင်လိုက် မြားများ
| ညာရစ်၊ မြား၊ ပြန်တင်
🔄 1F504 *counterclockwise arrows button
| anticlockwise | arrow | counterclockwise | withershins
en_CA: *counterclockwise arrows button *ဘယ်ရစ် မြားများ ခလုတ်
| လက်ဝဲရစ် မြားများ ခလုတ် | လက်ဝဲရစ်၊ မြား၊ လက်ဝဲပတ်၊ နေနှင့်ဆန့်ျကျင်လျက်
🔙 1F519 *BACK arrow
| arrow | back *နောက်သို့ မြား
| နောက်သို့၊ မြား
🔚 1F51A *END arrow
| arrow | end *အဆုံးသတ်ပြ မြား
| မြှား | အဆုံး | အဆုံးသတ်ပြ မြှား
🔛 1F51B *ON! arrow
| arrow | mark | on *ဖွင့်ထားပြီ။ မြား
| မြား၊ အမှတ်၊ ဖွင့်ထား
🔜 1F51C *SOON arrow
| arrow | soon *မကြာမီ မြား
| မကြာမီ၊ မြား
🔝 1F51D *TOP arrow
| arrow | top | up *ထိပ်သို့ မြား
| ထိပ်၊ မြား၊ အပေါ်သို့
🛐 1F6D0 *place of worship
| religion | worship *ဝတ်ပြုရာနေရာ
| ဘာသာရေး၊ ရှိခိုးရာ
⚛ 269B *atom symbol
| atheist | atom *အဏုမြူ သင်္ကေတ
| အဏုမြူ၊ ဘုရားမဲ့ဝါဒီ
🕉 1F549 *om
| Hindu | religion
| Hindu | aum | religion *ဥုံ
| ဘာသာရေး | ဟိန္ဒူ
✡ 2721 *star of David
| David | Jew | Jewish | religion | star *ဒေးဗစ်ကြယ်
| ဒေးဗစ်၊ ဂျူး၊ ဂျူးလူမျိုး၊ ဘာသာရေး၊ ကြယ်
☸ 2638 *wheel of dharma
| Buddhist | dharma | religion | wheel
en_001: *wheel of dharma
| Buddhist | dharma | dharmachakra | religion | wheel *ဓမ္မစကြာ
| ဗုဒ္ဓဝါဒီ၊ ဓမ္မ၊ ဘာသာရေး၊ စကြာ
☯ 262F *yin yang
| religion | tao | taoist | yang | yin
en_CA: *yin yang
| Tao | Taoist | religion | yang | yin *ယင်ယန်း
| ဘာသာရေ | ၊ တာအို၊ တာအိုဝါဒီ၊ ယန်း၊ ယင်
✝ 271D *latin cross
| Christian | cross | religion
en_AU: *Christian cross
en_CA: *Latin cross *လက်တင် လက်ဝါးကပ်တိုင်
| ခရစ်ယာန်၊ ကားတိုင်၊ ဘာသာရေး | လက်တင် ကားတိုင်
☦ 2626 *orthodox cross
en_CA: *Orthodox cross *ရှေးရိုးခရစ်ယာန် အသင်းတော် လက်ဝါးကပ်တိုင်
| ခရစ်ယာန်၊ ကားတိုင်၊ ဘာသာရေး | အောတိုဒိုစ် ကားတိုင်
☪ 262A *star and crescent
en_CA: *star and crescent
| Islam | Muslim | religion *ကြယ်နှင့် လခြမ်း
| အစ္စလာမ်၊ မူဆလင်၊ ဘာသာရေး
☮ 262E *peace symbol
| peace *ငြိမ်းချမ်းရေး သင်​္ကေတ
🕎 1F54E *menorah
| candelabrum | candlestick | religion *ဖယောင်းတိုင်စင်
| ဖယောင်းတိုင်စင်၊ ဘာသာရေး
🔯 1F52F *dotted six-pointed star
| fortune | star *အစက်ချထားသည့် ခြောက်ထောင့်ကြယ်
| ကံ၊ ကြယ်
♈ 2648 *Aries
| ram | zodiac *မိဿ
| မိဿာ | မိဿာ၊ ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်
♉ 2649 *Taurus
| bull | ox | zodiac *ပြိဿ
| ပြိဿာ | ပြိဿာ၊ နွားထီး၊ ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်
♊ 264A *Gemini
| twins | zodiac *မေထုန်
| မေထုန်၊ ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်
♋ 264B *Cancer
| crab | zodiac *ကရကဋ်
| ကရကဍ် | ကရကဍ်၊ ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်
♌ 264C *Leo
| lion | zodiac *သိဟ်
| သိဟ်၊ ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်
♍ 264D *Virgo
| zodiac *ကန်
| ကန်၊ ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်
♎ 264E *Libra
| balance | justice | scales | zodiac *တူ ရာသီ
| တူ၊ ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်
♏ 264F *Scorpio
| scorpion | scorpius | zodiac
en_CA: *Scorpio *ဗြိစ္ဆာ
| ဗြိစ္ဆာ၊ ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်
♐ 2650 *Sagittarius
| archer | zodiac *ဓနု
| ဓနု၊ ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်
♑ 2651 *Capricorn
| goat | zodiac *မကရ
| ၊ ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်
♒ 2652 *Aquarius
| bearer | water | zodiac *ကုံ
| ကုံ၊ ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်
♓ 2653 *Pisces
| fish | zodiac *မိန်
⛎ 26CE *Ophiuchus
| bearer | serpent | snake | zodiac *အော့ဖီယူးကပ်စ်
| ophiuchus | ophiuchus၊ မြွေ၊ ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်
🔀 1F500 *shuffle tracks button
| arrow | crossed *တေးသွား ရောမွှေရန် ခလုတ်
| မြား၊ ကြက်ခြေခတ်ထား
🔁 1F501 *repeat button
| arrow | clockwise | repeat *ပြန်ဖွင့်ရန် ခလုတ်
| မြား၊ လက်ယာရစ်၊ ထပ်ဖွင့်
🔂 1F502 *repeat single button
| arrow | clockwise | once *တစ်ပုဒ်ကို ပြန်ဖွင့်ရန် ခလုတ်
| မြား၊ လက်ယာရစ်၊ တစ်ကြိမ်
▶ 25B6 *play button
| arrow | play | right | triangle *ဖွင့်ရန် ခလုတ်
| မြား၊ ဖွင့်၊ ညာ၊ တြိဂံ
⏩ 23E9 *fast-forward button
| arrow | double | fast | forward *ရှေ့သို့အမြန် ခလုတ်
| မြား၊ နှစ်ထပ်ကွမ်း၊ အမြန်၊ ရှေ့သို့
⏭ 23ED *next track button
| arrow | next scene | next track | triangle *နောက် တေးသွား ခလုတ်
| မြား၊ နောက်ဇာတ်ကွက်၊ နောက် သီချင်း၊ တြိဂံ
⏯ 23EF *play or pause button
| arrow | pause | play | right | triangle *ဖွင့် သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ ခလုတ်
| မြား၊ ဆိုင်းငံ့၊ ဖွင့်၊ ညာ၊ တြိဂံ
◀ 25C0 *reverse button
| arrow | left | reverse | triangle *နောက်ပြန် ခလုတ်
| မြား၊ ဘယ်၊ ပြန်သွား၊ တြိဂံ
⏪ 23EA *fast reverse button
| arrow | double | rewind *နောက်သို့အမြန် ခလုတ်
| မြား၊ နှစ်ထပ်၊ ပြန်ရစ်
⏮ 23EE *last track button
| arrow | previous scene | previous track | triangle *နောက်ဆုံး တေးသွား ခလုတ်
| မြား၊ အရင်ဇာတ်ကွက်၊ အရင်သီချင်း၊ တြိဂံ
🔼 1F53C *upwards button
| arrow | button | red
en_CA: *upward button *အပေါ် ခလုတ်
| မြား၊ ခလုတ်၊ နီ
⏫ 23EB *fast up button
| arrow | double *အပေါ်သို့အမြန် ခလုတ်
| မြား၊ နှစ်ထပ်
🔽 1F53D *downwards button
| arrow | button | down | red
en_CA: *downward button *အောက်သို့ ခလုတ်
| မြား၊ ခလုတ်၊ အောက်သို့၊ နီ
⏬ 23EC *fast down button
| arrow | double | down *အောက်သို့အမြန် ခလုတ်
| မြား၊ နှစ်ထပ်၊ အောက်သို့
⏸ 23F8 *pause button
| bar | double | pause | vertical *ဆိုင်းငံ့ရန် ခလုတ်
| ဘား၊ နှစ်ထပ်၊ ဆိုင်းငံ့၊ ​ဒေါင်လိုက်
⏹ 23F9 *stop button
| square | stop *ရပ်တန့် ခလုတ်
| လေးထောင့်ကွက်၊ ရပ်
⏺ 23FA *record button
| circle | record *ဖမ်းယူရန် ခလုတ်
| စက်ဝိုင်း၊ ဖမ်းယူ
⏏ 23CF *eject button
| eject *ထုတ်ယူရန်ခလုတ်
🎦 1F3A6 *cinema
| camera | film | movie *ရုပ်ရှင်
| ရုပ်ရှင်၊ ကင်မရာ၊ ဖလင်
🔅 1F505 *dim button
| brightness | dim | low *မှိန်စေရန် ခလုတ်
| တောက်ပမှု၊ မှိန်၊ နိမ့်
🔆 1F506 *bright button
| bright | brightness *လင်းစေရန် ခလုတ်
| တောက်ပ၊ တောက်ပမှု
📶 1F4F6 *antenna bars
| antenna | bar | cell | mobile | phone | signal | telephone *ဧရီယာတိုင် ဘားများ
| ဧရီယာတိုင်၊ ဘား၊ ဆဲလ်၊ မိုဘိုင်း၊ ဖုန်း၊ အချက်ပြမှု၊ တယ်လီဖုန်း
📳 1F4F3 *vibration mode
| cell | mobile | mode | phone | telephone | vibration *တုန်ခါမှု မုဒ်
| ဆလ်၊ မိုဘိုင်း၊ မုဒ်၊ ဖုန်း၊ တယ်လီဖုန်မး၊ တုန်ခါမှု
📴 1F4F4 *mobile phone off
| cell | mobile | off | phone | telephone *မိုဘိုင်းဖုန်း ပိတ်ထားသည်
| ဆဲလ်၊ မိုဘိုင်း၊ ပိတ်၊ ဖုန်း ၊ တယ်လီဖုန်း
♀ 2640 *female sign
| woman *အမသင်္ကေတ
| အမ | အမျိုးသမီး
♂ 2642 *male sign
| man *အဖိုသင်္ကေတ
| အဖို | အမျိုးသား
⚕ 2695 *medical symbol
| aesculapius | medicine | staff *ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သင်္ကေတ
| ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ | ဆေးဝါး
♻ 267B *recycling symbol
| recycle *ထပ်တလဲလဲသုံးမှု သင်​္ကေတ
⚜ 269C *fleur-de-lis *နှင်းပန်းပုံစံ
🔱 1F531 *trident emblem
| anchor | emblem | ship | tool | trident *တြိဒဏ္ဍ တံဆိပ်
| ကျောက်ဆူး၊ တြိဒဏ္ဍ၊ တံဆိပ်၊ သင်​္ဘော၊ ကိရိယာ
📛 1F4DB *name badge
| badge | name *အမည် တံဆိပ်
| အမည်၊ တံဆိပ်
🔰 1F530 *Japanese symbol for beginner
| Japanese | beginner | chevron | green | leaf | tool | yellow *စသင်သူအတွက် ဂျပန် သင်​္ကေတ
| စသင်သူ၊ အစိမ်း၊ ဂျပန်၊ အရွက်၊ ကိရိယာ၊ အဝါ
⭕ 2B55 *heavy large circle
| circle | o *အကြီးစား စက်ဝန်း
| စက်၀န်း၊ o | လေးလံသည့် စက်၀န်းကြီး
✅ 2705 *white heavy check mark
| check | mark
en_001: *white heavy tick
| check | mark *အကြီးစား ခြစ်မှတ်ဖြူ
| ခြစ်မှတ်၊ အမှတ် | လေးလံသည့် ခြစ်မှတ်ဖြူ
☑ 2611 *ballot box with check
| ballot | box | check
en_001: *ballot box with tick
| ballot | box | check *ခြစ်မှတ်ပါသည့် မဲပုံး
| ခြစ်ထား၊ မဲပုံး
✔ 2714 *heavy check mark
en_001: *heavy tick
| check | mark *အကြီးစား ခြစ်မှတ်
| ခြစ်မှတ်၊ အမှတ် | လေးလံသည့် ခြစ်မှတ်
✖ 2716 *heavy multiplication x
| cancel | multiplication | multiply | x
en_001: *heavy multiplication x
| cancel | math | maths | multiplication | multiply | x *အမြှောက်လက္ခဏာသင်္ကေတ အကြီးစား
| ဖျက်သိမ်း၊ အမြှောက်၊ မြှောက်ပါ x
❌ 274C *cross mark
| cancel | mark | multiplication | multiply | x *ကြက်ခြေခတ် အမှတ်
| ဖျက်သိမ်း၊ အမှတ်၊ အမြှောက်၊ မြှောက်ပါ၊ x
❎ 274E *cross mark button
| mark | square *ကြက်ခြေခတ် အမှတ် ခလုတ်
| အမှတ်၊ လေ​းထောင့်ကွက်
➕ 2795 *heavy plus sign
| math | plus
en_001: *heavy plus sign
| math | maths | plus *အပေါင်းလက္ခဏာ သင်္ကေတ အကြီးစား
| လေးလံသည့် အပေါင်း လက္ခဏာ | သင်ချာ၊ အပေါင်း
➖ 2796 *heavy minus sign
| math | minus
en_001: *heavy minus sign
| math | maths | minus *အနှုတ်လက္ခဏာ သင်္ကေတ အကြီးစား
| လေးလံသည့် အနှုတ် လက္ခဏာ | သင်ချာ၊ အနှုတ်
➗ 2797 *heavy division sign
| division | math
en_001: *heavy division sign
| division | math | maths *အစားလက္ခဏာ သင်္ကေတ အကြီးစား
| လေးလံသည့် အစား လက္ခဏာ | သင်ချာ၊ အစား
➰ 27B0 *curly loop
| curl | loop *လိမ်နေသည့် အကွင်း
| လိမ်၊ အကွင်း
➿ 27BF *double curly loop
| curl | double | loop *လိမ်နေသည့် အကွင်း နှစ်ထပ်ကွမ်း
| လိမ်၊ အကွင်း နှစ်ထပ်ကွမ်း
〽 303D *part alternation mark
| mark | part *ပစ္စည်း လဲထားသည့် အမှတ်
| ပစ္စည်း၊ အမှတ်
✳ 2733 *eight-spoked asterisk
| asterisk *ရှစ်ချွန်း ခရစ်ပွင့်
✴ 2734 *eight-pointed star
| star *ရှစ်ထောင့် ကြယ်
❇ 2747 *sparkle *အရောင်လက်နေခြင်း
‼ 203C *double exclamation mark
| bangbang | exclamation | mark | punctuation *အာမေဍိတ် သင်​္ကေတ နှစ်ထပ်ကွမ်း
| ဘန်းဘန်း၊ အာမေဍိတ်၊ သင်​္ကေတ၊ ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်
⁉ 2049 *exclamation question mark
| exclamation | interrobang | mark | punctuation | question *အာမေဍိတ် မေးခွန်း သင်​္ကေတ
| အာမေဍိတ်၊ သင်​္ကေတ၊ ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်၊ မေးခွန်း၊ အမှတ်
❓ 2753 *question mark
| mark | punctuation | question *မေးခွန်း သင်​္ကေတ
| ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်၊ မေးခွန်း၊ အမှတ်
❔ 2754 *white question mark
| mark | outlined | punctuation | question *မေးခွန်း သင်​္ကေတဖြူ
| မေးခွန်း၊ ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်၊ မှတ်ပေးထား၊ အမှတ်
❕ 2755 *white exclamation mark
| exclamation | mark | outlined | punctuation *အာမေဍိတ် သင်​္ကေတဖြူ
| အာမေဍိတ်၊ ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်၊ မှတ်ပေးထား၊ အမှတ်
❗ 2757 *exclamation mark
| exclamation | mark | punctuation *အာမေဍိတ် သင်​္ကေတ
| အာမေဍိတ်၊ ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်၊ အမှတ်
〰 3030 *wavy dash
| dash | punctuation | wavy *လှိုင်းထနေသည့် မျဉ်းရှည်
| မျဥ်းရှည်၊ ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်၊ လှိူင်းထ
© 00A9 *copyright *မူပိုင်ခွင့်
® 00AE *registered *မှတ်ပုံတင်ထားသော
™ 2122 *trade mark
| mark | tm | trademark
en_CA: *trade mark
| mark | tm *ကုန် အမှတ်တံဆိပ်
| ကုန် အမှတ်တံဆိပ်၊ tm၊ တံဆိပ်
#️⃣ 0023 FE0F 20E3 *keycap: #
| keycap *ခလုတ် − #
🔟 1F51F *keycap: 10
| keycap *ခလုတ် − 10
💯 1F4AF *hundred points
| 100 | full | hundred | score *အမှတ် တစ်ရာ
| ၁၀၀၊ အပြည့်၊ တစ်ရာ၊ ရမှတ်
🔠 1F520 *input latin uppercase
| ABCD | input | latin | letters | uppercase
en_CA: *input Latin uppercase *လက်တင် စာလုံးကြီး ထည့်ရန်
| ထည့်သွင်းမှု၊ လက်တင်၊ စာလုံးများ၊ အကြီး
🔡 1F521 *input latin lowercase
| abcd | input | latin | letters | lowercase
en_CA: *input Latin lowercase *လက်တင် စာလုံးသေး ထည့်ရန်
| abcd၊ ထည့်သွင်းမှု၊ လက်တင်၊ စာလံဒးများ၊ အသေး
🔢 1F522 *input numbers
| 1234 | input | numbers *ဂဏန်းများ ထည့်ရန်
| ၁၂၃၄၊ ထည့်သွင်းမှု၊ ဂဏန်းများ
🔣 1F523 *input symbols
| input | 〒♪&% *သင်​္ကေတများ ထည့်ရန်
🔤 1F524 *input latin letters
| abc | alphabet | input | latin | letters
en_CA: *input Latin letters *လက်တင် စာလုံးများ ထည့်ရန်
| abc၊ အက္ခရာများ၊ ထည့်သွင်းမှု၊ လက်တင်၊ စာလုံးများ
🅰 1F170 *A button (blood type)
|a| blood type *A ခလုတ် (သွေးအမျိုးအစား)
|aခလုတ် | a၊ သွေး
🆎 1F18E *AB button (blood type)
| ab | blood type *AB ခလုတ် (သွေးအမျိုးအစား)
| ab ခလုတ် | ab၊ သွေး
🅱 1F171 *B button (blood type)
|b| blood type *B ခလုတ် (သွေးအမျိုးအစား)
|bခလုတ် | b၊ သွေး
🆑 1F191 *CL button
| cl *ရှင်းသွားပြီ ခလုတ်
| cl | လေးထောင့်ကွက် cl
🆒 1F192 *COOL button
| cool *အေးဆေးပဲ ခလုတ်
| cool | လေးထောင့်ကွက် cool
🆓 1F193 *FREE button
| free *အခမဲ့ ခလုတ်
| free | လေးထောင့်ကွက် free
ℹ 2139 *information
| i *သတင်းအချက်အလက်
| i | အချက်အလက်များ | အချက်အလက်များ ရင်းမြစ်
🆔 1F194 *ID button
| id | identity *အိုင်ဒီ ခလုတ်
| id၊ သက်သေခံ | လေးထောင့်ကွက် id
Ⓜ 24C2 *circled M
| circle | m *မြေအောက်ရထား သင်္ကေတ
| စက်ဝိုင်း၊ m | ဝိုင်းထားသည့် စာလုံး m
🆕 1F195 *NEW button
| new *အသစ် ခလုတ်
| လေးထောင့်ကွက် အသစ် | အသစ်
🆖 1F196 *NG button
| ng *မကောင်းပါ ခလုတ်
| ng | လေးထောင့်ကွက် ng
🅾 1F17E *O button (blood type)
| blood type | o *O ခလုတ် (သွေးအမျိုးအစား)
| o ခလုတ် | o၊ သွေး
🆗 1F197 *OK button
| OK *OK ခလုတ်
| ok | လေးထောင့်ကွက် ok
🅿 1F17F *P button
| parking *ယာဉ်ရပ်နားရန် သင်္ကေတ
| p ခလုတ် | ကားထားရုံ p
🆘 1F198 *SOS button
| help | sos *အရေးပေါ် ခလုတ်
| ကူညီပါ၊ sos | လေးထောင့်ကွက် sos
🆙 1F199 *UP! button
| mark | up *အပေါ်သို့ ခလုတ်
| အမှတ်၊ အပေါ်သို့
🆚 1F19A *VS button
| versus | vs *ဆန့်ကျင်ဘက်ပြ သင်္ကေတ
| vs၊ နှင့် | လေးထောင့်ကွက် vs
🈁 1F201 *Japanese “here” button
| Japanese | katakana | “here” | ココ *ဂျပန်ဘာသာ ဒီနေရာ ခလုတ်
| ဂျပန်ဘာသာစကား | လေးထောင့်ကွက် ကတကန ကိုကို
🈂 1F202 *Japanese “service charge” button
| Japanese | katakana | “service charge” | サ *ဂျပန်ဘာသာ ဝန်ဆောင်ခ ခလုတ်
| ဂျပန် ဘာသာစကား | လေးထောင့်ကွက် ကတကန စာ
🈷 1F237 *Japanese “monthly amount” button
| Japanese | ideograph | “monthly amount” | 月 *ဂျပန်ဘာသာ လစဉ်ကြေး ခလုတ်
| ဂျပန် ဘာသာစကား | လေးထောင့်ကွက် လ အရုပ်စာ
🈶 1F236 *Japanese “not free of charge” button
| Japanese | ideograph | “not free of charge” | 有 *ဂျပန်ဘာသာ အခမဲ့ မဟုတ်ပါ ခလုတ်
| ဂျပန် ဘာသာစကား | လေးထောင့်ကွက် တည်ရှိမှု အရုပ်စာ
🈯 1F22F *Japanese “reserved” button
| Japanese | ideograph | “reserved” | 指 *ဂျပန်ဘာသာ သီးသန့်မှာယူထားပြီး ခလုတ်
| ဂျပန် ဘာသာစကား | လေးထောင့်ကွက် လက်ချောင်း အရုပ်စာ
🉐 1F250 *Japanese “bargain” button
| Japanese | ideograph | “bargain” | 得 *ဂျပန်ဘာသာ စျေးပေါသည် ခလုတ်
| ဂျပန် ဘာသာစကား | ဝိုင်းထားသည့် သာလွန်မှု အရုပ်စာ
🈹 1F239 *Japanese “discount” button
| Japanese | ideograph | “discount” | 割 *ဂျပန်ဘာသာ လျှော့စျေး ခလုတ်
| ဂျပန် ဘာသာစကား | လေးထောင့်ကွက် ခွဲခြမ်းမှု အရုပ်စာ
🈚 1F21A *Japanese “free of charge” button
| Japanese | ideograph | “free of charge” | 無 *ဂျပန်ဘာသာ အခမဲ့ ခလုတ်
| ဂျပန် ဘာသာစကား | လေးထောင့်ကွက် ငြင်းဆိုချက် အရုပ်စာ
🈲 1F232 *Japanese “prohibited” button
| Japanese | ideograph | “prohibited” | 禁 *ဂျပန်ဘာသာ တားမြစ်ချက် ခလုတ်
| ဂျပန် ဘာသာစကား | လေးထောင့်ကွက် တားမြစ်ချက် အရုပ်စာ
🉑 1F251 *Japanese “acceptable” button
| Japanese | ideograph | “acceptable” | 可 *ဂျပန်ဘာသာ လက်ခံနိုင်သည် ခလုတ်
| တရုတ် ဘာသာစကား | ဝိုင်းထားသည့် လက်ခံမှု အရုပ်စာ
🈸 1F238 *Japanese “application” button
| Japanese | ideograph | “application” | 申 *ဂျပန်ဘာသာ မှတ်ပုံတင်၊ စာရင်းသွင်း ခလုတ်
| တရုတ် ဘာသာစကား | လေးထောင့်ကွက် ကျင့်သုံးမှု အရုပ်စာ
🈴 1F234 *Japanese “passing grade” button
| Japanese | ideograph | “passing grade” | 合 *ဂျပန်ဘာသာ အောင်မြင်မှု အဆင့်အတန်းပြ ခလုတ်
| တရုတ် ဘာသာစကား | လေးထောင့်ကွက် အတူတကွ အရုပ်စာ
🈳 1F233 *Japanese “vacancy” button
| Japanese | ideograph | “vacancy” | 空 *ဂျပန်ဘာသာ လစ်လပ်မှု ခလုတ်
| တရုတ် ဘာသာစကား | လေးထောင့်ကွက် ဗလာ အရုပ်စာ
㊗ 3297 *Japanese “congratulations” button
| Japanese | ideograph | “congratulations” | 祝 *ဂျပန်ဘာသာ ဂုဏ်ပြုမှု ခလုတ်
| တရုတ် ဘာသာစကား၊ စီဖွဲ့မှု၊ ဂုဏ်ပြုစကား၊ အရုပ်စာ | ဝိုင်းထားသည့် ဂုဏ်ပြုမှု အရုပ်စာ
㊙ 3299 *Japanese “secret” button
| Japanese | ideograph | “secret” | 秘 *ဂျပန်ဘာသာ လျှို့ဝှက်မှု ခလုတ်
| တရုတ် ဘာသာစကား၊ လျှို့ဝှက်မှု၊ အရုပ်စာ | ဝိုင်းထားသည့် လျှို့ဝှက်မှု အရုပ်စာ
🈺 1F23A *Japanese “open for business” button
| Japanese | ideograph | “open for business” | 営 *ဂျပန်ဘာသာ အလုပ်ဖွင့်သည် ခလုတ်
| တရုတ် ဘာသာစကား | လေးထောင့်ကွက် လုပ်ဆောင်မှု အရုပ်စာ
🈵 1F235 *Japanese “no vacancy” button
| Japanese | ideograph | “no vacancy” | 満 *ဂျပန်ဘာသာ လစ်လပ်မှု မရှိ ခလုတ်
| တရုတ် ဘာသာစကား | လေးထောင့်ကွက် ပြည့်စုံမှု အရုပ်စာ
▪ 25AA *black small square
| geometric | square *အနက်ရောင် လေးထောင့်ကွက် အသေး
| ဂျီဩမေတြီ၊ လေထောင့်ကွက်
▫ 25AB *white small square
| geometric | square *အဖြူရောင် လေးထောင့်ကွက် အသေး
◻ 25FB *white medium square
| geometric | square *အဖြူရောင် လေးထောင့်ကွက် အလတ်စား
| ဂျီဩမေတြီ၊ လေးထောင့်ကွက်
◼ 25FC *black medium square
| geometric | square *အနက်ရောင် လေးထောင့်ကွက် အလတ်စား
◽ 25FD *white medium-small square
| geometric | square *အဖြူရောင် လေးထောင့်ကွက် အလတ်စားအသေး
◾ 25FE *black medium-small square
| geometric | square *အနက်ရောင် လေးထောင့်ကွက် အလတ်စားအသေး
⬛ 2B1B *black large square
| geometric | square *အနက်ရောင် လေးထောင့်ကွက် အကြီး
⬜ 2B1C *white large square
| geometric | square *အဖြူရောင် လေးထောင့်ကွက် အကြီး
🔶 1F536 *large orange diamond
| diamond | geometric | orange *လိမ္မော်ရောင် စိန်ကြီး
| ဂျီဩမေတြီ၊ စိန်၊ လိမ္မော်
🔷 1F537 *large blue diamond
| blue | diamond | geometric *အပြာရောင် စိန်ကြီး
| ဂျီဩမေတြီ၊ စိန်၊ အပြာ
🔸 1F538 *small orange diamond
| diamond | geometric | orange *လိမ္မော်ရောင် စိန်အသေး
🔹 1F539 *small blue diamond
| blue | diamond | geometric *အပြာရောင် စိန်အသေး
🔺 1F53A *red triangle pointed up
| geometric | red *အပေါ်သို့ ညွှန်ပြနေသည့် အနီရောင် တြိဂံ
| ဂျီဩမေတြီ၊ နီ
🔻 1F53B *red triangle pointed down
| down | geometric | red *အောက်သို့ ညွှန်ပြနေသည့် အနီရောင် တြိဂံ
| အောက်သို့၊ ဂျီဩမေတြီ၊ စိန်၊ အတွင်းပိုင်း
💠 1F4A0 *diamond withadot
| comic | diamond | geometric | inside *အစက်ပါ စိန်
| ဟာသ၊ စိန်၊ ဂျီဩမေတြီ၊ အတွင်းပိုင်း
🔘 1F518 *radio button
| button | geometric | radio *ရေဒီယို ခလုတ်
| ရေဒီယို၊ ဂျီဩမေတြီ၊ ခလုတ်
🔲 1F532 *black square button
| button | geometric | square *အနက်ရောင် လေးထောင့်ခလုတ်
| ဂျီဩမေတြီ၊ လေးထောင့်၊ ခလုတ်
🔳 1F533 *white square button
| button | geometric | outlined | square *အဖြူရောင် လေးထောင့်ခလုတ်
| လေးထောင့်ကွက်၊ ခလုတ်၊ မှတ်ပေးထား၊ ဂျီဩမေတြီ
⚪ 26AA *white circle
| circle | geometric *အဖြူရောင် စက်ဝိုင်း
| စက်ဝိုင်း၊ ဂျီဩမေတြီ
⚫ 26AB *black circle
| circle | geometric *အနက်ရောင် စက်ဝိုင်း
🔴 1F534 *red circle
| circle | geometric | red *အနီရောင် စက်ဝိုင်း
| စက်ဝိုင်း၊ ဂျီဩမေတြီ၊ နီ
🔵 1F535 *blue circle
| blue | circle | geometric *အပြာရောင်စက်ဝိုင်း
| စက်ဝိုင်း | အပြာရောင်
🏁 1F3C1 *chequered flag
| checkered | chequered | racing
en_CA: *checkered flag *အကွက်ဆင် အလံ
| အကွက်ဆင်၊ ပြိုင်ပွဲ၊ အလံ
🚩 1F6A9 *triangular flag
| post *တြိဂံပုံ အလံ
🎌 1F38C *crossed flags
| Japanese | celebration | cross | crossed *ကြက်ခြေခတ် အလံများ
| ကြက်ခြေခတ်၊ ကားတိုင်၊ ပွဲတော်၊ ဂျပန်
🏴 1F3F4 *black flag
| waving *ဝှေ့ယမ်းနေသည့် အလံမည်း
🏳 1F3F3 *white flag
| waving *ဝှေ့ယမ်းနေသည့် အလံဖြူ
🏳‍🌈 1F3F3 200D 1F308 *rainbow flag
en_001: *rainbow flag
| pride | rainbow *သက်တံရောင် အလံ
| သက်တန့် | သက်တန့်ရောင်အလံ | အလံ
🇪🇺 1F1EA 1F1FA *European Union
| flag *ဥရောပသမဂ္ဂ